ဖြည့်ဆည်းပေးသူ – My Blog
ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်… ရုံးပိတ်သော်လည်း ဘယ်မှ မသွားချင်သဖြင့် အိပ်ရာထဲတွင် ဇိမ်နဲ့ နှပ်နေရင်း ဖေ့စ်ဘုတ် ဖွင့်ကာ တောင်တောင်အီအီ လျှောက် မွှေနေလိုက်သည်။ New Feed တွင် တက်လာသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့်… ပူတူး.. သူမအကောင့်က ကျွန်တော့် Friend ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ ဘယ်သူမှန်း မသိခဲ့။ ပုံလေးတစ်ပုံ တက်လာတော့မှ သူမပုံမှန်း သိလိုက်ရသည်။ . လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က… ကျွန်တော် သူမ အမေနှင့် အတော်ရင်းနှီးသည်။ ဒီကောင်မလေးမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေ မရှိတော့။ သူမအမေနဲ့သာ နေရသည်။ သူမအမေက မြို့ထဲမှာ ဈေးရောင်းသည်။ ကျွန်တော်က အဲဒီအချိန်တုန်းက အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်။ သူမကတော့ ၁၆ နှစ် မပြည့်တပြည့်လောက်သာ ရှိဦးမည်။ သူမက အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုးတန်းကျောင်းသူလေး။ သူမနာမည်အရင်းက နှင်းစက်မေ.. ကျွန်တော်က အလုပ်ပိတ်ရက်နှင့် နေ့တိုင်းညနေပိုင်းများတွင် သူမတို့ ဆိုင်ကို ရောက်သွားလေ့ ရှိသည်။ သူမတို့ဆိုင်ကို တစ်ခါတရံ ကူရောင်းပေးသည်။ တစ်ခါတရံ ဈေးမှ ပစ္စည်းပစ္စယ သွားဝယ်ဖို့ကိုလည်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် သွားပေးရသည်။ သူမအမေက ကျွန်တော့်ကို သားတစ်ယောက်သဖွယ် ချစ်သည်။ ကျွန်တော်ကလည်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ မရှိတော့ သူတို့သားအမိကိုသာ ကိုယ့်မိသားစုသဖွယ် ပေါင်းသည်။ နှင်းစက်မေက သူများမိန်းကလေးတွေကို ပဲ မများတတ်။ ကလေးလိုသာ နေသည်။ ကျောင်းတက်လျင်သာ မဖြစ်မနေ ထဘီဝတ်ရသော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်လျင် စကတ်၊ ဘောင်းဘီတို၊ အင်္ကျီချိုင်းပြတ်နှင့်သာ နေသည်။ ကျွန်တော် သူတို့ဆိုင်အတွက် ဈေးဝယ်သွားလျင် ဆိုင်ကယ်နောက်က အမြဲ လိုက်လာတတ်သည်။ သူမကို ကျွန်တော် ညီမလေးသဖွယ် သံယောဇဉ် ရှိခဲ့သည်။ သူမအမေ ကလည်း ဒါ့ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် ဘယ်သွားသွား သူမ လိုက်ချင်သည် ဆိုလျင် စိတ်ချ လက်ချ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို ကိုလေး ဟု ခေါ်ပြီး ကျွန်တော်ကလည်း သူမကို ချစ်စနိုးနှင့် ပူတူးဟုသာ ခေါ်သည်။ တစ်ခါတရံလည်း ညီမလေး ဟု ခေါ်သည်။
မောင်နှမသံယောဇဉ်ထက် ပိုလာစေသည့် နေ့တစ်နေ့ကို ကြုံလာရသော အခါတွင်ကား… သူမတို့ ကိုးတန်းဖြေပြီးလို့ ကျောင်းပိတ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြသည်။ သူမက အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့အမေကို ပျော်ပွဲစားလိုက်ဖို့ ပူဆာသည်။ သူ့အမေက သူမကို စိတ်မချ။ နေ့ချင်းပြန် ခရီးသွားရမှာ ဖြစ်သော်လည်း ပင်လယ်ကမ်းခြေ သို့ သွားရမည်ဖြစ်သဖြင့် ရေနစ်မှာ၊ ဘေးအန္တရာယ်တွေ့မှာ စိုးရိမ်သည်။ သူမက လက်လျှော့သေး။ ကျွန်တော့်ဆီ လာပြီး အပူကပ်ပြန်သည်။ သူမ နောက်နေ့ ပျော်ပွဲစား လိုက်ချင်၍ သူမတစ်ယောက်တည်း သွားလျင် အမေလုပ်သူက မထည့်သဖြင့် အဖော်လိုက်ခဲ့ ပေးရန်ပင်။ ကျွန်တော်ကလည်း ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်နေသဖြင့် သူ့အမေကို သွားပြောပေးဖို့ ကတိ ပြုလိုက်သည်။ “အန်တီ.. ပူတူးက မနက်ဖြန် ပျော်ပွဲစားသွားချင်လို့တဲ့… အဲဒါ ကျွန်တော့်ကို လာအဖော်စပ် နေလို့” “အော်… ဟုတ်တယ်သားရေ… ညနေကတည်းက မင်းညီမက ပူဆာနေတာ။ တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ စိတ်မချလို့ မလွှတ်ဘူး ပြောတာကို မင်းကို ထပ်လာ အပူကပ်နေတယ်ထင်တယ်” “ဟုတ်တယ် အန်တီရေ… သားက အားပါတယ်… မနက်ဖြန် ရုံးပိတ်တယ်လေ… အန်တီ ခွင့်ပြု မယ်ဆိုရင်တော့ အဖော်လိုက်သွားပေးမယ်လေ.. နေ့ချင်းပြန်ပဲ… ည ရှစ်နာရီ ကိုးနာရီလောက်ဆို ပြန်ရောက်မှာပဲ” “အေးလေ… သားပါမယ်ဆိုရင်တော့ အန်တီက စိတ်ချပါတယ်… မင်းညီမက ကလေးလိုပဲ ကွယ်… သေချာလေး ဂရုစိုက် ခေါ်သွားပါ… ရေနက်တွေထဲ မဆင်းစေနဲ့နော်” “ဟုတ်ကဲ့အန်တီ စိတ်ချပါ… ကျွန်တော်ပါတာပဲ… ဘာမှ မပူနဲ့” “အေးပါသားရယ်… အဲဒါဆိုလည်း မနက်ဖြန်ကျ မောင်နှမနှစ်ယောက် သွားကြပေါ့” ကျွန်တော် သူမဘက် လှည့်ပြီး ပြုံးပြလိုက်တော့ သူမက ချစ်စဖွယ် သွားတက်ကလေး ပေါ်အောင် ပြန်ပြုံးပြသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက် သူမတို့အိမ်မှာ သွားခေါ်ရသည်။ သူမက စပန့်သား ဘောင်းဘီ ပွပွ အဖြူ ရောင်လေးနှင့် တီရှပ်အဖြူရောင်လေးကို ဝတ်ထားသည်။ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ပျော်မြူး တက်ကြွနေသည်။ သူမသူငယ်ချင်းတွေက ရှစ်နာရီထိုးမှာ ထွက်လာမှာ ဖြစ်သဖြင့် မှတ်တိုင်နားကနေ ခုနစ်နာရီလေးဆယ်လောက် ထွက်စောင့်နေလိုက်ကြသည်။ ကားရောက်လာတော့ လူက အတော်များသည်။ အများစုက ကိုယ်စီကိုယ်စီ အတွဲလေးတွေနဲ့။ ပူတူးကတော့ အတွဲလည်း ရှိမဲ့ပုံ မပေါ်။ ကားပေါ်ရောက်တော့… “ဟဲ့… နှင်းစက်မေ.. ဘယ်သူကြီး ခေါ်လာတာတုန်း” “အာ… နင်တို့က ကိုယ်စီကိုယ်စီ အတွဲနဲ့၊ ငါ့မှာက ဘယ်မှာ အတွဲရှိတုန်း၊ ပြီးတော့ ငါ့အမေက ငါ့တစ်ယောက်တည်းဆို မလွှတ်ဘူး၊ ဒါ ငါ့အစ်ကိုလေး… အဖော်ထည့်ပေးလိုက်တာ” “သိပါဘူးဟယ်… နင် ဘဲကြီးကြီးနဲ့များ ရသွားတာလားလို့ ခ်ခ်…” “ကောင်မစုတ်တွေနော်.. နင်တို့… ဟွန်း” သူမ ရန်ထောင်ပုံလေးက နှုတ်ခမ်းကို စူ ထော်ကာ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းသည်။ ကမ်းခြေသို့ ရောက်တော့ ကားကို နေရိပ်ရသည့်နေရာ တစ်နေရာတွင် ထိုးကာ အလျှိုလျှို ဆင်းကုန်ကြသည်။
ပျော်ပွဲစား ထွက်လာကြသည် ဆိုသော်လည်း ဟိုရောက်တော့ အတွဲ ကိုယ်စီနှင့် ဖြစ်၍ တစ်ယောက် တစ်နေရာစီ ကွဲကုန်ကြကာ အလျှိုလျှို ပျောက်ကုန်ကြပြီး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သာ ငေါင်းစင်းစင်းနှင့် ဘယ်သွားလို့ သွားရမယ်မှန်း မသိ၍ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေသည်။ နေပူလာပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော် ဝတ်လာသော ဂျာကင်ကို ကားထဲတွင် ချန်ခဲ့လိုက်သည်။ ဗိုက်ဆာသည်နှင့် ပင်လယ်စာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဝင်လိုက်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင်လည်း ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သဖြင့် ရှုပ်ရှတ်ခတ်နေသည်။ ဂဏန်းကင်နှင့် ပုဇွန် တင်ပူရာကြော် မှာလိုက်သည်။ ကျွန်တော်က ဂဏန်းနှင့် ပုဇွန်ကို ဘီယာနှင့် မြည်းဖို့ အာသီသ ရှိသော်လည်း သူမ ရှိနေသဖြင့် အအေး တစ်ဘူးစီသာ မှာလိုက်သည်။ သူမက ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံအချို့ထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ကို ပေးသည်။ “ကိုလေး… ညီမလေး စုထားတာ… လျှောက်လည်ရင်သုံးဖို့” “အောင်မလေး… နေပါပူတူးရယ်… ကိုလေး ကျွေးပါ့မယ်… ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်… ဈေးသွားရင်လည်း ကိုလေးပဲ ကျွေးတာမို့လား။ ခုလည်း ကိုလေးကျွေးတာပဲ စားပါ။ ပူတူး တစ်ယောက်စားလို့ မွဲမသွားပါဘူး” သူမက စပ်ဖြီးဖြီးနှင့် သူမ ပိုက်ဆံ ပြန်သိမ်းလိုက်သည်။ “ကိုလေး” “ဟေ..ပူတူး… ဘာလဲ” “ညီမလေးတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရည်းစားတွေ ထားနေကြတာ အကုန်လုံးပဲ။ ကိုလေးက ရည်းစား မရှိဘူးလား” “ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ပူတူးရယ်… ရည်းစားရှိမှတော့ နင့်လိုက်ပို့မလား.. ငါ့ရည်းစား ငါလိုက်ပို့မှာပေါ့” “ဟမ့်… ကိုလေးကလည်း” “နေပါအုံး… နင်က ရည်းစား မရှိဘူးပေါ့” “ညီမလေးအတွက် ရည်းစားမှ မလိုတာ၊ ညီမလေး ချစ်စရာ အမေရှိတယ်၊ ကိုလေးလည်း ရှိတယ်လေ” ကျွန်တော့်ရင်ထဲ နွေးကနဲတော့ ဖြစ်သွားသည်။ ဖတဆိုးလေး သူမအပေါ်မှာ သံယောဇဉ် ပိုသွားမိပြန်သည်။ ဒီပုံစံနဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း ရည်းစားထားဖြစ်မဲ့ပုံ မပေါ်တော့ပါလေ။ စားသောက်ပြီးစီးတော့ ကမ်းခြေဘက်သို့ ထွက်ခဲ့သည်။ ကမ်းခြေမှာ ကားကျွတ်ကွင်းကြီးတွေ လေထိုးပြီး ငှားနေတာ တွေ့တော့.. “ကိုလေး… ပူတူး ဘောစီးချင်တယ်” “ဟာ.. မသာမလေးရဲ့.. ဘောကွင်းစီးချင်တယ်လုပ်ပါ” “ဟင်… ဘာဖြစ်လို့လဲ.. တူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလား” “အာ….. ထားတော့” “မတူဘူးလား ပြော” “မတူဘူး… ဘောကွင်းက အကွင်းဟ။ ဘောက အလုံးဟ ရှင်းပလား” “အော် ဂလိုလား အင်း ဘောကွင်းစီးချင်တယ်” ကျွန်တော် ဘောကွင်း နှစ်ကွင်း ငှားဖို့ ဈေးမေးလိုက်သည်။ “ဟာ… ကိုလေး… တစ်ကွင်းပဲ ငှားလေ၊ ပူတူးဘောကွင်းမျောသွားရင် ကိုလေး လိုက်ဆယ်” “အာ..အေးပါဟာ” ဘောကွင်းငှားပြီး ရလာတော့ သူမက ဘောကွင်းကို ကိုင်ကာ ကလေးတွေလို ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ နှင့် လိုက်လာသည်။ ရေထဲရောက်တော့ သူမက ဘောကွင်းပေါ်တွင် အကျအန ထိုင်ကာ ကျွန်တော့်ကို တွန်းခိုင်း သည်။ ရေနက်ပိုင်းသို့ မရောက်အောင်တော့ သတိထားရသည်။ နှစ်ယောက်စီးမည် ဆိုကာ ကျွန်တော့်ကို ဘောကွင်းပေါ် ထိုင်ခိုင်းပြီး သူမက ကျွန်တော့် ပေါင်ပေါ် တက်ထိုင်သည်။ သူမဆိုင်တွင်လည်း သူမက တစ်ခါတရံ သူမအမေရှေ့မှာပင် ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ် လာထိုင်ချင် ထိုင်တတ်သည်။
ညီမလေးကဲ့သို့သာ စိတ်ထဲ ရှိသဖြင့် ဘာမှတော့ မဖြစ်။ ရေထဲတွင် ဆော့တာ ဝ၍ ပြန်တက်လာသည့်အခါတွင်တော့… သူမဝတ်ထားသည့် တီရှပ်နှင့် စပန့်သား ဘောင်းဘီ အဖြူထည်လေးက ရေစိုသဖြင့် အသားတွင် ကပ်နေကာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေရသည်။ ဒီ့ထက် ဆိုသည်က သူမဘောင်းဘီကပ်နေပုံက သူမ၏ ပေါင်နှစ်ခု ဆုံရာနေရာမှာ မည်းမည်း လေးပင် မြင်နေရသည်။ ထို့အပြင် အထဲက ခံဝတ်လာသည့် ဘရာ အနီရောင်လေး ကလည်း ထင်းထင်းလေး ပေါ်နေသည်။ ဒီကောင်မလေးနဲ့တော့ ခက်ပြီ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်မလာပဲ။ ကျွန်တော် စိတ်တွေ တဒင်္ဂ ရိုင်းသွားမိသည်။ ညီမလေးသဖွယ်ချစ်သည့် သံယောဇဉ်ထက် အတော်ပိုသွားကာ ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူ၍ အာခေါင်များ ခြောက်ကပ်လာသည်။ မရိုးသား တော့ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလိုက်ရပြီး သူမအပေါ်မှ အကြည့်များ ရှောင်လွှဲရန် ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ “ကိုလေး… ဘာကြည့်နေတာတုန်း” “ဘာကြည့်ရမှာလဲ… နင့်ကိုယ်နင်လည်း.. ငုံ့ကြည့်အုံး ပူတူးရယ်” “အယ်… ကိုလေး… ဘာဖြစ်လို့တုန်း” သူမကိုယ်သူမ ငုံ့ကြည့်ပြီး အလန့်တကြားနှင့် ပြောသည်။ “ရေတွေစိုပြီး ပူတူးတစ်ကိုယ်လုံး ကပ်နေတာ အကုန်မြင်နေရတယ်ဟ” “အမ်… ကိုလေး… ဘယ်လို လုပ်ကြမတုန်း” “ဘယ်လိုမှ မလုပ်နဲ့ အဲဒီ ကားတာယာကွင်းကို အရှေ့ကနေ ကွယ်ပြီး ကိုင်ခဲ့၊ အင်္ကျီ ဝယ်ရတော့မှာပေါ့” သူမက ကားကျွတ်ကွင်းကြီးကို ကွယ်ကာ အနောက်မှ ကုပ်ချောင်းချောင်း လိုက်လာသည်။ “ဟာ… ဒီကောင်မလေး… အောက်ပိုင်းကိုကွယ်ဟ… ဘောင်းဘီလည်း မဝတ်လာဘူး” ကျွန်တော် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ် ဆူရသည်။ “အာ… ကိုလေးကလည်း… ဝတ်လာပါတယ်… အဲ… အဟီး… ဟုတ်တယ်… အထဲက ခံဝတ်ဖို့ မေ့လာတာ” ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောတော့။ အနားမှာ ရှိသည့် အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဝင်ကာ သူမနှင့် တော်လောက်သည့် အနီရောင် စကတ်ကလေးနှင့် အင်္ကျီ ဝမ်းဆက်ကလေးကို ဝယ်ပေးလိုက် သည်။ အဝတ်လဲသည့် အခန်းကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်။ “ကိုလေး လိုက်ခဲ့အုံးလေ… ပူတူးတစ်ယောက်တည်း” “ဟာ…ငနာမလေး… နင်အဝတ်လဲတာ ငါက ဘာလိုက်လုပ်ရမှာလဲ” “ဟာ… လိုက်ခဲ့ပါ… အထဲလိုက်မဝင်နဲ့လေ…အပြင်ကစောင့်ပေါ့” “အေးပါဟာ… လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်” အဖြစ်သဘောမျိုး လုပ်ထားသည့် အဝတ်လဲခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ အနောက်ဖက်မှာ ပင်လယ်ကြီးသာ ရှိပြီး ဘာမှ မရှိ။ အထည်ဆိုင်တွင် လူရှင်းနေ၍သာ တော်တော့သည်။ နေက ညနေစောင်းသဖြင့် အနောက်ဘက်မှ ထိုးနေသည်။ အဝတ်လဲခန်းကို ကာရံထားသည် ကလည်း ပလတ်စတစ်စ အပါးလေး။ ပြီးတော့ လည်ပင်းလောက်အထိသာ လုပ်ထားသဖြင့် ခေါင်းပိုင်းကို မြင်နေရသည်။ သူမက အခန်းထဲကနေ လှမ်းပြောင်ပြနေသဖြင့် လက်သီး ထောင်ပြလိုက်ရသည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် အဝတ်လဲနေသည်ကို မျက်နှာလွှဲထားသင့်သော်လည်း ကျွန်တော် မလွှဲဖြစ်ခဲ့။ နေရောင်ဖြင့် ကျနေသော သူမ အရိပ်ကို ပလတ်စတစ်စပေါ်မှာ မြင်နေရသည်။ သူမက ကျွန်တော့်ကို ကျောခိုင်းပြီး လှည့်ကာ အဝတ်လဲသည်။ သူမ ဝတ်ဆင်ထားသော ရေစို အဝတ် များကို ချွတ်ကာ တန်းပေါ်သို့ တင်သည်။ သူမ၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အရိပ်ကို မြင်နေရသည်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲ ‌ဗလောင်ဆူနေသည်။ ကျွန်တော် ဝယ်ပေးသော အဝတ်များကို ဝတ်ကာ ထွက်လာသည်။ အနီရောင် ဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့ သူမပုံစံလေးက အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်း နေသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် ချစ်ပုံက မောင်ချစ် နှမချစ် မဟုတ်သည်တော့ သေချာနေပြီ။ သို့နှင့် ညနေ ခြောက်နာရီထိုးလောက်ကျတော့ သူမသူငယ်ချင်းများ ပြန်ရောက်လာကြသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် အပီအပြင် ကဲလာကြသောကြောင့် အသွားလောက် အာကျယ်အာကျယ် မလုပ်နိုင်တော့။ ကိုယ့်အတွဲနှင့်ကိုယ်သာ တိတ်တဆိတ် ပြန်လာကြသည်။
သူမတို့၏ တစ်နှစ်တစ်ခါ ရသော ပျော်ရွှင်မှုက နောက် သုံးနာရီအတွင်း ကုန်တော့မည်လေ။ ညဘက်ရောက်လာတော့ အနည်းငယ် အေးလာသည်။ “ကိုလေး… ချမ်းတယ်” ကျွန်တော် ကားပေါ်မှာထားခဲ့သော ဂျာကင်ကို သူမအား တစ်ခြမ်း လွှမ်းပေးလိုက်သည်။ လမ်းတစ်ဝက်လောက် ရောက်တော့… “ဒိုင်း …..” ကျယ်လောင်သော အသံနှင့်အတူ သိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ “ကားဘီးပေါက်သွားပြီဟေ့… အောက်ဆင်းပြီး စောင့်ကြအုံး… ဘီးအပို ပါမလာဘူး… ဟိုက လှမ်းမှာရအုံးမှာ” သူမ ကျွန်တော့်ကို မှီပြီး အိပ်ပျော်နေရာမှ လန့်နိုးလာသည်။ “ကိုလေး… ဘာဖြစ်တာလဲ” “ကားဘီးပေါက်သွားတာ..” “အဲဒါဆို ကြာအုံးမှာပေါ့” “အင်း… ကြာလောက်တယ်… ကားဘီးပို ပါမလာဘူး… မြို့က လှမ်းမှာထားတုန်း” “အင်း… အမေတော့ စိတ်ပူတော့မှာပဲနော်” “ကိုလေး ဖုန်းဆက်ထားမယ်လေ…” “တူ…. တူ….. ဟဲလို အန်တီ သားပါ” “အေး သား ပြော” “အန်တီရေ… ဒီမှာ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ဘီးပေါက်သွားလို့ အန်တီစိတ်ပူနေမှာစိုးလို့” “အော်… ဖြစ်ရတယ်ကွယ်… အေးပေါ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ… မင်းညီမလေး ဂရုစိုက်နော်… လမ်းပေါ် လျှောက်သွားမနေစေနဲ့အုံး ညမှောင်တော့ မြွေပါးကင်းပါး သတိလည်း ထားအုံး” “ဟုတ်ကဲ့..အန်တီ စိတ်ချပါ… အိမ်ရောက်အောင် လာပို့ပါ့မယ်” “အေးပါ အေးပါ… ဒါဆို အန်တီ စောင့်နေလိုက်မယ်နော်…” ဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက်… “ကဲ ပူတူး… အမေ့ဆီတော့ ဆက်ပြီးသွားပြီ” ထိုအချိန်ဝယ် သူ့အတွဲလိုက် အတွဲလိုက် ကားနဲ့ ဝေးရာလမ်းဘေးမှာ အခင်းလေးတွေ ခင်းပြီး ထိုင်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကားနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာပင် အခင်းလေးခင်းပြီး ထိုင်နေကြသည်။ ဂျာကင်ကို သူမကိုယ်ပေါ်သို့ တစ်ထည်လုံး ခြုံပေးလိုက်သည်။ “ကိုလေး… အေးနေမှာပေါ့… လာပါ… ညီမလေးနဲ့ အတူတူခြုံမယ်” “ခြုံပါ… ကိုလေး မအေးပါဘူး” “အာ.. အေးတာပေါ့.. ညီမလေးတောင် တော်တော် ချမ်းနေပြီ” သူမက ဂျာကင်ကို ကျွန်တော့်ပေါ်သို့ လာခြုံပေးသည်။ သူမ၏ ကိုယ်ငွေ့လေးက နွေးနွေးနေသည်။ သူမအပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံး ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ရောက်နေသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် စိတ်ထိန်းနေရသည်။ မထိန်းလို့ မဖြစ်။ သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ရက်။ ပူတူးကလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် တကယ့် အစ်ကိုရင်းတစ်ယောက် လိုသာ တွယ်တာနေပုံရသည်။ လက်က ယောင်မှားကာ သူမ၏ ရင်အစုံပေါ်သို့ ရောက်တော့ မည့်ဆဲဆဲ ပြန်ရုပ်လိုက်ကာ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်သာ ဆိတ်လိုက်ရသည်။ ထိုစဉ် အိပ်နေရာမှ သူမ လူးလွန့်လာကာ… “ကိုလေး… ပူတူး ရှူးပေါက်ချင်တယ်” “ဟိုဘက်နားမှာ သွားပေါက်လေ.. ဒီနားမှာ ကားသမားတွေ ရှိတယ်” “ကိုလေး လိုက်ခဲ့အုံး… မှောင်မဲနေတာပဲ… ပူတူးကြောက်လို့။ လရောင်နှင့် ဝိုးတဝါး မြင်နေရသော ကားလမ်းမကြီးနံဘေးမှ ခွဲထွက်သွားသည့် တာဘောင်မှ အနည်းငယ် ဝေးသည့် နေရာသို့ ဝင်သွားလိုက်သည်။ “ရပြီ… ဒီနားမှာ ပေါက်တော့” သူမက ဘာမပြောညာမပြောနှင့် ကျွန်တော့်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ အစက မျက်နှာလွှဲလိုက်မလို့ ကြိုးစားသေးသော်လည်း အကြည့်က သူမ အောက်ပိုင်းသို့သာ ရောက်သွားသည်။ တရှဲရှဲ အသံနှင့်အတူ လရောင်အောက်မှာ သူမအောက်က ငွေရောင် အရည်လေးများကိုလည်း ဝိုးတဝါး မြင်နေရသည်။ လဆုတ်ရက် ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော် ကြည့်နေသည်ကို သူမ သတိထား မိပုံ မပေါ်။
သူမ ကိစ္စဝိစ္စပြီး၍ ထထွက်လာခဲ့ပြီး လမ်းပေါ် ပြန်ရောက်စဉ်မှာပင် ကားတစ်စီးရောက်လာပြီး ကားဘီးကို လဲလှယ်တပ်ဆင်သည်။ ထိုည အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ ည ၁၂ နာရီပင် ထိုးလုပြီ။ သူမအမေက မအိပ်သေးဘဲ စောင့်နေပုံ ရသည်။ “သမီးရယ်… မနေ့ကတည်းက အမေပြောနေတာကို နားမထောင်ဘဲ.. အခုတော့ နင့်ကိုလေး အားနာစရာ” “အန်တီကလည်း ရပါတယ်… ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. သူ လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ” “ကဲ… ဒါဆို သား ဒီမှာပဲ အိပ်တော့ … မနက်မှသာ ပြန်” သူမအမေက ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ခြင်ထောင်တစ်လုံးကို သူမတို့ ခြင်ထောင်နှင့် ကပ်လျက်တွင် ထောင်ပေးသည်။ သူမတို့ အိမ်မှာက အိမ်ရှေ့ခန်း နောက်ခန်းရယ်လို့ မရှိ၊ ရှေ့က ဈေးဆိုင်က အိမ်ရှေ့ခန်း ဖြစ်ပြီး နောက်က အိမ်မှာ အခန်းကန့်ထားတာ မရှိ။ ကျွန်တော် တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်။ ပူတူးကတော့ ခြေပစ်လက်ပစ်နှင့် အိပ်မော ကျနေပြီ။ “ကိုလေး… ကိုလေး…” ငတိမက အိပ်နေရင်းနှင့်ပင် ယောင်နေသေးသည်။ ဝတ်ထားသော စကတ်က အပေါ်သို့ လန်တက်နေကာ ညမီးရောင် မှိန်မှိန်အောက်မှာ အထင်းသား မြင်နေရပြန်သည်။ အော် ဒီကလေးမနဲ့တော့လည်း ငါ့မှာ ဒုက္ခ လှလှတွေ့ရမှာပါလေ။ နောက်နေ့ မနက် မိုးလင်းတော့ ကျွန်တော် ပြန်သွားသည်။ အရင်က သူ့အပေါ်မှာ ရိုးသားခဲ့သည့်ကျွန်တော် မရိုးမသားစိတ်များ ဖြစ်နေသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ မြင်ခဲ့ရသည့်မြင်ကွင်း၊ ဘောကွင်းစီးစဉ်က အထိအတွေ့၊ ကားပေါ်မှာ ကြုံခဲ့ရသည့် အထိအတွေ့တို့က စိတ်ထဲတွင် စိုးမိုးနေခဲ့သည်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ရည်းစားစကား ပြောဖို့ ကြံစည်မိသည်။ သို့သော် မပြောရဲသေး။ မပြောရဲသေးတာထက် မပြောသင့်သေးဟု ယူဆသည်။ ဒီကောင်မလေး ကျောင်းမပြီးသေး။ ဆယ်တန်းလေးတော့ အောင်အောင် ဖြေပါစေအုံးဟု တေးထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ကသာ စိတ်ကယောက်ကယက် ဖြစ်နေသော်လည်း သူကတော့ သိပုံမပေါ်ပါ။ ကျွန်တော်နှင့် သွားမြဲ လာမြဲ စားမြဲ သောက်မြဲ။ထူးခြားလာသည်က ယခင်က ဒီကောင်မလေး ဘယ်လိုနေနေ ဘယ်လိုထိုင်ထိုင် ကိစ္စမရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်တော့ မျက်စိထဲမှာ အလိုလို မြင်လာသည်။ ယခင်က ပူတူး မြေကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေတာ တင်ပါးနှစ်ခုပေါ်နေသည်ကို မကြာခဏမြင်ဖူးသော်လည်း ကလေးဟုသာ သဘောထားကာ ဘာမှ မပြောဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းကျတော့ အမြင် မတော်သည်ကို ဆူမိသည်။ ပူတူးက အရမ်း ကလေးဆန်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းလည်း သိပုံ မရ။ အိမ်နေရင်း ဘော်လီမပါဘဲ တီရှပ်ဝတ်ချင်ဝတ်သည်။ ဘောင်းဘီအကြပ်ဝတ်ပြီး ဒူးထောင်ပေါင်ကား ထိုင်ချင်ထိုင်သည်။ ကျွန်တော် ဆူတော့.. “ကိုလေး… သမီးဆယ်တန်းရောက်မှ အတော်ဆူတယ်နော်.. ဟိုဟာမဝတ်နဲ့.. ဒီလို မနေနဲ့.. နဲ့” “ဟ… ဆူမှာပေါ့… နင့်ကိုယ်နင် ကလေးပေါက်စ မှတ်နေလို့လား… စိတ်ကကလေးပေမဲ့ လူက အပျိုပေါက် ဖြစ်နေပြီ.. အမြင်မတော်တာတွေ့ ပြောရမှာပေါ့.. ပြီးတော့ ငါက..” “ဘာဖြစ်လဲ.. ငါက.. ကိုလေးကလည်း စကားကို ဆုံးအောင် မပြောဘူး” “နင်ငယ်သေးတယ် ပြောလို့မရသေးဘူး၊ ဆယ်တန်းဖြေပြီးမှ ပြောပြမယ်..” ပါးစပ်ကို မနည်း ဘရိတ်အုပ်ရသည်။ နောက်ပိုင်း သူမ နည်းနည်း ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် လုပ်တတ်လာသည်။ သူမ ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်သည့်နေ့… သူမ အိမ်ကိုရောက်တော့ သူ့အမေနဲ့ တွေ့သည်။
“အန်တီ.. ပူတူးရော.. အောင်စာရင်းသွားကြည့်မလို့ လာခေါ်တာ” “သားညီမက.. မိုးမလင်းခင်ကတည်းက ဖြီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီး ထွက်သွားလေရဲ့” နှုတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းရှေ့သို့ အပြေးချီတက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့… ပူတူးကိုလည်း မတွေ့။ ဒါနဲ့ အောင်မအောင် သွားကြည့်တော့ အောင်သည်။ ဂုဏ်ထူးတော့ မပါ။ ဒီကောင်မလေး စာကျက်ပုံနဲ့ကလည်း ဂုဏ်ထူး ထွက်စရာ တော့ မရှိပါ။ သူမကို လှည့်ပတ်ရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့သဖြင့် သူမတို့အိမ်သို့ ပြန်သွားလိုက်သည်။ “အန်တီ… ပူတူး အောင်တယ်… ဂုဏ်ထူးတော့ မပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ကျောင်းမှာ မတွေ့ခဲ့ဘူး… ဘယ်သွားလဲ မသိဘူး..” “သိပါဘူးကွယ်.. မင်းညီမကလည်း… အရင်တော့ အဲလို မသွားတတ်ပါဘူး” “အင်းပါ… ဒီမှာပဲ စောင့်လိုက်မယ်အန်တီ.. သူ့ကို ဆုချချင်လို့” “အေးပါသားရယ်… အထဲမှာ ထမင်းရှိတယ် ထမင်းသွားစားအုံး” တစ်နေကုန် ထိုင်စောင့်သည်။ ပြန်မလာ။ မိုးချုပ်တော့ သူမအမေရော ကျွန်တော်ပါ စိတ်ပူစ ပြုလာပါပြီ။ နှစ်ယောက်စလုံး ညမိုးချုပ်မှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် လူပျောက် ရှာပုံတော် ဖွင့်ရသည်။ ဆိုင်ကယ်သာ ဆီ သုံးပုလင်း ကုန်သွားသည်။ သွားတတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း အကုန်ရောက်ပြီးပြီ။ ဧကန္တ ကျွန်တော်ထင်တာ မှန်ခဲ့ရင်… မှန်လည်း မမှန်စေချင်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ဘာမှ အန္တရာယ် မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းနေရတော့သည်။ သူမအမေကလည်း တငိုငို တရယ်ရယ် ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော် အဲဒီညတော့ သူမတို့ အိမ်မှာပဲ အားပေးရင်း အိပ်လိုက်ရသည်။ နောက်တစ်နေ့ မနက်လည်း ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့် မြို့ကို ပတ်ပြီး ထပ်ရှာသည်။ တစ်နေသာ ကုန်သွားသည်။ ရှာမတွေ့။ ဒီညနေမှ မတွေ့လျင် ရဲစခန်းကို လူပျောက်တိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားသည်။ ညနေ ငါးနာရီခွဲလောက်ကျတော့ ကျွန်တော် စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ပြန်လာခဲ့ရသည်။ သူမ အမေကို ဘယ်လို ပြောရမည် မသိ။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ ခုနစ်စီးလောက် ရပ်ထားတာ တွေ့လိုက်သည်။ ကျွန်တော်စိတ်ပူသွားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ မသိ။ အိမ်ထဲရောက်တော့ အိပ်ခန်းရော ဧည့်ခန်းရော ဒီတစ်ခန်းသာ ရှိသည့် သူမတို့ အိမ်ထဲတွင် ရပ်ကွက်လူကြီးတွေရောက်နေသည်။ ပူတူးက မျက်နှာကို ငုံ့ထားရာမှ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက် မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ပြန်ငုံ့သွားသည်။ ထိုင်ပြီး မေးစမ်းကြည့်တော့မှ အကြောင်းစုံ သိရသည်။ ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်ကလေးများ ပျက်သုဉ်းသွားပေပြီ။ အောင်စာရင်းထွက်လျင် ပူတူးကို ဖွင့်ပြောတော့မည်၊ သူမ တက္ကသိုလ် တက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးမည်၊ ကျောင်းပြီးမှပဲ ယူမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်လေ။ ပူတူး အောင်စာရင်း ထွက်ပြီးပြီးချင်းပင် သူနဲ့ တစ်တန်းတည်း သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ကောင်လေးနှင့် ခိုးရာလိုက်ပြေးသည်။ တစ်ညအိပ်ပြီးတော့ ပြန်လာ အပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်လေးက ငါးကျည်းခြောက်ရုပ် မည်းမည်းသည်းသည်း ဘယ်လို ကြိုက်သွားသလဲတော့ မသိ။
ရင်ထဲမှာ ဆို့တက်လာကာ ဝမ်းနည်းလာသဖြင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားကာ ကျွန်တော့် အဆောင်သို့သာ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အရက်တစ်လုံးဝယ်ကာ တစ်ယောက်တည်းထိုင်သောက်နေလိုက်သည်။ ဘယ်နှခွက်တောင် သောက်မိမှန်းပင် မသိတော့။ နောက်တစ်နေ့ မနက်ရောက်တော့ ခေါင်းကိုက်သဖြင့် မထနိုင်။ တံခါးခေါက်သံကြားတော့ အားယူပြီး ထရသည်။ “ဟင် ကိုလေး အရက်တွေ သောက်ထားတာလား” “ဟာ… ပူတူး.. နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ” “အစ်ကိုလေးကို လာတောင်းပန်တာပါ… ပူတူး မှားသွားတယ် အစ်ကိုလေးရယ်” “အေး… မှား… မှားစမ်း… နင်မှားတာ ပြင်မရတဲ့ အမှား ပူတူးရယ်.. နင် ဒီအသက်ဒီအရွယ်နဲ့ ဟိုကောင်လေးကလည်း အလုပ်မရှိသေးဘူး နင်တို့ ဘယ်လို စားကြမလဲ” “ဟင့်.. ကိုလေးရယ်.. မနေ့က ဧည့်သည်တွေ ပြန်သွားတော့ အမေ ပူတူးကို ဆူတယ်” “အေး… တော်သေးတာပေါ့.. ဆူရုံပဲ ဆူလို့…” “ဒါနဲ့… ကိုလေးက အရင် အရက်တွေ ဘာတွေ မသောက်ဘဲ အခုမှ ဘာလို့ သောက်ရတာလဲ” “ငါ မပြောချင်ဘူး ပူတူးရာ… ပြောလည်း မပြောသင့်တော့ဘူး… မမေးနဲ့တော့” “ကိုလေးရယ်.. ပူတူးကို ချစ်ရင် ပြောပြပါ” “အေးဟာ… ငါပြောလို့ရတာ ပြောပြမယ်.. ငါ့မှာ မိဘတွေလည်း မရှိတော့ဘူး… ညီအစ်ကို မောင်နှမလည်း မရှိတော့ဘူး… ဒီမှာ ငါခင်တွယ်စရာ ဆိုလို့ နင် နဲ့ နင့်အမေပဲ ရှိတာ.. အခု ပူတူး နင်… ယောက်ျားရသွားပြီ.. ငါ့ဘဝမှာ ခင်တွယ်စရာ ဘယ်သူများ ရှိသေးလဲ…” ညက အမူးရှိန်ကလည်း မပြေသေးသဖြင့် အတော်လေး တင်းတင်းမာမာ ပြောမိလိုက်သည်။ ပူတူးလည်း ငိုယိုပြီး ပြန်သွားရှာသည်။ ဘယ်လောက်ပဲ တင်းခံထားသော်လည်း သူမအမေက မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စ ဦးဆောင် စီမံပေး ဖို့ တောင်းဆိုပြန်တော့ ကျွန်တော် အမှတ်သည်းခြေမရှိ၊ သွားလုပ်ပေးမိပြန်သည်။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်သာ ချွန်း အုပ်နေရတော့သည်။ ဒီလိုအချိန်ကျမှ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မထားသင့်တော့။ ဒု သ န သော ကို စိတ်နှင့်လည်း မကျူးလွန်ချင်တော့။ နောက်ဆုံးတော့ သူမတို့ အိပ်မည့် အခန်းပါ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့မိသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး လာကန်တော့ကြသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ကျွန်တော့်ထက်တော့ ရှစ်နှစ်လောက် ငယ်ကြမည်ပဲလေ။ အစ်ကိုကြီး အဖရာ ဆိုသည့် စကား အတိုင်း ဆုတွေတော့ ပေးလိုက်သည်။ ဘာတွေ ပေးမိမှန်းပင် မသိတော့။ ချစ်စခင်စ ကြင်နာ စ ဆိုတော့လည်း တစ်ပြုံးပြုံး တပျော်ပျော်နှင့်ပေါ့လေ။ သူမတို့ အိမ်ကိုလည်း တစ်ပတ် တစ်ခါ လောက်သာ ရောက်တော့သည်။ သူမ အမေကတော့ ယခင်လိုပင် ဝင်ထွက်စေလိုသည်။ သို့သော် ကိုယ်က ဆင်ခြင်ရမည်လေ။ နောက်ထပ် သုံးလခန့်ကြာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းသို့ အပြောင်းအရွှေ့ ကျသည်။ ဝမ်းလည်း သာသလို ဝမ်းလည်း နည်းသည်။ ဝမ်းသာသည်ကတော့ ကျွန်တော် မပျော်ပိုက်နိုင် တော့သည့် အရပ်ဒေသမှာ မနေလိုတော့ပြီ။ ဝမ်းနည်းမိသည်က ဒီမြို့မှာ အလုပ်စဝင်ကတည်း က နေခဲ့သည့် သံယောဇဉ်ကြောင့်ပင်။ ပြောင်းသွားပြီး အတော်ကြာသည်အထိ ပူတူး အမေနှင့် ဖုန်း ပြောဖြစ်သည်။
သူမ အဝေးသင် ပဲ ဆက်တက်တော့ကြောင်း၊ ဟိုကောင်လေးကလည်း မလိမ္မာကြောင်း၊ လင်ဆိုးမယား ဖြစ်နေ ရကြောင်း အနိဌာရုံတွေသာ မကြာမကြာ ကြားနေရသည်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တာဝန်တွေများလာတာနှင့် တစ်လ တစ်ခါ၊ နောက်ပိုင်း လုံးဝ အဆက်အသွယ် မရှိ တော့သည်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ အမေပေးထားတာက နှင်းစက်မေ ပါ။ ကိုလေးကသာ ပူတူးလို့ ခေါ်တာ။ ကိုလေးဆိုတာက တကယ်က ဘာမှတော့ မတော်စပ်ဘူး။ ပူတူးတို့က မြို့ထဲတွင် ဆိုင်သေးသေးလေး ဖွင့်ထားတယ်လေ။ မြို့ထဲက ရုံးစာရေး ကိုချစ်ဦးမောင် က ပူတူးတို့ ဆိုင်တွင် အမြဲ အားပေးနေကျ။ ပူတူးတို့ သားအမိနှစ်ယောက်နဲ့ ကိုချစ်ဦးမောင်တို့ စ ရင်းနှီးတော့ ပူတူးက ကိုးတန်းလေ။ ပူတူးအဖေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆုံးသွားတာ။ ကိုချစ်ဦးမောင်ကလည်း မိဝေးဖဝေး ညီအစ်ကို မောင်နှမ မရှိဘူး။ မိသားစု ငတ်နေတဲ့ ကိုလေးနဲ့ အဖေငတ်နေတဲ့ ပူတူးတို့ မိသားစု ရင်းနှီးသွားတာပေါ့။ သူက အမေ့ကို အန်တီလို့ ခေါ်ပေမဲ့ နှင်းစက်မေကို ပူတူးလို့ခေါ်တယ်။ အဲဒါ သူ့ မူပိုင် နာမည်။ ဘယ်သူကမှလည်း ပူတူး ဟု မခေါ်ဘူး။ ပူတူးက ကိုချစ်ဦးမောင်ကို ကိုလေးလို့ ခေါ်တယ်။ ကိုကြီး မရှိ။ သူက အဲဒီအချိန်က ပူတူးထက် ငါးနှစ် လောက်ကြီးတော့ ကိုလေးလို့ ကိုယ့်ဘာသာကို နာမည် တပ်ပစ်လိုက်တာ။ ကိုလေးက ရိုးသားတယ်။ အိမ်လာလာပြီး ကူရောင်းပေးတယ်။ ကူမရောင်းပေးလဲ အိမ်ရောက် ရင် အိမ်မှာပဲ အချိန်ဖြုန်းတယ်။ ကြာတော့လည်း သံယောဇဉ်တွေ တွယ်လာတာပေါ့လေ။ ကိုလေးက ပူတူးကို ညီမလေးလို သဘောထားတယ်။ ကိုလေးကိုလည်း ပူတူးက အစ်ကိုကြီးလို သဘောထားတယ်။ ကိုလေး မြို့ထဲ ဈေးသွားဝယ်လျင်လည်း ပူတူး လိုက်သွားတာပဲ။ ပူတူးက ပိန်သလောက် အစား မက်တယ်။ ကိုလေး ရတဲ့ လစာ ပူတူးမုန့်စားတာနဲ့တင် တစ်ဝက်လောက် ကုန်မယ်။ သူက သုံးစရာ မရှိဘူးလို့ ပြောတာပါပဲ။ တခါတလေ အဝတ်အစားဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးတယ်။ ပထမ ပူတူး မယူချင်ဘူး။ ကိုလေးက လက်မလျှော့ဘူး၊ သူကိုယ်တိုင် မဝယ်တတ်သောကြောင့် ဝယ်ရန် ပိုက်ဆံပေးတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ညီမကို အစ်ကို က ပေးတာမျိုး ဖြစ်ကြောင်း၊ သူများတွေလို ပိုးကြေးပန်းကြေး ပေးတာမျိုး မဟုတ်ကြောင်း၊ ပူတူးတို့ သားအမိကို အမေရင်း ညီမရင်းများလို သံယောဇဉ်ရှိတာဖြစ်ကြောင်း၊ သံယောဇဉ်ကို အသိအမှတ်မပြု၊ စေတနာကို လက်မခံလို့ စိတ်မကောင်းကြောင်း၊ နောက်လည်း မလာတော့ကြောင်း၊ ဒီပိုက်ဆံတွေ ဒီမှာမှ မသုံးရင်လည်း သုံးစရာ မရှိ၍ မီးရှို့ပစ်မယ်ဆိုပြီး ဒေါနှင့်မောနှင့် ပြောပါလေရော။ အမေလည်း ရှိတယ်။ ကိုလေး မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတာတွေ့တယ်။ ကိုလေး တကယ် စိတ်ဆိုးနေမှန်းသိတော့မှ.. အမေက အဲလိုမျိုး စိတ်မထားကြောင်း၊ ပူတူးကလည်း ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက ဘယ်သူဘာပေးပေး မယူရန် မှာထားလို့ မယူရဲတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုလေးရဲ့ စေတနာနဲ့ သံယောဇဉ်ကို နားလည်ကြောင်း၊ သားတစ်ယောက် ကောက်ရသလိ ခံစားမိပါကြောင်း ဘာညာ ဖြောင်းဖျပြီး နောက်တော့ ပူတူးကို တစ်ခုခု ဝယ်ပေးချင်ရင် ပိုက်ဆံတော့ မပေးဘဲ ကိုယ်တိုင် လိုက်ဝယ်ပေးပြီး ပူတူးကြိုက်တာ ရွေးယူခိုင်းဖို့ ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ကိုလေးကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိလို့ ပြောတာဆိုပြီး ပြန်တောင်း ပန်တော့ ပြေလည်သွားတာ။ ကိုလေး ပူတူးကို ဈေးထဲ ခေါ်သွားပြီး ပူတူးလိုချင်တာ ဝယ်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ သုံးသောင်းပဲ ပါလာတယ်၊ မလောက်ရင်တော့ ဆိုင်မှာ ရွေးပြီး ချန်ခိုင်းထားပြီး ပြန်သွားယူကြမယ် ပြောတယ်။ ပူတူးကိုလေးကို သနားလိုက်တာ။ အဲဒါနဲ့ ဈေး သင့်သင့်လောက်ပဲ ယူမယ်ဆိုပြီး ဆိုင်မှာ ဝင်မေးကြတယ်။ ဂါဝန် ဆင်စွယ်ရောင်လေး တစ်ထည် တွေ့လို့ မေးကြည့်တော့ နှစ်သောင်း လို့ ပြောတာနဲ့ အဲဒါလေး လိုချင်တယ်လို့ ကိုလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ကိုလေးက ပိုက်ဆံရှင်းပြီး တခါတည်း လဲခိုင်းတယ်။ ပူတူး အဝတ်လဲခန်းထဲ ဝင်ပြီး ကိုလေးဝယ်ပေးတဲ့ ဂါဝန်လေးကို လဲလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ မှန်ထဲကို ကြည့်ပြီး သဘောတွေ ကျနေတာ အဟိ။ အပြင်ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုလေးက ပူတူးကို သေသေချာချာ ရွှန်းရွှန်းစားစားကို ကြည့်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ပူတူးသိတယ်။ ဒါ ကိုလေး ကောင်မလေး လှလှ တစ်ယောက်ကို ကြည့်သလို ကြည့်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဖေက သမီးလေးကို ချစ်စနိုးကြည့်သလိုမျိုး၊ အစ်ကိုက ညီမလေးကို ချစ်စနိုးကြည့်တာမျိုး။ ပူတူး ရင်ထဲ နွေးသွားတာပဲ။ ကိုလေးက သိပ် အများကြီး မပြောဘူး။ “ပူတူးလေး လှတယ်”တဲ့။ ကိုလေးလက်ကို ဆွဲပြီး မုန့်သွားစားကြတယ်။ ပူတူးက မုန့်ဆိုင်ရောက်လို့ကတော့ ဘာလာလာ အဝ ဆွဲတာ။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ဗိုက်ကားပြီး အိမ်ပြန်လာတာပေါ့။ အမေက ပူတူးတို့ နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီး သဘောတွေ ကျ လို့။ ကိုလေးက ပူတူးရဲ့ စကားဖော်လည်း ဟုတ်၊ အစ်ကိုလည်း ဟုတ်၊ မုန့်စားဖော်လည်းဟုတ်၊ ပြီးတော့ စာနားမလည်လို့ သွားမေးရင်လည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်း ပြတတ်သေးတော့ ဆရာလည်း ဟုတ် ပဲ။ ကိုလေးကို လေးစားတယ်။ ကိုးတန်းစာမေးပွဲဖြေတော့ ကိုလေး ညဘက် အိမ်မှာ လာနေပေးတယ်။ ပူတူးကို ကော်ဖီတိုက် လိုက်၊ လက်ဖက်သုပ်ကျွေးလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေရောပဲ။ စာတော့ ဝိုင်းကူ မကျက်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျက်စရာ မလိုအောင် စာကို ကဗျာတွေ လုပ်ပြီး ကိုလေး ရေးပေးထားတာ အေးဆေး ဖြစ်နေပြီလေ။ ပူတူး အိပ်မှ ကိုလေး အိမ်က ပြန်တယ်။ ပူတူး ကိုလေးကို ချစ်တယ်။ ချစ်တယ် ဆိုလို့ ဘာဘာညာညာ မဟုတ်ဘူးနော်။
အစ်ကိုလို ချစ်တာ။ တကယ်။ အဲဒီစိတ်တွေလည်း ပူတူး မရှိပါဘူး။ သူများတွေသာ ရည်းစားတွေ ထားနေတာ။ ပူတူးတို့ကတော့ အစားမပျက် အဆော့မပျက်ဘူးရယ်။ ရည်းစားထားရင်တော့ ကိုလေးက ဆူမလား၊ ထားတဲ့ ရည်းစားကိုပဲ လိုက် ဗျင်းမလားတော့ မသိဘူး။ တစ်ခါတော့ ပူတူးကို ရည်းစားစကားပြောလို့ အဲဒီကောင်ကို ကိုလေး ဗျင်းလိုက်တာ ရှဲကျွတ်သွားတယ်။ ကိုလေးကို ဟိုကောင်တွေက ဝိုင်းရိုက်မလို့ လုပ်တာ ကိုလေး တစ်ယောက်တည်း ပြန်တီးလိုက်တာ မှောက်ကုန်ရော။ လက်ကတော့ သွက်ချက်။ ပူတူးကသာ စိတ်ပူနေတာ။ ပူတူးတို့သားအမိရော ကိုလေးရော ရပ်ကွက်ရုံး ရောက်သွားသေးတယ်။ ကိုလေးက အချဉ်မှ မဟုတ်တာ။ မြို့နယ်ရုံးကဆိုတော့ ရပ်ကွက်လူ ကြီးက ဟိုကောင်တွေကိုပဲ ခံဝန်ထိုးခိုင်းပြီး ကိုလေးကို ထိုင်ကန်တော့ခိုင်းတယ်။ မကန်တော့ ဘဲ မနေရဲဘူးလေ။ အီစလံ ဝေသွားတာကိုး။ ကြောင်သေ ပါးရိုက်တဲ့ ရုပ်တွေနဲ့ ကန်တော့တယ်။ ကိုလေးကတော့ နောက်မလုပ်ဖို့ ဘာညာ၊ စာကြိုးစားဖို့ အဲဒါပဲ ပြောပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကျောင်းမှာတော့ နာမည်ကို ကြီးလို့ပဲ။ ဘာတဲ့ နှင်းစက်မေ ကို သွား မလိုက်နဲ့ ၊ ဘီလူး စောင့် နေတယ် ဆိုပဲ။ ပူတူးက အားကိုးရှိတော့ သွားပြန်ဖြဲတာပေါ့။ နင်တို့ ငါ့ကို အဲလိုပြောတာ ကိုလေးနဲ့ တိုင်မယ် ဆိုတော့ ဟီးဟီး ဟဲဟဲနဲ့ ပြန်လျှောချသွားတာ။ သူတို့ ကိုလေးကို ကြောက်တယ်လေ။ ပူတူးတို့ ကိုးတန်းစာမေးပွဲပြီးတော့ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ပင်လယ်ဝ ပျော်ပွဲစား ထွက်ဖို့ တိုင်ပင်ကြတယ်။ ပူတူးလည်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေ့ကို ပူဆာတာပေါ့။ အမေက မလွှတ်ဘူး။ စိတ်မချလို့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ပူတူးက ဘယ်လက်လျှော့မလဲ။ ကိုလေးကို သွားပြီး အပူ ကပ်ရတာပေါ့။ ကိုလေးက အမေ့ကို လိုက်ပြောပေးတယ်။ ကိုလေးက သူပါ လိုက်မယ်တဲ့။ ပူတူး ပျော်သွားတယ်။ မနက်ကျ အကုန်လုံးက အတွဲကိုယ်စီနဲ့ သွားကြမှာ။ ပူတူးက လိုက်ရ ရင်တောင် တစ်ယောက်တည်း လိုက်ရမှာ။ အခုတော့ အဆင်ပြေသထက်တောင် လွန်သွား သေးတယ်။ ပူတူးနားမှာကိုလေး ရှိတော့ အားရှိတာပေါ့။ ပြီး ဘယ်သူမှလည်း နှောက်ယှက်လို့ မရတော့ဘူး။ ကိုလေးပါလာရင် ဝါးတီးအတွက်ကလည်း ပူစရာ မလိုဘူး။ ကျွေးမှာ အသေအချာ။ နောက်နေ့မနက်ကျတော့ ပူတူး နွေရာသီဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ စပန့်သား ဘောင်းဘီ ဒူးဆစ်လောက်အဖြူလေးနဲ့ အင်္ကျီအဖြူ ပွပွလေးနဲ့ ထွက်လာတယ်။ ကိုလေးက အစောကြီး ရောက်နေပြီ။ အဲဒါနဲ့ လမ်းထိပ်သွား ကားစောင့်။ သူငယ်ချင်းတွေ စုငှားလာတဲ့ကား ရောက်လာတော့မှ နှစ်ယောက်သား ကားပေါ် တက်လိုက်သွားသေးတယ်။ ဟိုကောင်မတွေက စပ်စုနေသေးတယ်၊ ဘဲက အကြီးကြီးထားတယ်ပေါ့။ ပူတူးက ငါ့အစ်ကိုလေး ဟ ဆိုမှ ဖြုံသွား တာ။ သူတို့ ကြားဖူးထားတယ်လေ။
ဟိုရောက်တော့ ငနာမ တွေက အတွဲတွေ အတွဲတွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီနဲ့ သွားလိုက်ကြတာများ ပူတူးတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ ကားပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ကိုလေးနဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဝင်၊ ပင်လယ်စာ အကင်တွေ စား၊ ပြီးတော့ ကမ်းစပ်ကို ဆင်းသွားကြတယ်။ ဘောကွင်းတွေ ငှားတဲ့နေရာ တွေ့တော့ ကိုလေးကို ဘောစီးချင်တယ်လို့ ပူဆာလိုက်တာပေါ့။ ကိုလေးက ဘောကွင်းစီးချင် တယ်ပြောပါဟ တဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်စဉ်းစားတာ ဘာမှန်း စဉ်းစားမရဘူး။ ကိုလေးကို ဘာကွာလဲ မေးတော့ အကွင်းနဲ့ အလုံး ကွာတယ်တဲ့။ ရှင်းသွားတာပဲ။ဘောကွင်းငှားပြီး ရေထဲဆင်း ကိုလေးက ဘောကွင်းကို တွန်း၊ ပူတူးက အပေါ်က စီး၊ အဲလို စီးလို့ ဝတော့ ကိုလေးကို ဘောကွင်းပေါ် စီးခိုင်းပြီး သူပေါ်က တက်ထိုင် ပျော်စရာကောင်း လိုက်တာများ မပြောပါနဲ့တော့။ ရေထဲ နေရတာ ကြာပြီး ချမ်းလာတော့ ကုန်းပေါ် ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ ကမ်းစပ်နား ရောက်တော့ ကိုလေးက မျက်မှောင်ကျုပ်ကြီး ပူတူး အောက်ပိုင်းကို သေသေချာချာ ကြည့်နေတာ။ အဲဒါနဲ့ ကိုလေး ဘာကြည့်တာလဲ မေးတော့မှ လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ဟုတ်ပါ ရဲ့။ ပူတူးက ရာသီလာတဲ့အချိန်လောက်ပဲ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ ဂွမ်းထုပ်ထည့်ဝတ်တာ။ ဒီတိုင်းဆို မဝတ်ဘူး။ အိုက်လို့။ အခု ဝတ်လာတာက စပန့်သား၊ ရေစိုတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ကပ်ပြီး ပူတူးရဲ့ အောက်ကဟာကို အပြင်ကနေ မြင်နေရတာ။ အမွှေးလေးတွေက ခုနစ်တန်း လောက်ကတည်းက ပေါက်နေတာဆိုတော့ အခု တော်တော် သန်နေပြီလေ။ မည်းမည်းလေး မြင်နေရတယ်။ ခ်ခ်။ ရှက်လိုက်တာနော်။ ကိုလေးက ဘောကွင်းကို ရှေ့ကနေ ကာပြီး လျှောက်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ အမှတ်တရ ဝတ်စုံ တွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ အောက်က ပေါ်နေတာကို အောက်ကို မကာဘဲ အပေါ်ကို ကာမိလို့ အဆူခံရသေးတယ်။ တကယ်ပဲ။ ဟိုရောက်တော့မှ အဝတ်အသစ် ဝယ် ပေးတယ်။ အဝတ်လဲခန်းက အနောက်ဘက်မှာ။ ပူတူး ရေစို အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်ပြီး တန်းပေါ် တင်ထားလိုက်တယ်။ ကိုလေးကို လှမ်းပြောင်ပြလိုက်သေးတယ်။ ခေါင်းပိုင်းတော့ ကိုလေး မြင်ချင် မြင်ရမှာပေါ့။ ကိုလေးက လက်သီးထောင်ပြတယ်။ ပူတူး ဖင်တုံးလုံးလေး ဖြစ်သွားပြီ။ ကိုလေး ဝယ်ပေးတဲ့ အဝတ်အစား လဲပြီးမှာ ရေစို အဝတ်တွေကို လုံးကိုင်ပြီး ပြန် ထွက်လာတယ်။ အပြင်မှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံးထဲ ထည့်သယ်ရတာ။ မိုးချုပ်ကာနီးတော့မှ အဖွဲ့တွေ အလျှိုလျှို ပြန်ရောက်လာတာ။ တစ်နေကုန် ကဲထားရတာ ပင်ပန်းတော့ ကိုလေးကို မှီပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။ ဒိုင်းကနဲ မြည်သံကြားတော့ လန့်သွားတာပဲ။ ကားလည်း ထိုးရပ်သွားတယ်။ ကားဘီးပေါက်သွားတယ်ပြောတာပဲ။ လမ်း ခုလတ် ဘီးအပိုလည်း မပါတော့ မြို့က ပြန်မှာနေတာကြားတယ်။ ကြာဦးမှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ လမ်း ဘေးမှာပဲ ဖျာလေး ခင်းပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။
ကိုလေးက သူ့ဂျာကင်ကို ပူတူးကို တစ်ထည်လုံး ခြုံပေးတယ်။ ဪ သူလည်း ချမ်းရှာမှာ။ သနားသွားမိတယ်။ ကိုလေး ပူတူး အပေါ် အတော် အနစ်နာခံရှာတယ်နော်။ အဲဒါနဲ့ကိုလေးနဲ့ပူတူး တစ်ဝက်စီခြုံမယ်ဆိုပြီး ကို လေးကို တစ်ခြမ်း ခြုံခိုင်းလိုက်တယ်။ ကိုလေးနဲ့ အတူတူ ခြုံရတာ နွေးနေတာပဲ။ ပူတူး ရင်ထဲ တမျိုးတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ရင်ခုန်သလိုလို ဘာလိုလို။ ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်ဆုံးမရသေးတယ်။ ပူတူးရယ် ရင်ခုန်မနေနဲ့ဟ ကိုလေးက နင့်ကို ညီမလေးလို ချစ်တာ ငရဲကြီးတော့မှာပဲလို့။ အိပ်ပျော်သွားတာ ကိုလေးရင်ခွင်ထဲမှာ။ နိုးလာတော့ ဆီးက တအား တင်းနေပြီ။ ကိုလေး ရှူး ပေါက်ချင်တယ် ဆိုတော့ ဒီနား ကားသမားတွေနဲ့ ဟိုဘက်နား သွားပေါက်တဲ့။ မှောင်မဲနေတော့ ပူတူး ကြောက်တယ်။ မသွားရဲပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကိုလေးကိုပါ ခေါ်ရင်း သူ လိုက် လာတယ်။ လကလည်း တစ်ခြမ်းပဲ သာနေတော့ သိပ်တော့ မလင်းပေမဲ့ မြင်တော့ မြင်နေရ တယ်။ လမ်းကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ တာလမ်းလေးအတိုင်း နည်းနည်း လျှောက်ဝင်သွားပြီးတော့ မရတော့ဘူး။ ထွက်ကျတော့မယ်။ ကိုလေးကိုတောင် ကျောမခိုင်း တော့ဘဲ ဒီအတိုင်း စကတ်လှန်ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကိုလေးလည်း မမြင်ရလောက်ပါဘူး။ မှောင်နေတာကြီး။ ကိစ္စဝိစ္စပြီးတော့မှ လမ်းပေါ်ပြန်အတက် ကားကလည်း ပြင်အပြီး တစ်ခါတည်းပဲ ဆက်ထွက် လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သန်းခေါင်ကျော်နေပြီ။ အမေ့ကို ကိုလေး ဖုန်းကြိုဆက်ထားလို့ တော်သေးတယ်။ ကိုလေးကို အဲဒီည ပြန်မလွှတ်တော့ဘဲ အိမ်မှာပဲ ခြင်ထောင် တစ်လုံးနဲ့ သိပ် လိုက်တယ်။ ကိုလေးက ပူတူးတို့ ခြင်ထောင်ဘေးမှာ ခြင်ထောင် တစ်လုံးနဲ့။ ပူတူး တော်တော် နဲ့ အိပ်မပျော်ပါဘူး။ ခုနက အထိအတွေ့တွေကို ကြည်နူးနေသလိုလို၊ ဘာလိုလိုပဲ။ မပြောတတ်ဘူး။ ကိုလေး နောက်နေ့ မနက်မိုးလင်းတော့ ပြန်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပူတူး ဆယ်တန်းရောက်လာတယ်။ ကိုလေးက အရင်လို မဟုတ်ဘူး။ ပူတူးရဲ့ ရင်သား နေရာနဲ့ အောက်ပိုင်းနေရာတွေကို တစ်ချက်တစ်ချက် ကြည့်တာ တွေ့တယ်။ စိတ်ထင်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။ အရင်လို ဒူးထောင်ပေါင်ကားနေတာတွေ၊ ဖင်ပေါ်ရင်ပေါ် ဖြစ်နေတာတွေ တွေ့ရင် ဆူရော။ သူကတော့ ပူတူးက ကလေးပေါက်စလေး မဟုတ်တော့ဘူး၊ အမြင်မတော်လို့ ဆူတာ လို့ ပြောတယ်။ ကိုလေး ဆူရင် ပူတူး စိတ်မဆိုး ပါဘူး။ သဘောကျတယ်။
ဆယ်တန်း နှစ်တစ်ဝက်လောက်ကျတော့ ပူတူး အတတ်ဆန်းတွေ တတ်လာတယ်။ ပူတူး နဲ့ အတူတူ တက်တဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေ စုမိရင် သူ့ဘဲက ဘယ်လို ငါ့ဘဲက ဘယ်လိုလုပ် တာ၊ ဘယ်လိုကောင်းတာ.. ဘယ်လို ကြီးတာ.. အဲဒါတွေ ပြောတာ။ အစက နားမလည်ဘူး။ နောက် သူတို့နဲ့ ပေါင်းမိတာကြာတော့ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြတယ်။ ပါကင် ဖောက်ခံရတုန်းက ဘယ်လိုမျိုး၊ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဘယ်ကို သွားတာ၊ ဗိုက်မကြီးအောင် ဘယ်လို ဆေးသောက်ရတာ အဲဒါတွေ ပါတယ်။ ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေပေါ့။ ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်ပုံတွေလည်း ရှိတယ်။ အရင်က ကလေးတွေရဲ့ ပစ္စည်း လောက်ပဲ မြင်ဖူးတာ။ သူတို့ပြတာကြီးတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကြက်သီးတောင် ထ တယ်။ အဲဒါတွေ မြင်မိရင် အောက်ပိုင်း ဟိုဟာထဲက စိုလာတယ်။ အရည်တွေတောင် ထမိန်မှာ ကွက်တာ။ နောက်ပိုင်း အဲလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ နေ့တိုင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ ခံဝတ် ထားရတယ်။ မကြည့်လဲ မကြည့်ရဲဘူး။ ပြရင်လည်း ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ပေါင်းမိတယ်။ သူကကျတော့ ထူးဆန်းတယ်။ သူများတွေလို ရည်းစား မထားဘူး။ တစ်ရက်ကျတော့ သူ့အိမ်ကို အလည် ခေါ်တာနဲ့ လိုက်သွားမိတယ်။ ခဏပါ။ သူက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ အပျိုစင်ဘဝဆိုတာ ပျက် ဖို့ပဲ လွယ်တာ၊ ပြန်မရဘူးတဲ့။ တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့။ ရည်းစားထားမိလို့ ရည်းစားနဲ့ အတူတူ နေလိုက်ရင် ပိပိထဲက အမြှေးလေး ပေါက်သွားကြောင်း၊ အပျိုရည်ပျက်တယ်ခေါ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။ သူ့မိဘတွေက ညမှ ပြန်လာတာဆိုတော့ သူနဲ့ ပူတူးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းပဲ။ နောက်ပြီး အေအိုင်ဒီအကစ် ရှိတဲ့လူတွေဘာတွေနဲ့ အတူနေမိရင် ကိုယ်ပါ ကူးမှာပြောတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကြားဖူးပြီးသားပါ။ ကျောင်းကျန်းမာရေးမှာ သင်တယ်လေ။ နောက်ပြီး သူက ပူတူးကို သူ့သေတ္တာ အောက်က သတင်းစာ ထဲမှာ ပုံလေးတွေ ထုတ်ပြတယ်။
ပုံတွေမှာတော့ အရင်မြင်ဖူးနေကျပုံတွေနဲ့ မတူဘူး။ အဝတ်အစားမပါတဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပေမဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားတွေလို့ ပြောတယ်၊ အရမ်းချောတယ်။ သူက ရည်းစားထားစရာ မလိုဘူးတဲ့။ သူ စိတ်တွေ ထ လာပြီး အရည်တွေထွက်ကျလာရင်၊ ပိပိ ထဲက ယားလာရင် ဒီပုံလေးတွေ ထုတ်ကြည့်ပြီး အာသာဖြေတယ်တဲ့။ ဇောင်းတိုက်တယ်လို့ ခေါ်တာပေါ့တဲ့။ ပြီးတော့မှ ပူတူးကို မရှက်နဲ့ နင်လည်း နောက် စမ်းချင်ရင် စမ်းလို့ ရအောင် ငါ သင်ပေးမယ် တဲ့။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထလာတာနဲ့ အဲလိုပဲ အာသာဖြေလိုက် ပြေသွားမှာတဲ့။ အပျိုစင် ဘဝကိုတော့ ကိုယ်နဲ့ တကယ် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ သတို့သားကိုပဲ ပေးမယ် တဲ့။ သူက သူ့အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ချွတ်တယ်။ ပူတူးကိုလည်း ချွတ်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာ ကြည့်နော် ဆိုပြီး လက်ခလယ်နဲ့ သူ့ပိပိကို သူ ပွတ်တော့တာပဲ။ အစိလေး ထောင်လာတယ်။ အဲဒါလေးကို ပွတ်လိုက်။ အကွဲကြောင်းကို ပွတ်လိုက်နဲ့ မျက်လုံးလေး စင်းပြီး တအင်းအင်း တအားအားနဲ့ အတော်ကြီး ကြာတော့မှ ဆန့်ကနဲ ဆန့်ကနဲ ဖြစ်ပြီး ခြေပစ်လက်ပစ် ဖြစ်သွား တယ်။ သူအဲလို လုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကို ပူတူးရဲ့ အောက်ကဟာထဲက စစ်စစ်စစ်စစ်နဲ့ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာတယ်။ အရည်တွေလည်း စိုလာတယ်။ သူက နင်ပက်လက်လှန်လိုက် ဆိုပြီး ပူတူးကို ပက်လက် လှန်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဟာသူ လုပ်သလိုမျိုး လုပ်တယ်။ ပူတူး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးပါဘူး။ မျက်လုံးထဲ ကြယ်တွေ လတွေ မြင် လာလိုက်၊ ခြေဖျားကပဲ ရှိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သလို၊ လက်ဖျားတွေပဲ ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ် သလို၊ လေထဲမှာပဲ လွင့်နေသလိုလို ဖြစ်နေတယ်။ ခံစားနေရတာတွေက လျော့မသွားဘဲ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာတယ်၊ ရပ်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်နေတယ်၊ ရှေ့ ဘာတွေ ဆက်ခံစားရမှာ ဆိုတာကိုလည်း ကြောက်နေတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မောလည်း မောလာပြီး ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူး။ နောက်တော့ ဟိုဟာထဲကနေ ကျင်တက်လာပြီး သေးတွေ ထွက်ကျ တော့မလို ဘာလို ဖြစ်လာတယ်၊ သေးထွက်ကျတော့မယ် ရပ်တော့ ဆိုတော့လည်း မရပ် ဘူး။ အဲလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ဘာတွေ ဖြစ်မှန်းကို မသိတော့ဘဲ တစ်ကိုယ်လုံက အကြောတွေကို ဆွဲပစ် လိုက်သလို၊ပွင့်ထွက်သွားသလို ဖြစ်သွားပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း ပြန်လျော့သွားတော့တယ်။ ဟုတ်တယ် သေးတွေလားတော့ မသိဘူး။ အိပ်ရာပေါ်မှာကို ရွှဲနစ်ကုန်တာ။ခဏအမောဖြေပြီးတော့ နင်လည်း နင့်ဘာသာ လုပ်၊ ငါလည်း ငါ့ဘာသာ လုပ် အတူတူ လုပ်ကြ မယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ပွတ်ကြတယ်။ သူလုပ်ပေးတာကျတော့လည်း အရသာက တစ်မျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တော့လည်း အရသာ တစ်မျိုးပဲ။ လက်တစ်ဖက်က ကိုယ့်နို့ကိုယ် ဆုပ်ကိုင်လိုက် ပွတ်လိုက်၊ တစ်ဖက်က အောက်ကဟာကို ပွတ်လိုက် ကလိလိုက်နဲ့ ဇိမ်ကျနေ လိုက်တာ နောက်တစ်ခါ ခုနကလိုမျိုး ထပ်ဖြစ်သွားတယ်။
သေးတော့ မထွက်တော့ဘူး။ သူနဲ့ နောက် လူရှင်းတဲ့အချိန် တွေ့ရင် ညက ဘယ်မင်းသားကို မှန်းပြီး လုပ်ကြောင်း တွတ်ထိုး ဖြစ်တယ်။ အိမ်ရောက်ရင်တော့ အိပ်ရင် အမေနဲ့ အိပ်တောဆိုတော့ ခိုးလုပ်ရတာ သိပ် မလွတ် လပ်ဘူး။ အိပ်ကာနီး အိမ်သာတက်ရင်းနဲ့ စိတ်ကြိုက်ကစားရသလို ရေချိုးရင်းနဲ့လည်း ကစား ဖြစ်တယ်။ နေ့တိုင်း မဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်ရက် တစ်ခါလောက်ပုံမှန် ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ် တမ်း မှန်းပြီး လုပ်နေတာက ဘယ်မင်းသားမှ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဦးတည်းသော ပူတူးရဲ့ မင်းသား ကိုလေး။ ကိုလေးသိရင် ဘာများ ပြောမလဲ မသိဘူး။ ဒီဇင်ဘာလလောက်ကျတော့ အတန်းထဲက ဇော်ထွန်း ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ရည်းစားစကား လာပြောတယ်။ အရင်က ဒီလိုလာပြောရင် ငြင်းလွှတ်ပေမဲ့ သူ့ကို မငြင်းလိုက်ဘူး။ ရည်းစားထားချင်နေတယ်။ ဇော်ထွန်းက တော်ကီ ကြွယ်တာလည်း ပါတာပေါ့။ သူ့တော်ကီထဲမှာ သာယာနေမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဖြေပေးလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အဖြေရတာနဲ့ သူက ဟိုကိစ္စ တောင်းဆိုရော။ ပူတူး လုံးဝ မပေးဘူး။ နင် လိုချင် ရင် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ ရမယ်လို့ အပြတ်ပြောလိုက်တယ်။ ဆယ်တန်း ဖြေပြီးတဲ့ နေ့မှာပဲ သူက ခိုးပြေးမယ်၊ ပြီးရင် နောက်နေ့ ပြန်အပ်မယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ် ပြီးပြီ ဆိုတာကို ပြောတယ်။ ပူတူး လက်မခံဘူး။ ဒီနှစ် မအောင်ရင် နောက်နှစ် ပြန်တက်ရ မယ်။ ဆယ်တန်း မအောင်ရင် မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ထပ်ငြင်းလိုက်တယ်။ သူကလည်း လက်ခံတယ်။ ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်တဲ့ နေ့မှာ ပူတူး အမေတောင် မနိုးသေးခင် အစောကြီး ထွက်သွားတယ်။ အောင်စာရင်း မှာ ပူတူး ပါတယ်။ ဇော်ထွန်း ပါ မပါ ကြည့်လိုက် သေးတယ်။ သူလည်း ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်းပဲ သူခေါ်တဲ့နောက် လိုက် သွားမိတော့တယ်။ သူခေါ်သွားတာက သူ့ဦးလေးအိမ်ပါ။ သူ့ဦးလေးက မရှိဘူး။ နောက်မှ တူ မိန်းမခိုးမယ်ဆိုလို့ ရှောင်ပေးထားတာလို့ သိရတယ်။ ပထမဆုံး သူစိမ်းယောင်္ကျားနဲ့ အိပ်ရမဲ့ ည ဆိုတော့ ရင်ခုန်တာပေါ့။ မျက်နှာလည်း ပူမိတယ်။ သူက ပူတူးပေါ်ကို တက်ခွနေပြီ။ ယောင်္ကျားရရင် ဒါလုပ်ခံရမယ်ဆိုတာတော့ သိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရှက်တယ်လေ။ သူ့ကို မီးပိတ် ခိုင်းရတယ်။ သူက မပိတ်ချင် ပိတ်ချင်နဲ့ မီးထပိတ်တယ်။
ပူတူး ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်လုံးကို စုံ မှိတ် ထားတယ်။ ခဏနေတော့ သူ ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်လာပြီး ပူတူးပေါ် ရောက်လာတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက ပူတူး နှုတ်ခမ်းကို လာစုပ်တယ်။ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိပေမဲ့ ပူတူး အသာ လေး ငြိမ်ခံနေမိတယ်။ သူ့လက်က ပူတူးရင် နို့လေးတွေကို ပွတ်ကိုင်နေပြီ။ တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်း တိန်းရှိန်းတိန်းကြီးပဲ။ လက်က ဗိုက်တွေကို လာပွတ်တော့ ဗိုက်တစ်ပြင်လုံး လှိုင်းထပြီး အသည်းတွေ ယားလိုက်တာ။ နောက် ဟိုနေရာကို ရောက်သွားပြီး လက်ကြီးနဲ့ ပွတ်သပ်နေပြန်တယ်။ ပူတူး မနေနိုင်တော့ဘူး။ ပါးစပ်က အသံတွေဘာတွေ ထွက်ပြီး ညည်း မိနေပြီ။ ပူတူးရဲ့ ပေါင်ကို သူ ဆွဲကားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဟာနဲ့ ပူတူးရဲ့ ပိပိအဝလေးကို ထောက်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်။ အစက ထည့်မရဘူး။ ချော်ထွက်နေတယ်။ ပူတူး အဲဒါကြီး အထဲဝင်လာမှာကို ကြောက်နေမိတယ်။ ဝင်မလာပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပေမဲ့ မပြည့် ပါဘူး။ သူ့ဟာကြီး ပူတူးရဲ့ ပိပိလေးထဲကို ထိုးဝင်လာတယ်။ အထဲကနေ တင်းကနဲ ဖြစ်ပြီး အောင့်သွားတယ်။ ပူတူး သူ့ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားမိတယ်။ သူ အထဲကနေ ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက် နှစ်ခါလောက် လုပ်ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးကို ဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ နားထဲမှာ ဗြစ်ကနဲ မြည်သံတောင် မြည်သွားသလိုပဲ။ နာလိုက်တာမှ အသည်းခိုက်အောင်ပဲ။ သူ့ဟာက ဗိုက်ထဲကို အတောင့်လိုက် ထိုးဝင်လာတယ်။ အဲဒါကြီးက ဝင်လာလိုက် ပြန်ထွက် သွားလိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာတာတွေ ပျောက်သွားပြီး အရသာတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ စည်းစိမ် တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ပူတူး ခဏခဏ အာသာဖြေသလိုမျိုးပဲ အရသာ တစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပူတူး နည်းနည်းလေး အရှိန်တက်လာတုန်း ပိပိထဲကို ပူပူနွေးနွေး အရည်တွေ ဝင်လာပြီး ဇော်ထွန်းရဲ့ ပစ္စည်းလည်း ပျော့ခွေသွားတော့တယ်။ ပူတူးက စိတ်မကျေနပ်သေး ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူက ဘာမှ ထပ်မလုပ်တော့ဘဲ ဘေးမှာ တခူးခူး အိပ်သွားတော့တယ်။ ပူတူး စိတ်တွေ တိုနေတယ်။ ဪ ကိုယ့်ဘာသာ အာသာဖြေတာတောင် အဆုံးထိ ရောက်သေးတယ်။ ယောင်္ကျားယူကာမှ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်လို့ပဲ။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ လက်နဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်။ ထူးဆန်းတာက ကိုယ့်ကို ခိုးပြေးတဲ့ ဇော်ထွန်းကို မှန်းကြည့် တာ ဖီးလ် မတက်လာဘူး။ ကိုလေးကို မှန်းမှပဲ ဖီးလ် တက်လာတယ်။ ကိုလေးကို မှန်းပြီး ပွတ်ရင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရတော့တယ်။ ကိုလေးကို လွမ်းမိတယ်။ သူ အခုအချိန်လောက်ဆို စိတ်ပူနေရှာရောပေါ့။ သနားပါတယ်။ ကိုလေးရေ ပူတူးကို ခွင့်လွှတ်ပါ လို့။ နောက်နေ့မနက်မှာ ဇော်ထွန်းအိမ်က လာခေါ်ပြီး ညနေ ပြန်အပ်ဖို့ လုပ်တယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ သွားအပ်တော့ ကိုလေး မရှိဘူး။ လူကြီးတွေနဲ့ အိမ်မှာ စကားပြောနေချိန်မှာ ကိုလေး ရောက်လာတယ်။ အမေလည်း သဘောမတူချင်ပေမဲ့ သူ့သမီး အပျိုပြန်မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က အာကျယ်ကျယ် အဒေါ်ကြီးရဲ့ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး စကားအောက်မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက် ကျသွားတယ်။ ပူတူး စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒေါသလည်း ဖြစ်သွားတယ်၊ နောင်တလည်း ရသွားတယ်၊ အမေ့မှာ သမီးရှင်သာ ဖြစ်ပြီး မျက်နှာငယ်နေရတဲ့ ဘဝ။
တင့် တောင်းတင့်တယ် လာတောင်းခံရရင် အမေ ဒီလို ဖြစ်မှာ မဟုတ်။ ပူတူး မျက်ရည်တွေ ဝဲလာတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် မှုန်ဝါးဝါးပဲ မြင်ရတော့တယ်။ ကိုလေးက အိမ်ပေါ် တက် လာပြီး ခဏ ဝင်ထိုင်ပြီးတော့ အကျိုးအကြောင်း မေးမြန်းပြီး အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားတယ်။ ကိုလေး ပူတူးကို စိတ်ဆိုးသွားပြီ။ နောက်နေ့မနက် ကိုလေးအဆောင်အထိ လိုက်သွားတယ်။ အရင်လည်း တခါတလေ အဲလိုပဲ လာလာနှိုးနေကျဆိုတော့ သူ့ရုံးကလူတွေက ဘာမှ မပြောပါဘူး။ လှမ်းတောင် နှုတ်ဆက်နေ သေးတယ်။ ကိုလေးအခန်းတံခါးကို ခေါက်တော့ ကိုလေး ထဖွင့်တယ်။ အို… ကိုလေး တစ်ခါ မှ အရက်တွေဘာတွေ မသောက်ဖူးဘဲ အခု အရက်တွေ သောက်နေပါ့လား။ ကိုလေးပါးစပ်က အရက်နံ့တထောင်းထောင်း ထွက်နေတယ်။မျက်လုံးကြီးကလည်း အစ်ပြီး နီရဲနေတယ်။ ကိုလေး ပူတူးကို မြင်တဲ့အချိန်မှာ မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်။ ပူတူးလည်း ဝမ်းနည်းသွားတယ်။ ရင်ထဲ ဆို့တက်လာပြီး မျက်ရည်ကျလာမိတယ်။ ပူတူး ကိုလေးကို တောင်းပန်လိုက်တယ်။ ကိုလေး ပူတူးကို ဆူတယ်။ ဆူပါစေလေ။ ဆူရုံတင်မက ရိုက်လည်း ခံ ဖို့ အသင့်ပါပဲ ကိုလေးရယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ ကိုလေးကို လင်မယားနှစ်ယောက် သွားကန်တော့ကြတယ်။ ကိုလေး မျက်နှာ လုံးဝ မကောင်းပေမဲ့ လူကြီးပီပီသသပဲ လေသံကို ထိန်းပြီး ဆုတွေ တသီကြီး ပေးလိုက်တယ်။ ပူတူး စိတ်မကောင်းခြင်းတွေ များစွာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ကိုလေးနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားတယ်။ ကိုလေး အမေ့ဆီကို တစ်ခါ တစ်ခါ ရောက်လာပေမဲ့ ပူတူးကိုလည်း မမေးတော့ဘူးပြောတယ်။ ကိုလေး ပူတူးကို စိတ်နာသွားတာ လား။ ဒါမှမဟုတ် ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပြီလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာပဲ ကိုလေး မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကို ရာထူးတိုးနဲ့ ပြောင်းသွားတယ်လို့ သိရတယ်။အကြီးတန်းစာရေး ဖြစ်သွားပြီလို့ ပြောတာပဲ။ အဆက်အသွယ်လည်း မရတော့ပါဘူး။ ပူတူး အိမ်ထောင်ရေးကလည်း အစကတည်းကပဲ သိပ် မလေးနက်ခဲ့လို့လား မသိ။ သိပ် အဆင်မပြေပါဘူး။ ယူတဲ့ ယောင်္ကျားက အလုပ်လည်း မလုပ်တတ်၊ လုပ်ချင်စိတ်လည်း မရှိ၊ ပူတူးကိုလည်း မညှာတာ။ သူ စိတ်ထန်နေချိန်မှာ ပူတူး ဘယ်လောက် နေမကောင်း ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ အတင်း လုပ်ချင်တယ်။
ပူတူး ကိုယ့်လင်သားပါလေ ဆိုသည့် စိတ်နှင့် သူ့အလို လိုက်ပေးတယ်။ အိမ်ထောင်သက်ရင့်လာလည်း ပူတူး လက်သုံးရ မလွတ်သေးဘူး။ သူ့အလိုသာ သူကြည့်လုပ်တာပဲ။ သူပြီးသွားလျင် အိပ်သွားတယ်။ ပူတူးက အဖြည့်ခံ သက်သက်။ အဆိုးဆုံးက အမေ့ကို မချေမငံ ပြောတာ။ အပြင်ထွက် အရက်ကလေး သောက်စားပြီးရင် အိမ်မှာ ယောက္ခမနှင့် မိန်းမကို ရန်ရှာပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောမလွတ် အောင် အော်ကြီးဟစ်ကျယ် လုပ်ပြီ။ ရိုက်တာနှက်တာတောင် လုပ်ချင်သေးတာ။ ရပ်ကွက် လူကြီးက ကိုယ့်ကို အကာအကွယ်ပေးထားသေးလို့။ တခါတလေ ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ့ ပေးစားချင် ပေးစား၊ ကိုလေးနာမည် တပ်ပြီး ပေးစားတာက ရှိသေး။ အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်လောက် သာ ဖြစ်လာတယ်။ စီးပွားလည်း ဘာမှ မယ်မယ်ရရ တိုးတက်မလာခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ သူနဲ့ ဆက် လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တာ သိလာတော့ ရပ်ကွက်ကို အကူအညီတောင်းကာ ကွာရှင်းလိုက်ရတော့တယ်။ ဇော်ထွန်းကလည်း အသာ တကြည် ကွာပေးတယ်။ သူ့မှာ နောက်ထပ်ပေါင်းစရာ မိန်းမ ရှိနေပြီလေ။ နောက်မိန်းမ ကလည်း ပူတူးကိုတောင် ရန်စောင်ချင်နေသေးတာ။ မယားငယ်ဘဝက မယားကြီး ဖြစ်ချင်နေပုံပဲ။ ပူတူး ကွာရှင်းပြီးတော့ နောက်ထပ်လည်း အိမ်ထောင် ထပ်မပြုတော့ဘူး။ သားသမီး မရှိတာတောင် ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်က တစ်ခုလပ် တစ်လင်ကွာ ဆိုတဲ့ ပုတ်ခတ်မှု စော်ကားမှုတွေက နားနဲ့ မဆန့် တော့ ရန်ကုန် တက်လာပြီး အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ဝင်လုပ်တယ်။ ရန်ကုန်ရောက်လာချိန်မှာ တော့ အပျိုလိုပဲ နေတော့တယ်။ နံ့တံ့တံ့ ပျံတံတံ အပျို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ မြန်မာ ဆန်ဆန်လေးနဲ့ လူကြီးဆန်ဆန် ဝတ်တတ်လာတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေတော့တယ်။ လာဆက်နွယ်သမျှ ပုရိသတွေကိုလည်း ဝေးဝေးပဲ ထားတော့တယ်။ အနေအေးတော့ တော်ရုံ ဝင်မလုံးရဲကြဘူးပေါ့။ နေတဲ့အဆောင်ကလည်း လုံခြုံပါတယ်။ အဆောင်မှူး အပျိုကြီးနဲ့ ရင်းနှီးတယ်လေ။ Facebook သုံးဖြစ်လာတော့ ပူတူး ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်သုံးတယ်။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေလောက်ပဲ လက်ခံထားတာပါ။
တစ်နေ့တော့ ကိုလေး အကောင့်ကို တွေ့တယ်။ ကိုလေးကလည်း Ko Lay ဆိုတဲ့ အကောင့်နာမည်ပဲ။ ကိုလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံ တင်ထားတော့ ချက်ချင်း Add လိုက်တာ။ ကိုလေးက လက်ခံလိုက်ပေမဲ့ ပူတူးအကောင့်မှန်း သိပုံ မရပါဘူး။ ပထမ စာပို့မလို့ လုပ်သေးပေမဲ့ နောက်တော့ ကိုလေး သူ့ဘဝနဲ့ သူ ပျော်ပါစေ အနှောင့်အယှက် မပေးတော့ပါဘူး ဆိုပြီး ကိုလေးတင်သမျှ ကိုလေးရဲ့ ပုံတွေကိုသာ ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားပြီး အလွမ်းပြေ ထုတ်ကြည့်မိတော့တယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ “ပူတူး ဆိုတာ နှင်းစက်မေ လား၊ ဟုတ်ရင် စာပြန်ပို့ပေးပါ” ဆိုတဲ့ စာတစ်ကြောင်း ရောက်လာတာကို ထီပေါက်မတတ် ပျော်သွားမိတယ်။ ပူတူး တစ်ခါမှ ပုံမတင်ဖူးရာက ပုံတစ်ပုံ တင်လိုက်လို့ သိသွားတာ ဖြစ်မယ်။ ပူတူး ပျော်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ချက်ချင်းပဲ စာပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ကလင်…ကလင်…ကလင်… ဟော.. အမေ့ဆီက ဖုန်းလာပါရော… ပြောပြစရာ ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ နောက်မှ ဆက်ပြောမယ်နော်။ အသည်းကွဲဝေဒနာအတွက် အကောင်းဆုံး သမားတော်က အချိန်သာ ဖြစ်သည်။ ကြာတော့ လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားသည်။ ရုံးက စာရေးမမတစ်ယောက်နှင့်လည်း အတော်လေး အဆင်ပြေလာသည်။ သူမက ကျွန်တော် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမည့်သူ မရှိသည်ကို သိသဖြင့် အိမ်ချက်ကလေးများ မကြာခဏ ပေးတတ် သည်။ ကြာတော့လည်း သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်လာသည်။ ပထမပိုင်းတော့ ကျွန်တော့် အစွဲအလမ်းဟောင်းကြောင့် သူမအပေါ် ဒီ့ထက်ပို ခံစားလို့ မရ။ သူမကတော့ အထာပေးသည် ဟုပင် ပြောလို့ရသည့် အနေအထားလောက် ရှိလာသည်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် ထားသည့် အစွဲအလန်းက အကျိုးလည်း မရှိ၊ ကောင်းလည်း မကောင်းပါဘူးဟု စိတ် ဒုန်းဒုန်း ချလိုက် ရသည်။ တစ်ရက်တော့.. ဒီမြို့က တန်ခိုးကြီးဘုရားပွဲသွားဖို့ ထိုမမက အဖော်လာစပ်သည်။ နာမည်က မြကေသွယ် တဲ့လေ။ သူမကလည်း ကျွန်တော့်ထက် နှစ်နှစ်လောက်သာ ကြီးမည်ဖြစ်သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားက အပျိုပေါက်မလေးများပင် အရှုံးပေးရလောက်သည်။ စွင့်ကားသောရင်၊ ထွားသောတင်နှင့် ကျင်သွယ်သော ခါးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဗိုက်သား အဆီ လုံးဝ မရှိ။ အသားအရေကလည်း အရမ်းကြီး မဖြူသော်လည်း အသားဝါဝင်းသည့်ထဲမှာ ပါသည်။ ပွဲသွားမည့် ညနေ၊ သူမ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်တော့ သူမက အသင့် စောင့်နေသည်။ ဆိုင်ကယ် နောက်က တက်လိုက်ပြီး ပွဲခင်းရှိရာသို့ မောင်းထွက်လိုက်သည်။ တောင်ပေါ်ဒေသ ဆိုတော့ လမ်း လမ်းက သိပ်မကောင်းလှသေး။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့် ကျောပြင်ကို လာထိတွေ့နေသည့် သူမ၏ ရင်နှစ်မွှာ၏ အရသာ… နွေးလွန်းသည်။ ပွဲခင်းရောက်ဖို့က လယ်ကွင်းကြီးကို ဖြတ်ရမည်။ နွေရာသီဖြစ်သဖြင့် လယ်ကွင်းထဲမှာက ခြောက်သွေ့ကာ လူအုပ်ကြီးက ဆိုင်ကယ်တွေ လမ်းပေါ်မှာ ရပ်ထားခဲ့ပြီး ရေစီးကြောင်းကြီးလို တန်းစီကာ ကျိတ်ကျိတ် တိုးနေသည်။ လူအုပ်ကြီးထဲသို့ မတိုးချင်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ကန်ဘောင်ပေါ်က လျှောက်သည်။ ကံသည် အမြဲကောင်းမနေတတ်ပေ။ ဖုန်းဓာတ်မီး မှိန်မှိန်လေး ထိုးထားသော အလင်းရောင်အောက်သို့ ကန်ဘောင်ဘေးမှ ရိပ်ကနဲ တက်လာသော မည်းမည်းသဏ္ဍာန် တစ်ခု… သိလိုက်သည်… “အို… မြွေကြီး… မြွေကြီး..” သူမက အလန့်တကြား အော်ဟစ်ကာ ကျွန်တော်ပေါ် အတင်း ဖက်တက်သည်။ ခြေနှစ်ဖက် ကလည်း ချိတ်ထားလိုက်သေးသည်။ ရုတ်တရက်မို့ ကျွန်တော်လည်း ဟန်ချက်မထိန်းနိုင် ဖြစ်ကာ ရေစပ်စပ်ရှိသော ကန်စပ်သို့ နှစ်ယောက်သား လုံးထွေးလျက် ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။ ကျတော့ ကျွန်တော်က အောက်က သူမက ကျွန်တော့်ကို မျက်နှာ ချင်း အပ်၊ ရင်ချင်းကပ်လျက် ထပ်လျက်သားကြီး။ သူမ၏ ထွက်သက်က ကျွန်တော့် မျက်နှာကို လာရိုက်ခတ်သည်။ စက္ကန့်ပိုင်းမျှ မှင်သက်သွားမိပြီးနောက် “အို”ဟု အလန့်တကြား ရေရွတ်ကာ ရုန်းသည်။ ရေစပ် ဖြစ်နေသဖြင့် အရှိန်မထိန်းနိုင်တော့ ချော်ကျကာ သူမ ပေါင်လယ်လောက် ဗွက်ထဲ နစ်သွားတော့ သည်။ “အား.. မောင်လေး.. ဆွဲပါအုံး… ကျပြီ” သူမလက်ကနေ ဆွဲတင်လိုက်ရသည်။ နှစ်ယောက်သားလည်း လူရုပ်မပေါက်တော့ ။ ရေကန်ထဲက တက်လာတော့ နှစ်ယောက်သားက ဗွက်တွေနဲ့ ။ လူတွေက ကွက်ကြည့်သွားသည်။ ဒီပုံစံနဲ့ ပွဲထဲသွားလို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့။ ကားလမ်းပေါ်သို့သာ ပြန်တက်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့် အိမ်သို့ ပြန်မောင်းလာခဲ့သည်။ မြို့နဲ့ ပွဲခင်းက အတော်လေး ဝေးသည်။ “မောင်လေး… ရပ်အုံး… ရပ်အုံး… ဘာကြီးလဲမသိဘူး… အီး” ဖြစ်ရပြန်ပြီ။ လူရှင်းသည့်နေရာ မှောင်ရိပ်ထဲသို့ ထိုးရပ်လိုက်ရသည်။ “မောင်လေး… လုပ်ပါအုံး… ပေါင်မှာ… ဘာကောင်ကြီးလဲမသိဘူး… ရွစိရွစိနဲ့ ကပ်နေတယ်” ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ ဗွက်တောထဲကျသွားမှတော့။ “အစ်မ.. ကန်တော့နော်..” ကျွန်တော် ပြောပြောဆိုဆို ဆတ်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်ကာ သူမ၏ ထဘီကို ဒူးဆစ်လောက်ထိ ဆွဲ လှန်လိုက်သည်။
“ဘယ်နားမှာလည်း အစ်မ” ” အား… ဒီနား… ဒီနားမှာ” သူမ လက်ထောက်ထားသည့်နေရာက ပေါင် အလယ်ကျော်ကျော်လောက်မှာ… ဇာတ်လမ်းက လှချေပြီ။ မတတ်နိုင်တော့။ လက်ကို ထဘီအောက်က နှိုက်သွင်းလိုက်ကာ သူမ ပြသည့်နေရာသို့ ထိုးနှိုက်လိုက်သည်။ ကျွဲမျှော့ကြီး။ အတော်ကြီးသည်။ ရေထဲကျတုန်း အမိအရ တွယ်လိုက်တာ ဖြစ်မည်။ “မကြောက်နဲ့တော့ အစ်မ.. ဒီမှာ ရပြီ” “ဟယ်.. မျှော့ကြီး.. အကြီးကြီးပဲ… အစ်မက မျှော့သိပ်ကြောက်တာ” “ဟုတ်တယ်အစ်မ… ကံကောင်းတယ်… မသိရင် ဗိုက်ထဲဝင်သွားမှာ… သေတတ်တယ်” “ဟယ်… ဟုတ်ပါရဲ့နော်… အာာာ… ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်း မသိဘူး” စကားလိုက်ရောနေရာမှ မျှော့ ဘယ်အပေါက်က ဝင်မည်ကို အတွေးပေါက်သွားပုံရသည်။ ကျွန်တော့် ကျောကို အုန်းကနဲ ထုသည်။ “အစ်မ အဝတ်အစားလဲပြီး ပြန်လာအုံးမှာလား” “ဟင့်အင်း… မလာတော့ဘူး… မနက်ဖြန်မှပဲ ထပ်လာကြမယ်လေ” မနက်ဖြန်အတွက်တော့ ချိန်းသွားပေပြီ။ ဒီနေ့က ကံကောင်းသည်လား ကံဆိုးသည်လားကို မခွဲတတ်တော့ပါပေ။ အိမ်ရောက်တော့ ကမန်းကတန်း လက်ပြ နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပေါ် တက်ပြေးတော့သည်။ ကျွန်တော် ပေါင်လယ်လောက်ထိ နှိုက်တာကို ခံလိုက်ရ၍ အပျိုကြီး ရှက်သွားခြင်းပဲလားတော့ မသိပါ။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်အစားလဲပြီး အိပ်ရာဝင်လိုက်ရသည်။ အိပ်လို့ မရပါ။ အထိအတွေ့အာရုံတွေက နှောင့်ယှက်နေသည်။ အိပ်ပျော်သွားတော့လည်း အိပ်မက်အစိုတွေပင် မက်လိုက်မိတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့ညနေလည်း သူမ အိမ်ရှေ့ကနေ စောင့်နေသည်။ ဒီနေ့တော့ လယ်ကွင်းဘက် မသွားတော့ဘဲ ဝေးချင် ဝေးတော့ဟု ညာဘက်လမ်းက ပတ်ရန် ပြင်လိုက်သည်။ အဲဒီဘက် ကျတော့ အထဲဝင်ရတာ နည်းနည်း ဝေးသည်။ ဘရိတ်တစ်ချက် အုပ်လိုက်တိုင်း တံဆိပ်ခတ် နှိပ်ခံနေရသည့် အရသာကို ခံစားမိလိုက်ရာ ကျွန်တော် အမှားကြီး မှားမိသွားသည်ကို သိလိုက် ရသည်။ ကျွန်တော် ရှော့တ်ပင် အတိုဝတ်လာသော်လည်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ မဝတ်ခဲ့မိ။
အောက်ကကောင်က ထ မာန်ဖြီပြန်ရာ စိတ်ကို မနည်း ထိန်းချုပ်ထားရသည်။ ပွဲခင်းထဲသို့ ရောက်သွားပြီး အဆာပြေ စားသည်။ ထို့နောက် ရဟတ် စီးချင်သည်ဟု ပူဆာ သဖြင့် ရဟတ်ပေါ်သို့ ရောက်သွားသည်။ နယ်ဘက် ပွဲတွေမှာ လာတတ်သည့် ရဟတ်တွေက ရန်ကုန်က ရဟတ်တွေလို မဟုတ်။ ရန်ကုန်က ရဟတ်တွေက စက်နှင့် မောင်းသည်။ ဖြည်းဖြည်းသာ လည်ပြီး ရှုခင်းတွေ ကြည့်ဖို့ကောင်းသည်။ ဒီမှာက ရဟတ်အိမ်လေးတွေမှာ လေးယောက် စီးလို့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ တက်လိုက်ပြီး ရှေ့ခုံကလည်း အတွဲတစ်တွဲ၊ သူမ စီးသာစီးချင်ပြီး ကြောက်နေပုံ ရသည်။ ရဟတ်အိမ် တစ်လုံး လူပြည့်သည်နှင့် ရဟတ် မောင်းသည့် လုပ်သားများက အပေါ်က တန်းပေါ်သို့ တက်သွားသည်။ သူတို့ ဝိတ်နှင့် ရဟတ်က လည်သွားသည်။ တစ်တွဲပြီး တစ်တွဲ ငြိမ့်ကနဲ ငြိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အတက်က သိပ်မသိသာသော်လည်း အဆင်းကျတော့ အသည်းထဲ အေးကနဲ အေးကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူမ ကျွန်တော့် လက်ကို ကိုင်ထားသည်။ အောက်ဆုံး ပြန်ရောက်သွားတော့ တစ်ပတ်လည် လူပြည့်သွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် စတင် မောင်းတော့သည်။ ရဟတ်မောင်းသူများက သူတို့ အလေးချိန်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချကာ ရဟတ်အိမ်အောက်က ဘားတန်းတွေမှာ ဂျွမ်း အမျိုးမျိုး ကစားပြရင်း လည်ပတ်စေသည်။ စီးနေသူကတော့ သူတို့ ဂျွမ်းကစားနေတာကို မမြင်ရ။ သူမက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲသို့ရောက်နေပြီး မျက်နှာကို ဝှက်ထားသည်။ ရဟတ်က ဆယ်ပတ် ပြည့်သွားတော့ ရပ်သွားသည်။ ထိုကျတော့ မှ ရင်ခွင်ထဲ ဝှက်ထားသည့် မျက်နှာကို ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ပြန်ခွာသည်။ရဟတ်စီးပြီးတော့ စတိတ်ရှိုးခဏကြည့်မည် ဖြစ်သဖြင့် လက်မှတ်သွားဝယ်ရသည်။ နယ်မြို့ ဆိုတော့ ပွဲရုံကြီးကို ပတ်ပတ်လည် တာလပတ်စများနှင့် ကာထားပြီး ပွဲလက်မှတ်ကို ပွဲရုံ ထောင့်မှာ ရောင်းသည်။ ပွဲက စနေပြီ။ လက်မှတ်ရောင်းသည့်နေရာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည်။ လူပျောက်သွားမည်စိုးသဖြင့် သူမကို ရှေ့ကထားရသည်။ ထိုအချိန်ဝယ် အောက်က ညီတော် မောင်က ထကြွသောင်းကျန်းလာသည်မှာ ထိန်းမရတော့ချေ။ ဘောင်းဘီမို့သာ တော်တော့ သည်။
သူမထံမှ ကိုယ်သင်းနံ့ ရေမွှေးနံသင်းသင်း ရောပျွမ်းနေသည်ကို အနံ့ရတော့ ပိုဆိုးသည်။ အနောက်ကလည်း လူအုပ်က တိုးနေတော့ ကျွန်တော့်ကောင်က သူမ တင်နှစ်လုံး ကြားကို သွားထောက်မိတော့သည်။ ကျွန်တော် အလွန် အားနာသွားသည်။ သူမက ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည်။ “အစ်မ.. ကန်တော့… အနောက်က တိုးနေလို့” သူမ ပြုံးစေ့စေ့နှင့် အန်ကြိတ်ပြပြီး အရှေ့သို့ ပြန်လှည့်သွားသည်။ ကျွန်တော် ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသော်လည်း အနောက်ကလည်း တိုး၊ အရှေ့မှာလည်း ပိတ်ကြပ်နေရာ ဘယ်လို မှ မတတ်နိုင်တော့။ လက်မှတ်ရပြီးပြန်တော့ ပွဲရုံထဲသို့ တိုးဝှေ့ ဝင်ရပြန်သည်။ အထဲမှာက တာလပတ်စကြီးကို ခင်းထားကာ တစ်ချပ်စာစီ လေးပေပတ်လည်လောက် အကွက်ဆွဲထားသည်။ ကိုယ့်နံပါတ် ရောက်အောင် ထိုင်နေသူများရှေ့ ခွကျော်သွားရသည်။ ထိုင်စရာ နေရာရမှပဲ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။ တေးဂီတသံက ဆူညံနေရာ အချင်းချင်း စကားပြောဖို့ပင် အဆင် မပြေလှ၊ ပုံမှန်လေသံထက်ကို နည်းနည်းပိုပြောမှ ကြားရသည်။ ရှေ့ဘက် ဆောင်းဘောက်စ် တွေနားလောက် နေရာရတော့ ပိုဆိုးသည်။ ဆယ်နာရီလောက်ကျတော့ စတိတ်ရှိုးလည်း ပြီးသွားပြီ၊ နောက်ထပ် အခန်းကဏ္ဍတွေ ရောက်လာပြီမို့ ပြန်ထွက်လာကြသည်။ အပြင်ရောက်တော့ မီးရောင်အောက်မှာ အရှေ့က လမ်းလျှောက်သွားသော သူမ၏ တင်ဆုံကို လှမ်းငမ်းလိုက်ရာ ပန်းနုရောင် ထဘီဝတ်ထားသော သူမတင်ပါးနှစ်ခု ဆုံရာ အလယ်တည့် တည့် အောက်နားလောက်တွင် ရေစိုကွက်ကလေး တစ်ကွက်ကို တွေ့မိလိုက်သည်။ ပန်းရောင် ပိတ်သားဆိုတော့ သိသိသာသာ ပေါ်လွင်နေသည်။ “အစ်မ… နောက်မှာ ကွက်နေတယ်” မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သွားပြောမိပြန်သည်။ သူမက လက်နဲ့ စမ်းကြည့်ပြီး.. “ဟယ်.. ဟုတ်ပါ့.. ဘယ်နားမှာ ရေကွက်ပေါ် ထိုင်မိလဲ မသိပါဘူး” ပြောပြောဆိုဆို ဘေးနား မှောင်ရိပ်သို့ တိုးကာ ထဘီပြင်ဝတ်သည်။ တကယ်တော့ ပွဲခင်းထဲ နွေရာသီ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့မှာ ဘယ်နားမှာမှ ရေစိုစရာမရှိ။ ဧကန္တ သူမလည်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားကာ စိုစွတ်သွားပုံ ရပါသည်။ သူမကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသော်လည်း အသံတွေက ကတုန်ကရင် ဖြစ်နေသည်မှာ သိသာလွန်းသည်။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရောက်တော့ စကားစမြည် ပြောဖြစ်တော့သည်။ “အစ်မ.. ဟို… ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ်နော်..ခုနတိုးမိတာက မရည်ရွယ်ပါဘူး.. ” “ဟွန်း.. တော်ပါ.. အပိုတွေ.. အဲဒါ မရည်ရွယ်တာလား” “မဟုတ်ပါဘူး.အစ်မရယ်.. အနောက်က တိုးလိုက်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ.. အစ်မက မွှေးကြိုင်နေ တော့ ပိုဆိုး” “တော်ပါဟယ်.. ငါ့အပြစ်ပဲ ဖြစ်ရသေး” သူမပြောပုံက အပြစ်တော့ မြင်ပုံမရ။ သူမအိမ်တွင် ထားခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော့် အဆောင် ပြန်မောင်းလာခဲ့သည်။ ထိုညကလည်း အိပ်မက်မက်သည်။ ဒီလိုနှင့် တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ကျော်ဖြတ်လာသလို သူမနှင့်ပင် ရင်းနှီးမှုတွေ ပိုလာသည်။ ရုံးပိတ်ရက် တစ်ရက်မှာ သူမနှင့်အတူတူ အအေးဆိုင် ထိုင်ရင်းပင် ချစ်ရေးဆိုဖြစ်ခဲ့သည်။ စဉ်းစားဦးမည်ပေါ့လေ။ အဖြေရပြီးတော့ ပိုမို ပွင့်လင်းလာခဲ့သလို အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်များလည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့သည်။ “မ… ” “မောင်ရေ”.. စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့်.. သူမနှင့် ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ် ဝန်းကျင် ဖြစ်လာသည်။ သူမက ကြောက်သည်ဟု ဆိုကာ အောက်ပိုင်းကို ပေးမထိ၊ အပေါ်ပိုင်းကိုပင် အပြင်မှသာ ထိတွေ့ခွင့်ရသည်။ ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်တော့ အမှတ်တရ အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြသည်။ ရုပ်ရှင် ရုံးက လူပါးသည်။ အများစုကလည်း ရုပ်ရှင် သွားမကြည့်တော့ဘဲ အိမ်မှာပဲ Skynet နှင့် ငြိမ့်ကြတာ များသည်။ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး နောက်ဆုံးတန်း အတွဲခုံမှာ သွားထိုင်ကြသည်။ သူမက ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီထားသည်။ ရုပ်ရှင်စပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့ နေကြာစေ့ထုပ်ကလေး ဖောက်ကာ ခွံ ကျွေးရင်း ကြည်နူးနေကြသည်။ နောက် သူမကို နမ်းလိုက်ကာ နားရွက်ကလေးကို သွားဖြင့် ဖွဖွလေး ကိုက်ပေးလိုက်သည်။ (အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများ ဒီနည်းကို စမ်းသပ်သင့်သည်)။ “အင်း.. မောင်.. အသည်းတွေယားတယ်” “လာ… ကုတ်ပေးမယ်” ကျွန်တော် ရောတိရောယောင်လုပ်ကာ သူမ ဗိုက်သားကို ကုတ်ပေးသယောင် ပြုလိုက်သည်။
သူမကို သတိထားကြည့်မိတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အာရုံမရှိ၊ မျက်လုံးလေး မှေးနေသည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် အကဲစမ်းကာ လက်ကို ရင်သားများဆီသို့ ဦးတည်လိုက်သည်။ တစ်ချက် တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသော်လည်း ဘာမှ ငြင်းဆန်ခြင်းတော့ မရှိ။ ကျွန်တော် ရင်သားနှစ်မွှာကို ဖွဖွရွရွလေး ကိုင်တွယ်ရင်း သူမနှုတ်ခမ်းများကို စုပ်ယူနမ်းလိုက်သည်။ သူမကလည်း ကျင်လည်စွာပင် ပြန် လည် တုန့်ပြန်သည်။ အတွေ့အကြုံတော့ ရှိဖူးလောက်သည်။ ကျွန်တော် သိပ် အချိန်မဆွဲ တော့။ သူမ၏ တုန့်ပြန်မှုများကို အခြေအနေကြည့်ကာ လက်ကို တဖြည်းဖြည်း အောက်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။ သူမပေါင်သားများကို ပွတ်သပ်ပေးသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲဆိုတော့ လှန်လို့ လှောလို့ မရ။ ရုပ်ရှင်ကလည်း ဘယ်နေရာထိ ရောက်နေပြီမသိ။ ရုတ်တရက် မီးလင်းလာလျင် ဒုက္ခများသွားနိုင်သည်လေ။ ပေါင်လယ်လောက်မှ တဖြည်းဖြည်း ပေါင်ခွဆုံနေရာသို့ လက်ကို တရွေ့ရွေ့ချီတက်စေသည်။ ပေါင်ရင်းမှာ သူမက ပေါင်ကို တင်းတင်းစေ့ထားတော့ လက်က ဆက်ရွှေ့ရ ခက်နေသည်။ ကျွန်တော် ခြေထောင် တစ်ချောင်းကို သူမ ဒူးနှစ်လုံးကြားသို့ မသိမသာ ထည့်ပေးလိုက်ရာ အနည်းငယ် ဟသွားသည်။ ဒီတော့မှ မို့မို့ဖောင်းဖောင်း သူမ၏ အဖုတ်ကလေးအား အုပ်ကိုင် လိုက်သည်။ သူမ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားက လက်က ကျွန်တော့်ပေါင်ကို တင်းတင်း ဖမ်းဆုပ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်လက်အား သူမ၏ အကွဲကြောင်းလေးကို စုန်ချည်ဆန်ချည် ပွတ်သပ်ကစားရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် ဖိသွင်းလိုက်၊ တစ်ချက်တစ်ချက် စောက်စိလေးကို ခလုတ်တိုက်လိုက်နှင့် ကျီစယ်လိုက်သည်။ “အာ့… ဟာ… မောင်ရယ်.. ဟင့်” သူမ၏ နှာသံလေးများ ဝိုးတဝါးထွက်လာသည်။ “အား.. မောင်ရေ.. ရှီး… မရတော့ဘူး… ဟင့်… အား.. ” ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ရမ်းကာ ပါးစပ်က တိုးတိုးကြိတ်ညည်းနေသည်။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလာရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်သားကို တင်းတင်းကြပ် ကြပ် အတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ကော့တက်သွားသည်။ ထို့နောက် အဖုတ်ကြီးကို ဘယ်ညာ ဆတ် ကနဲ ဆတ်ကနဲရမ်းရင်း ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ကို မျက်နှာအပ်လျက် အမောဖြေနေသည်။ “မောင်.. သွားရအောင်နော်… ” “နေပါအုံး မ ကလည်း ရုပ်ရှင် မပြီးသေးဘူးလေ””ပြန်ချင်ပြီမောင်ရယ်… နောက်မှ လာကြည့်တော့နော်” သို့နှင့် ဖိုသီဖပ်သီဖြစ်နေသော အဝတ်အစားများကို ပြန်ပြုပြင်ကာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ညကျတော့ သူမဆီက ဖုန်းလာသည်။ “မောင်နော်.. နေ့ခင်းက တအားဆိုးတာပဲ..” “ဟမ့်.. ဘာဆိုးလို့လဲ မရဲ့” “ဆိုးတာပေါ့.. လူကို သေမတတ်ပဲ” “အာ့လိုဖြစ်သွားလား” “ဖြစ်တာပေါ့ မောင်ရဲ့.. ပြီးတော့ ညနေက ရေချိုးတော့ စပ်နေတယ်” “ဘယ်ကစပ်တာလဲ” “ဟိုနေရာကပေါ့ မောင်က အရမ်း ဖိပွတ်တာကိုး” “အင်းပါ မ ရယ်.. စိတ်ပါသွားလို့” “ထဘီနဲ့ ပွတ်တော့ပွန်းတာပေါ့ မောင်ရဲ့” “အာ့ဆို ထဘီမပါဘဲပွတ်ရင်ရော…” “အမ်.. မောင်နော်.. များလာပြီ” “တူတူနေချင်ပြီ မ ရာ” “ခုလည်း တူတူလျှောက်သွားတာပဲကို” “ဟုတ်ပူးလေဟာ.. အဲလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး” “ဘယ်လိုမျိုးလဲ မောင်ရဲ့” “လင်မယားတွေလိုမျိုးလေ” “နေပါအုံး မောင်ရယ်.. နောက်တော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့” “အင်းပါ မ ရယ်” နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေကျတော့.. “မောင်.. မနက်ဖြန် မောင့်ကို လက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်..” “ဘာလဲ.. မ ရဲ့” “ရောက်တော့ သိမှာပေါ့.. လမ်းစရိတ်ယူခဲ့.. မ တို့ တောင်ကြီးသွားလည်မယ်.. အိမ်ကို ရုံးပိတ်ရက် သင်တန်းတက်ရမယ်လို့ ညာထားတယ်” “ဟာ တကယ်လား၊ ပျော်လိုက်တာ” “တကယ်ပေါ့ မောင်ရဲ့၊ နေအုံး အဲဒါ လက်ဆောင်မဟုတ်သေးဘူး၊ လက်ဆောင်က တောင်ကြီး ရောက်မှ ပေးမှာ” နောက်တစ်နေ့မနက် သူမနှင့်အတူ တောင်ကြီးသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။
တောင်ကြီးရောက်တော့ အင်းလေး ရောက်အောင် သွားလိုက်သေးသည်။ ချစ်သူနှင့်အတူတူ သွားရသည့် ခရီးလမ်းက အလွန် ပျော်စရာကောင်းလှသည်။ ညနေမိုးချုပ်ကာနီးတော့မှ တောင်ကြီးသို့ ပြန်ရောက်လာကြသည်။ “မ.. မိုးချုပ်ပြီ.. ပြန်မှာလား” သူမ ဘာမှ ပြန်မပြော၊ လက်ထဲမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ကာ မှတ်ပုံတင်ကဒ် ထုတ်ပေးသည်။ “အမ်.. အဲဒါ ဘာလုပ်ဖို့” “အာ… မောင်တော်တော် အ တာပဲနော်… မှတ်ပုံတင်ပေးပါတယ်ဆို မသိဘူးလား” “ဟင့်အင်း.. သိဘူးလေ” “ခက်တော့ ခက်နေပါပြီတော်… ကျွန်မ ရုံးပိတ်ရက် သုံးရက်လုံး တောင်ကြီးမှာ သင်တန်း တက်ရမယ်လို့ အိမ်ကို ပြောလာခဲ့ပြီရှင့်… ပြန်စရာမလိုပါဘူးရှင့်..” “ဪ… အဲလိုလား… သိဝူးလေ” “အင်း… မောင့်သဘောလေ… မောင် ကြိုက်တဲ့နေရာတည်းပေါ့..” “ချစ်လိုက်တာ.. မ ရယ်” “ကဲ.. မောင်… မိုးချုပ်နေပြီ… ချစ်တာ နောက်မှချစ်… လောလောဆယ် တည်းစရာ နေရာ ရှာဦး… မ.. ဗိုက်ဆာနေပြီ.. တစ်နေကုန်လျှောက်သွားရတာလည်း ညောင်းလှပြီ” သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန် မြို့မဈေးကြီးနှင့် မနီးမဝေး ဟိုတယ် တစ်ခုသို့ သွားလိုက်သည်။ ထို့နောက် Reception တွင် နှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်း ယူလိုက်သည်။ တစ်ခန်းကို ငါးသောင်း ပေးရသည်။ သူမကို လှည့်ကြည့်တော့ ပြုံးစေ့စေ့ လုပ်နေသည်။ ဧည့်ကြိုကောင်လေးက အထုပ်အပိုးတွေကို တွန်းလှည်းနှင့် ထည့်ကာ ဓာတ်လှေကားနှင့် အခန်းဝသို့ လိုက်ပို့သည်။ ဈေးကြီးပေးရသလို အခန်းကလည်း ကောင်းပါသည်။ အဆင့်မြင့်အခန်းပြင်ဆင်မှုကြောင့် နေရထိုင်ရ သက်တောင့်သက်သာ ရှိလှသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်သား ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်ရာပေါ် လှဲချလိုက်ကြသည်။ ကျွန်တော် သူမကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ “ဟိုး.. ဆရာ.. နေပါအုံးကွယ်… တစ်နေကုန် လူလည်းညောင်းနေပြီ.. ရေလေးဘာလေး ချိုးပြီး အပြင်မှာ ထမင်းထွက်စားမယ်လေ.. ” “ဟွန့်.. မ ကလည်း” “အောင်မယ်.. ကလေးရုပ်ကြီးနဲ့ လာချွဲနေပြန်ပြီ… ရေချိုး ထမင်းသွားစားမယ်လေ.. ပြန်လာမှ မောင့်သဘော.. ဟုတ်ပြီလား” “တကယ်နော်…” “ဪ တကယ်ပါဆို… မြန်မြန်လုပ်… ရေချိုး.. ကိုယ့်အချိန်ထဲက ပါတယ်” ကျွန်တော် ရေချိုးခန်းထဲသို့ ဝင်ကာ ရေနွေးနွေးလေးနှင့် တက်သုတ်ရိုက် ချိုးလိုက်သည်။
ကျွန်တော် ပြန်ထွက်လာတော့ သူမက ထဘီရင်ရှားနှင့် အသင့်စောင့်နေသည်။ သူမရေချိုးပြီး ထွက်လာတော့ ကျွန်တော်… သူမကို လှမ်းဖက်လိုက်ရာ ကျွန်တော့်ပေါ်သို့ ထပ်လျက် ပြုတ်ကျလာသည်။ “အို.. မောင်နော်.. မကဲနဲ့အုံး… ခုမှ ရေချိုးပြီးတာ… ဟိုဘက်လှည့်နေ.. မ အဝတ်အစားလဲ ဦးမယ်” ကျွန်တော် တစ်ဖက် လှည့်ပေးနေစဉ်မှာပင် သူမ အဝတ်အစား လဲပြီးသွားသည်။ “ရပြီ… လှည့်လို့ရပြီ” ကျွန်တော် သူမဘက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဂါဝန်အပြာနုရောင်လေးနှင့် လှလွန်းနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အပြင်ထွက်ကာ ညစာ သွားစားသည်။ သူမနှင့် ကျွန်တော် အကြိုက် တူသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ပင်လယ်စာသာ စားသည်။ ကျွန်တော်က ငါးသလောက်ဥ၊ သူမက ပုဇွန်ထုပ်ကြော်နှင့် ထမင်းမြိန်ခဲ့သည်။ စားသောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ဟိုတယ်ပေါ် ပြန်တက်ချင်နေသော်လည်း သူမက တမင် အချိန်ဆွဲနေသည်။ ဟိုဟာ နည်းနည်း ဒီဟာနည်းနည်း လျှောက်စားနေသည်။ ည ကိုးနာရီကျော်လောက်ကျမှ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော် အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် သူမကို ဆွဲဖက်ကာ ခုတင်ပေါ်သို့ လှဲချလိုက်တော့ သည်။ “အယ်.. နေအုံးလေ.. မောင်… မ တို့ ထမင်းစားလာတာ သွားတိုက်၊ ပလုပ်ကျင်းတော့ လုပ်ဦးမှပေါ့””ဟင့်အင်း… မလုပ်တော့ဘူး” “မောင်နော်… ညစ်ပတ်ရင်… ဟွန့်” “အင်းပါ အင်းပါ… တိုက်ပါမယ်” နှစ်ယောက်သား မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ပြီးနောက်… သူမ မျက်နှာက မိတ်ကပ်တွေ နှုတ်ခမ်းနီတွေ ဖျက်လိုက်သော်လည်း သဘာဝဆန်ဆန် လှနေပြန်သည်။ အိပ်ရာပေါ် ရောက်သည်နှင့် ကျွန်တော် စိတ်မရှည်စွာ သူမကို လှမ်းဖက်သည်။ “အို.. မောင်ကလည်း အရမ်းကြမ်းတာပဲကွယ်… မောင့်သဘောပါဆို.. မ..ကို မညှာဘူးလား” “မ.ရယ် စိတ်လောသွားလို့ပါ” ကျွန်တော်နှင့် သူမ စောင်ထူကြီးအောက်သို့ ရောက်သွားသည်။
သူမ၏ နားရွက်ကလေးကို ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်သည်။ “အိ.. ခ်ခ်… မောင်.. အသည်းယားတယ်” “အသည်းယားရင်… ကုတ်ပေးမယ်လေ” “ဟွန့်… တော်တော့… သူကုတ်တာက.. အသည်းမဟုတ်ပါဘူး..” “အာ့ဆို.. အသည်းမဟုတ် ဘာကုတ်တာလဲ” “အာ.. မောင်နော်” ကျွန်တော် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အသာ စုပ်ကာနမ်းလိုက်သည်။ သူမကလည်း ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြန်ဖက်သည်။ ညာလက်က သူမ၏ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကို ညင်သာစွာ သပ်ပေးနေရင်းသူမ၏ လက် မောင်းပေါ်တွင် အလုပ်ပေးထားသည်။ သူမ၏ အသက်ရှူသံများ မြန်ဆန်လာသည်။ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားသည်။ ကျွန်တော့်လက်ကို သူမ၏ ရင်သားပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်သည်။ “အင်း.. ဟင်း… မောင်ရယ်” သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလွှာလေး ပွင့်လာကာ ကျွန်တော့်၏ အနမ်းများကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး တုန့် ပြန်သည်။ ရင်သားပေါ်မှ လက်က ဗိုက်သားပေါ်သို့ ရောက်သွားသည်။ သူမက ပိုမို တင်းကြပ်စွာ ဖက်သည်။ ကျွန်တော့်ဘက်သို့ တစ်စောင်းအနေအထားဖြစ်နေသဖြင့် ဗိုက်သားမှ ခါး… တင်ပါးထွားထွားကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးသည်။ “ရှီး… ဟင်း.. မောင်… မောင်ရယ်” သူမ၏ တုန့်ပြန်ချက်များက တစ်စထက် တစ်စ ပိုမို အားပါလာသည်။ တင်သားများကို ပွတ်သပ်ပေးနေရာမှ သူမ၏ ပေါင်တံသွယ်သွယ်ဆီသို့ ဦးတည်လိုက်ရင်း ပေါင်လယ်သားများကိုသာ တစ်ဖက်ဆီ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ သူမ အသက်ရှူသံတွေ မြန်သထက် မြန်လာသည်။ ကျွန်တော် ပေါင်လယ်သားလေးများကို ပွတ်သပ်နေရင်း ဂါဝန်စကို တဖြည်းဖြည်း အပေါ်သို့ ဆွဲတင်လိုက်သည်။ ဂါဝန် အောက်စ လက်ထဲသို့ ရောက်လာတော့ ပေါင်သားလေးများကို ပွတ်သပ်နေရင်း လက်က တဖြည်းဖြည်း ပေါင်လယ်မှ ပေါင်ရင်းဆီသို့ ရွေ့လျားလာသည်။ “အား.. မောင်ရယ်.. အနေရခက်လိုက်တာနော်” လက်က ပေါင်ခွဆုံသို့ ရောက်သွားတော့ သူမ၏ အဖုတ်ကလေးကို ပင်တီပေါ်မှ အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
“အမေ့… ရှီးးး.. ဟင့်… မောင်နော်” “မ.. အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်မယ်နော်” “ရှက်တယ် မောင်ရယ်” “မရှက်ပါနဲ့.. မ ရဲ့.. မောင်တို့က မကြာခင် လက်ထပ်ရင် ကြုံရမှာပဲကို” သူမ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားရင်း ခေါင်းညှိတ်ပြသည်။ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်သား ခြုံထားသော စောင်ကို ခွာချလိုက်သည်။ သူမ၏ အပြာနုရောင် ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ လှန်ချွတ်ပေးလိုက်တော့ သူမ ကျောလေး ကော့ပေးသည်။ ပင်တီနှင့် ဘရာ အပြာနုရောင်လေးတော့ ကျန်သေးသည်။ မချွတ်သေးခင်ကပင် ပင်တီအောက်မှ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ အဖုတ်ကလေး၏ အလယ်ခေါင်တွင် အကွဲကြောင်းလေးပင် ခပ်ရေးရေး ပေါ်နေသည်။ စိုစွတ်နေသော အကွက်ကလေးကို လက်နဲ့ စမ်းလိုက်သည်” “မ.. ဒီမှာ ရွှဲနေပြီ” “ဟင့်.. မောင်ပဲ အဲလိုဖြစ်အောင် လုပ်နေတာကို” ကျွန်တော် သူမ၏ ဘရာနှင့် ပင်တီလေးကိုလည်း သူမကိုယ်မှ ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကျွန်တော်ကို အလွန်ပင် စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက် သူမပေါ်မှ တက်ခွလိုက်သည်။ “မောင်… မ.. ကြောက်တယ်.. ဖြည်းဖြည်းနော်” “အင်းပါ.. မ ရဲ့.. နာအောင် မလုပ်ဘူး.. စိတ်ချ” သူမနှုတ်ခမ်းလွှာလေးများကို တရှိုက်မက်မက် စုပ်နမ်းရင်း ညာလက်ကလည်း ရင်သားများကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်တွယ်သုံးသပ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ဖွဖွလေး လက်ညှိုးလက်မနှင့် ပွတ် ချေပေးသည်။ သူမ၏ အသက်ရှူသံများ ပြင်းထန်လာသလို ညည်းသံသဲ့သဲ့..ကြားရတော့ ကျွန်တော့်စိတ်များကို ပိုမို တက်ကြွစေသည်။ ရင်သားမှ လက်များကို ဗိုက်၊ ခါး၊ တင်ပါးများဆီသို့ အစဉ်လိုက် နေရာ ရွှေ့သည်။ တင်ပါးကို ဆုပ်နယ်နေချိန်ဝယ် သူမ၏ လက်များက အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ထားကာ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထား သည်။ ကျွန်တော် သူမ၏ ပေါင်ခြံတဝိုက်.. အဖုတ်ကို တစ်ချက်မျှ မထိဘဲ ကျန်သည့်နေရာများသို့သာ မထိတတိ ကလိနေသည်။ ကာမသျှတ္တရ လေ့လာမိသမျှကို အသုံးချနေသည်။ “အား.. ရှီး… မောင်.. မောင်ရယ်.. မ.. မနေတတ်တော့ဘူး..” သူမတောင်းဆိုလာတော့လည်း ကျွန်တော့် လက်များကို အဖုတ်ပေါ်သို့ တင်ကာ အကွဲကြောင်း တစ်လျှောက် စုန်စန် ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ “အ.. မောင်ရယ်.. မောင်ရယ်.. ဟင့်.. အင်း.. အားးး” ကျွန်တော် သူမနှုတ်ခမ်းများကို နမ်းနေရင်းမှ လည်တိုင်.. ရင်ဘတ်.. ဗိုက်.. ဆီးခုံပေါ်သို့ အဆင့်ဆင့် နမ်းသွားသည်။ “မောင်.. အဲဒါ မလုပ်နဲ့ကွယ်.. ငရဲကြီးလိမ့်မယ်.. ” “မကြီးပါဘူး မ ရယ်.. ချစ်လို့ပါ” “မလုပ်နဲ့ မောင်ရယ်.. နော်… နော်လို့” ကျွန်တော့်ခေါင်းကို သူမ အတင်း ပြန်ဆွဲတင်သည်။
ကျွန်တော် သူမ ခြေရင်းတွင် ဒူးထောက် နေရာယူလိုက်ကာ သူမ၏ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး ပေါင်ကို ကားထုတ်လိုက်သည်။ ဖောင်းမို့နေသည် အဖုတ်ကြီးက ဟဟလေး ပွင့်နေကာ သူမ၏ ချစ်ဝတ်ရည်များ ရွှဲနစ်၍ အရောင် လက်နေသည်။ ကျွန်တော့်ကောင်ကလည်း တရမ်းရမ်းနှင့် မာန်ဖြီနေသည်။ ထိပ်ဖူးကို သူမ၏ ပန်းဝတ်လွှာချပ်များအား ချွေချရင် အဝတွင် တေ့လိုက်သည်။ “အာ့.. မောင်.. ဖြည်းဖြည်းနော်” ကျွန်တော် ထိပ်ဖူးနှင့် သူမ၏ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် စုန်ချည်ဆန်ချည် ထိုးဆွမွှေနှောက်နေရင်း သူမ၏ ပန်းဖူးလေးကို ထိထိမိမိ ထိုးပစ်လိုက်သည်။ “အား… မောင်ရယ်… အမလေး.. ဟင်း… မ.. မနေနိုင်တော့ဘူး… ထည့်ပါတော့” “ဘယ်ထဲကို ထည့်ရမှာလည်း မ..” “ဟာ.. မောင်.ကလည်းကွာ” “အာ့ဆို.. မဖြေရင် မထည့်ဘူးနော်” သူမ၏ ပန်းဖူးလေးကို နှစ်ချက်သုံးချက် ဖိတွန်းလိုက်ရင်း အညှာကိုင်လိုက်သည်။ “အ… အ… အဖုတ်ထဲကို ထည့်ပေးပါမောင်ရယ်” “ဘာကြီးကို ထည့်ရမှာလဲလို့” “အာ.. မောင်နော်” “မဖြေဘူးလား” သူမကို မထန်ထန်အောင် ဆွလိုက်သည်။ “မောင့်… မောင့်လီးကြီးကို… မ.. အဖုတ်ထဲကို ထည့်ပေးပါ မောင်ရယ်” သူမ ထံက တစ်တစ်ခွခွ စကားများ ကြားလိုက်ရသည်။ စိတ်ထဲ ဖျင်းကနဲပင် ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော် ထိပ်ဖူးက အပေါက်ဝသို့ တေ့လိုက်ကာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ သူမ၏ အဖုတ်အတွင်းသားများက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပင် ညှစ်ထားသည်။ တော်တော် ကြပ်လွန်းသည်။ “အား… အား… မောင်… ဖြည်းဖြည်းကွယ်.. နာတယ်” ကျွန်တော် တစ်ဆုံးထိ တအိအိ သွင်းလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်ပေးသည်။ သူမ၏ ဆီးစပ်ကို ကျွန်တော့်ဆီးစပ်နှင့် ထိသည်အထိ ဆောင့်သည်။ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မှ အရှိန်တင်လိုက်သည်။ သူမ၏ အော်သံညည်းသံများက ပို ကျယ်လာသလို သူမ လက်များက ကျွန်တော့် လက်မောင်းနှင့် ကျောကို ဆောက်တည်ရာမရ ဖမ်းဆုပ်လှုပ်ရှားနေသည်။ “မောင်.. မောင်… မ.. ပြီးတော့မယ်.. ပြီးတော့မယ်ထင်တယ်” သူမ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရင်လာကာ လက်က ကျွန်တော့် ခါးကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်ရင်း အားနှင့် ဆွဲဆွဲ ဆောင့်ကာ အဖုတ်ကြီးကလည်း ကော့တက်လာသည်။ ကျွန်တော် ဆောင့်ချက်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရှိန်တင်လိုက်သည်။ သူမ ကျွန်တော့်ကို အတင်းပင် ဖက်ကာ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို လှမ်းစုပ်သည်။ သူမ ထွန့်ထွန့်လူးလာပြီးနောက် အဖုတ်ကို အပေါ်သို့ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ကော့ထိုးလိုက်ပြီး အဖုတ်က ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို ဇိကနဲ ဇိကနဲ ဆယ်ချက်လောက် ညှစ်လိုက်ပြီးတော့ မှ ဗုန်းကနဲ ပြန်ပြုတ်ကျသွားသည်။ ပြုတ်ကျသွားသည်အထိ အဖုတ်ကြီးက တရမ်းရမ်း နှင့် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်နေသည်။
ကျွန်တော် မပြီးသေးသဖြင့် အဖုတ်ထဲသို ထပ် ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး နောက် ဆက်ဆောင့်သည်။ သူမ၏ အော်ဟစ်ညည်းညူသံများကလည်း တရစပ်ပင်။ နောက်ဆုံး ထိပ်ဖူးတစ်ခုလုံး ကျင်တက်လာပြီး သုက်ရည်များကို သူမ၏ အဖုတ်အတွင်းသို့ ပန်းသွင်းလိုက်တော့သည်။ “မောင်ရယ်.. မောလိုက်တာ… ဟူး” “ကောင်းလား.. မ” “ကောင်းတာပေါ့မောင်ရယ်… သေမလိုကို ဖြစ်သွားတာ” “ထပ်လုပ်ပေးရဦးမလား” “အာ.. ခဏနားဦးမယ်မောင်ရယ်” “မ.. ဘယ်နှခါ ပြီးသွားလဲ” ” ဘယ်နှခါမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး မောင်ရယ်.. မ. အရင်ပြီးတာလေ.. မောင်က ထပ် လုပ်နေတော့ ခဏခဏ ပြီးနေတာ.. သတိတောင် လစ်မတတ်ပဲ…” သူမပေါ်မှာ ထပ်လျက်ပင် စိမ်ထားရင်း အမောဖြေနေလိုက်သည်။ ချက်ချင်းတော့ ပြန်မထောင်နိုင်သေးသဖြင့် အမောဖြေပြီးတော့ သူမ ဗိုက်ပေါ်ကနေ ဆင်းလိုက်ကာ တစ်သျှူး စက္ကူလေးလှမ်းယူပြီး သူမ အဖုတ်ဝတွင် စီးကျနေသော သူမဆီက အရည်များနှင့် ကျွန်တော့် သုက်ရည်များကို တယုတယ သုတ်ပေးလိုက်သည်။ မောမောနှင့် အိပ်လိုက်တာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲ မသိ။ တရေးနိုးတော့ နှစ်ယောက်သား အဝတ်ဗလာနှင့် သူမက ကျွန်တော့်ကို ကျောခိုင်းရင်း အိပ်ပျော်နေသည်။ ကျွန်တော် သူမ၏ ရင်သားများကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ထောင်လာသော ဒုတ်ကို သူမ၏ တင်နှစ်လုံးကြားမှ ပြူထွက်နေသော အဖုတ် အဝသို့ တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်း လိုက်သည်။ သူမ ကျွန်တော့် တင်ပါးကို လက်နောက်ပြန် လှမ်းကိုင်သည်။ ကျွန်တော် သူမ ခါးကို ကိုင်ကာ သာသာလေးပင် ဆောင့်ပေးသည်။ သူမကလည်း မငြင်းဆန်ပါ။ တအင်းအင်း ညည်းညူရင်း ခံရှာသည်။ ညက တစ်ခါပြီးထားတော့ ကျွန်တော်က ပိုကြာနေသည်။ သူမလည်း နှစ်ခါသုံးခါ ပြီး ပြီးသွားသည်။ ထို့နောက် သူမနောက်က ဖက်ကာ အိပ်နေလိုက် တော့သည်။
နောက်နေ့ မနက် မိုးလင်းတော့ သူမက အစောကြီး နိုးကာ အဝတ်အစားပင် လဲပြီးနေပြီ။ ကျွန်တော့် ပျော့ဖတ်နေသည့်ကောင်ကို လာကိုင်လှုပ်ကာ နှိုးသည်။ ဒီကောင်ကလည်း ထောင်ချင်သလို ဖြစ်လာသေးသည်။ ကျွန်တော် နိုးတော့.. “မောင်.. ထတော့.. မနက် ဆယ်နာရီထိုးနေပြီ… အယ်.. အယ်.. ကြည့်စမ်း… လူဆိုးလေး..” ဟိုကောင်က သူမလက်ချက်နှင့် ထောင်နေသည်။ “မ.. မရတော့ဘူး… ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ရှင်း..” “အာ.. မောင်ရယ်.. အဝတ်တွေ လဲပြီးမှ.. ” “အဝတ်လဲပြီးလဲ… မရဘူး” “ကျေကုန်မယ် မောင်ရဲ့” “မကျေအောင် လုပ်မယ်” “မကျေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလို့” “မ.. ဟိုဘက်လှည့်ပြီး ကုန်းပေးလေ” “အာ.. မောင်ကလည်းကွာ.. အဲလိုကြီးက” “လုပ်ပါ မ ရဲ့.. ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး” သူမ အထဲက ဝတ်ထားသော ပင်တီကို ချွတ်ကာ ခြေရင်းတွင် တင်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ တက်ကာ လေးဘက်ထောက်ပေးသည်။ ကျွန်တော် သူမနောက်က အဝတ်မပါ ကိုယ်ဗလာဖြင့် နေရာယူလိုက်ကာ သူမ ဝတ်ထားသည့် စကတ်ကလေးကို ရှေ့သို့ လှန်တင်လိုက်ပြီး တင်ပါးထွားထွားကြီးနှစ်ခုကို စုံကိုင်ရင်း တစ်ကြောင်း ဆွဲလိုက်သည်။ သူမနှင့် ကျွန်တော် ပြိုင်တူနီးပါးပင် ပြီးသွားသည်။ သူမ အဖုတ်ကို တစ်သျှူးဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်သည်။ “မ.. ကောင်းလား” “အင်း.. ကောင်းတယ်.. အခုက ပိုထိတယ်” “ကြိုက်တယ်ပေါ့” “အင်း.. ” “ကြိုက်ရင် အဲဒီအတိုင်း လုပ်ပေးရမလား” “မောင့်သဘောပါ.. ညကတုန်းက အတိုင်းလည်း ကြိုက်တာပဲ… အခုလည်း ကောင်းတာပဲ… ကဲ ကောင်းရင်လည်း ရေချိုး အဝတ်အစားလဲတော့.. ထမင်း သွားစားမယ်” ထမင်းစားသွားပြီး ပြန်တက်၊ နှစ်ယောက်သား စိတ်ပါသည်နှင့် တစ်ကြောင်း ထ ဆွဲလိုက်၊ ပြန် အိပ်လိုက်နှင့် တစ်ရက်လုံးလုံး အပြင်ပင် မထွက်ဘဲ အခန်းထဲမှာ သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေကြသည်။ အိပ်ရာပေါ်မှာ လုပ်ရတာ အားမရသေးသဖြင့် ရေချိုးခန်းထဲ ရေပူ စပ်ပြီး နှစ်ယောက်အတူရေချိုးရင်း ဘေစင်ပေါ် လက်ထောက်ခိုင်းကာ နောက်မှ ကြုံးသည်က ရှိသေးသည်။ ပိုဇေရှင်လည်း အတော်ကို စုံလင်သွားသည်။ နောက်နေ့ နေ့လယ်လောက်ကျမှ အခန်းအပ်ကာ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုနှင့် သူမနှင့် ကျွန်တော် အပေးအယူတည့်လာခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့သည်။ ရုံးပိတ်ရက် အကြောင်းပြကာ တောင်ကြီးသို့ တက်လိုက်၊ တစ်ခါတရံလည်း မြို့အပြင် တောစပ်မှာ သွားချိန်းတွေ့လိုက်နှင့် အဆင်ပြေနေသည်။ သူမနှင့် ကျွန်တော့်ကြား အားသာချက် တစ်ခုက ကျွန်တော် စိတ်ပါနေလျှင် သူမက မညည်းမငြူ ဖြည့်ဆည်းပေးသလို သူမ စိတ်ပါနေလျင်လည်း ကျွန်တော်က မညည်းမညူ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အသုံးအနှုန်း အပြောအဆိုများပင် ပွင့်လင်း ရဲတင်းလာခဲ့သည်။
“မောင်.. ညနေတွေ့မယ်နော်.. မ ကို လာ လိုးပေးအုံး” “မ..ရေ.. အားရင် ထွက်ခဲ့နော်.. လိုးချင်နေပြီ” “အင်း.. လာခဲ့မယ်မောင်.. မလည်း အလိုးခံချင်နေတာ အတော်ပဲ”” စသည်စသည်ဖြင့်။ တစ်ရက်တော့ သူမ ဖုန်းဆက်သည်။ ငိုထားသည့်ပုံပင်။ သူမ မိဘတွေက သူတို့ နှစ်သက်သည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နှင့် ပေးစားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူမ ကျွန်တော့်ကိုသာ ချစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်လိုချင်သမျှ အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြောင်း၊ အခုတော့ သူမ မိဘများ စကားကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်နှင့် ခိုးရာလိုက်ပြေးဖို့ စဉ်းစားသော်လည်း နှလုံး ရောဂါရှိသည့် မိခင်ကို ညှာတာနေရသဖြင့် မလုပ်ရက်ကြောင်း၊ သူမကို ခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ မေ့လိုက် ဖို့၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် နီးစပ်စေလိုကြောင်း စသည်တို့ကို ပြောသည်။ ကျွန်တော် သူမနှင့် လမ်းခွဲလိုက်ရပြီး တစ်လလောက် စိတ်လေသွားသေးသည်။ အရက်တော့ မသောက်ဖြစ်။ အရက်မသောက်ဖြစ်တော့ ပိုဆိုးသည်။ ဟိုစိတ် ဒီစိတ်ထက် သူမကို လွမ်းသည့် စိတ်က ပိုများမည်ထင့်။
႐ုံးပိတ္ရက္တစ္ရက္… ႐ုံးပိတ္ေသာ္လည္း ဘယ္မွ မသြားခ်င္သျဖင့္ အိပ္ရာထဲတြင္ ဇိမ္နဲ႔ ႏွပ္ေနရင္း ေဖ့စ္ဘုတ္ ဖြင့္ကာ ေတာင္ေတာင္အီအီ ေလၽွာက္ ေမႊေနလိုက္သည္။ New Feed တြင္ တက္လာေသာ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံေၾကာင့္… ပူတူး.. သူမအေကာင့္က ကၽြန္ေတာ့္ Friend ျဖစ္ေနတာၾကာၿပီ။ ဘယ္သူမွန္း မသိခဲ့။ ပုံေလးတစ္ပုံ တက္လာေတာ့မွ သူမပုံမွန္း သိလိုက္ရသည္။ . လြန္ခဲ့တဲ့ ခုနစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္က… ကၽြန္ေတာ္ သူမ အေမႏွင့္ အေတာ္ရင္းႏွီးသည္။ ဒီေကာင္မေလးမွာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အေဖ မရွိေတာ့။ သူမအေမနဲ႔သာ ေနရသည္။ သူမအေမက ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေဈးေရာင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္။ သူမကေတာ့ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္တျပည့္ေလာက္သာ ရွိဦးမည္။ သူမက အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကိုးတန္းေက်ာင္းသူေလး။ သူမနာမည္အရင္းက ႏွင္းစက္ေမ.. ကၽြန္ေတာ္က အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ ေန႔တိုင္းညေနပိုင္းမ်ားတြင္ သူမတို႔ ဆိုင္ကို ေရာက္သြားေလ့ ရွိသည္။ သူမတို႔ဆိုင္ကို တစ္ခါတရံ ကူေရာင္းေပးသည္။ တစ္ခါတရံ ေဈးမွ ပစၥည္းပစၥယ သြားဝယ္ဖို႔ကိုလည္း ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ သြားေပးရသည္။ သူမအေမက ကၽြန္ေတာ့္ကို သားတစ္ေယာက္သဖြယ္ ခ်စ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မရွိေတာ့ သူတို႔သားအမိကိုသာ ကိုယ့္မိသားစုသဖြယ္ ေပါင္းသည္။ ႏွင္းစက္ေမက သူမ်ားမိန္းကေလးေတြကို ပဲ မမ်ားတတ္။ ကေလးလိုသာ ေနသည္။ ေက်ာင္းတက္လ်င္သာ မျဖစ္မေန ထဘီဝတ္ရေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရာက္လ်င္ စကတ္၊ ေဘာင္းဘီတို၊ အကၤ်ီခ်ိဳင္းျပတ္ႏွင့္သာ ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔ဆိုင္အတြက္ ေဈးဝယ္သြားလ်င္ ဆိုင္ကယ္ေနာက္က အျမဲ လိုက္လာတတ္သည္။ သူမကို ကၽြန္ေတာ္ ညီမေလးသဖြယ္ သံေယာဇဥ္ ရွိခဲ့သည္။ သူမအေမ ကလည္း ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သြားသြား သူမ လိုက္ခ်င္သည္ ဆိုလ်င္ စိတ္ခ် လက္ခ် ထည့္ေပးလိုက္သည္။ သူမက ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုေလး ဟု ေခၚၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူမကို ခ်စ္စနိုးႏွင့္ ပူတူးဟုသာ ေခၚသည္။ တစ္ခါတရံလည္း ညီမေလး ဟု ေခၚသည္။
ေမာင္ႏွမသံေယာဇဥ္ထက္ ပိုလာေစသည့္ ေန႔တစ္ေန႔ကို ၾကဳံလာရေသာ အခါတြင္ကား… သူမတို႔ ကိုးတန္းေျဖၿပီးလို႔ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီး ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ သူမက အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ သူ႔အေမကို ေပ်ာ္ပြဲစားလိုက္ဖို႔ ပူဆာသည္။ သူ႔အေမက သူမကို စိတ္မခ်။ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးသြားရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္လယ္ကမ္းေၿခ သို႔ သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရနစ္မွာ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ႕မွာ စိုးရိမ္သည္။ သူမက လက္ေလၽွာ့ေသး။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီ လာၿပီး အပူကပ္ျပန္သည္။ သူမ ေနာက္ေန႔ ေပ်ာ္ပြဲစား လိုက္ခ်င္၍ သူမတစ္ေယာက္တည္း သြားလ်င္ အေမလုပ္သူက မထည့္သျဖင့္ အေဖာ္လိုက္ခဲ့ ေပးရန္ပင္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႐ုံးပိတ္ရက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႔အေမကို သြားေျပာေပးဖို႔ ကတိ ျပဳလိုက္သည္။ “အန္တီ.. ပူတူးက မနက္ျဖန္ ေပ်ာ္ပြဲစားသြားခ်င္လို႔တဲ့… အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာအေဖာ္စပ္ ေနလို႔” “ေအာ္… ဟုတ္တယ္သားေရ… ညေနကတည္းက မင္းညီမက ပူဆာေနတာ။ တစ္ေယာက္တည္း ဆိုေတာ့ စိတ္မခ်လို႔ မလႊတ္ဘူး ေျပာတာကို မင္းကို ထပ္လာ အပူကပ္ေနတယ္ထင္တယ္” “ဟုတ္တယ္ အန္တီေရ… သားက အားပါတယ္… မနက္ျဖန္ ႐ုံးပိတ္တယ္ေလ… အန္တီ ခြင့္ျပဳ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေဖာ္လိုက္သြားေပးမယ္ေလ.. ေန႔ခ်င္းျပန္ပဲ… ည ရွစ္နာရီ ကိုးနာရီေလာက္ဆို ျပန္ေရာက္မွာပဲ” “ေအးေလ… သားပါမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အန္တီက စိတ္ခ်ပါတယ္… မင္းညီမက ကေလးလိုပဲ ကြယ္… ေသခ်ာေလး ဂ႐ုစိုက္ ေခၚသြားပါ… ေရနက္ေတြထဲ မဆင္းေစနဲ႔ေနာ္” “ဟုတ္ကဲ့အန္တီ စိတ္ခ်ပါ… ကၽြန္ေတာ္ပါတာပဲ… ဘာမွ မပူနဲ႔” “ေအးပါသားရယ္… အဲဒါဆိုလည္း မနက္ျဖန္က် ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ သြားၾကေပါ့” ကၽြန္ေတာ္ သူမဘက္ လွည့္ၿပီး ျပဳံးျပလိုက္ေတာ့ သူမက ခ်စ္စဖြယ္ သြားတက္ကေလး ေပၚေအာင္ ျပန္ျပဳံးျပသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ သူမတို႔အိမ္မွာ သြားေခၚရသည္။ သူမက စပန႔္သား ေဘာင္းဘီ ပြပြ အျဖဴ ေရာင္ေလးႏွင့္ တီရွပ္အျဖဴေရာင္ေလးကို ဝတ္ထားသည္။ ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို ေပ်ာ္ျမဴး တက္ႂကြေနသည္။ သူမသူငယ္ခ်င္းေတြက ရွစ္နာရီထိုးမွာ ထြက္လာမွာ ျဖစ္သျဖင့္ မွတ္တိုင္နားကေန ခုနစ္နာရီေလးဆယ္ေလာက္ ထြက္ေစာင့္ေနလိုက္ၾကသည္။ ကားေရာက္လာေတာ့ လူက အေတာ္မ်ားသည္။ အမ်ားစုက ကိုယ္စီကိုယ္စီ အတြဲေလးေတြနဲ႔။ ပူတူးကေတာ့ အတြဲလည္း ရွိမဲ့ပုံ မေပၚ။ ကားေပၚေရာက္ေတာ့… “ဟဲ့… ႏွင္းစက္ေမ.. ဘယ္သူႀကီး ေခၚလာတာတုန္း” “အာ… နင္တို႔က ကိုယ္စီကိုယ္စီ အတြဲနဲ႔၊ ငါ့မွာက ဘယ္မွာ အတြဲရွိတုန္း၊ ၿပီးေတာ့ ငါ့အေမက ငါ့တစ္ေယာက္တည္းဆို မလႊတ္ဘူး၊ ဒါ ငါ့အစ္ကိုေလး… အေဖာ္ထည့္ေပးလိုက္တာ” “သိပါဘူးဟယ္… နင္ ဘဲႀကီးႀကီးနဲ႔မ်ား ရသြားတာလားလို႔ ခ္ခ္…” “ေကာင္မစုတ္ေတြေနာ္.. နင္တို႔… ဟြန္း” သူမ ရန္ေထာင္ပုံေလးက ႏႈတ္ခမ္းကို စူ ေထာ္ကာ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္းသည္။ ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ေတာ့ ကားကို ေနရိပ္ရသည့္ေနရာ တစ္ေနရာတြင္ ထိုးကာ အလၽွိုလၽွို ဆင္းကုန္ၾကသည္။
ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္လာၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း ဟိုေရာက္ေတာ့ အတြဲ ကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ကြဲကုန္ၾကကာ အလၽွိုလၽွို ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္သာ ေငါင္းစင္းစင္းႏွင့္ ဘယ္သြားလို႔ သြားရမယ္မွန္း မသိ၍ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေနသည္။ ေနပူလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဝတ္လာေသာ ဂ်ာကင္ကို ကားထဲတြင္ ခ်န္ခဲ့လိုက္သည္။ ဗိုက္ဆာသည္ႏွင့္ ပင္လယ္စာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ဝင္လိုက္သည္။ ဆိုင္ထဲတြင္လည္း ႐ုံးပိတ္ရက္ ျဖစ္သျဖင့္ ရႈပ္ရွတ္ခတ္ေနသည္။ ဂဏန္းကင္ႏွင့္ ပုဇြန္ တင္ပူရာေၾကာ္ မွာလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဂဏန္းႏွင့္ ပုဇြန္ကို ဘီယာႏွင့္ ျမည္းဖို႔ အာသီသ ရွိေသာ္လည္း သူမ ရွိေနသျဖင့္ အေအး တစ္ဘူးစီသာ မွာလိုက္သည္။ သူမက ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံအခ်ိဳ႕ထုတ္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပးသည္။ “ကိုေလး… ညီမေလး စုထားတာ… ေလၽွာက္လည္ရင္သုံးဖို႔” “ေအာင္မေလး… ေနပါပူတူးရယ္… ကိုေလး ေကၽြးပါ့မယ္… ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္… ေဈးသြားရင္လည္း ကိုေလးပဲ ေကၽြးတာမို႔လား။ ခုလည္း ကိုေလးေကၽြးတာပဲ စားပါ။ ပူတူး တစ္ေယာက္စားလို႔ မြဲမသြားပါဘူး” သူမက စပ္ၿဖီးၿဖီးႏွင့္ သူမ ပိုက္ဆံ ျပန္သိမ္းလိုက္သည္။ “ကိုေလး” “ေဟ..ပူတူး… ဘာလဲ” “ညီမေလးတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရည္းစားေတြ ထားေနၾကတာ အကုန္လုံးပဲ။ ကိုေလးက ရည္းစား မရွိဘူးလား” “ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ပူတူးရယ္… ရည္းစားရွိမွေတာ့ နင့္လိုက္ပို႔မလား.. ငါ့ရည္းစား ငါလိုက္ပို႔မွာေပါ့” “ဟမ့္… ကိုေလးကလည္း” “ေနပါအုံး… နင္က ရည္းစား မရွိဘူးေပါ့” “ညီမေလးအတြက္ ရည္းစားမွ မလိုတာ၊ ညီမေလး ခ်စ္စရာ အေမရွိတယ္၊ ကိုေလးလည္း ရွိတယ္ေလ” ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ ေႏြးကနဲေတာ့ ျဖစ္သြားသည္။ ဖတဆိုးေလး သူမအေပၚမွာ သံေယာဇဥ္ ပိုသြားမိျပန္သည္။ ဒီပုံစံနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရည္းစားထားျဖစ္မဲ့ပုံ မေပၚေတာ့ပါေလ။ စားေသာက္ၿပီးစီးေတာ့ ကမ္းေျခဘက္သို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ ကမ္းေျခမွာ ကားကၽြတ္ကြင္းႀကီးေတြ ေလထိုးၿပီး ငွားေနတာ ေတြ႕ေတာ့.. “ကိုေလး… ပူတူး ေဘာစီးခ်င္တယ္” “ဟာ.. မသာမေလးရဲ့.. ေဘာကြင္းစီးခ်င္တယ္လုပ္ပါ” “ဟင္… ဘာျဖစ္လို႔လဲ.. တူတူပဲ မဟုတ္ဘူးလား” “အာ….. ထားေတာ့” “မတူဘူးလား ေျပာ” “မတူဘူး… ေဘာကြင္းက အကြင္းဟ။ ေဘာက အလုံးဟ ရွင္းပလား” “ေအာ္ ဂလိုလား အင္း ေဘာကြင္းစီးခ်င္တယ္” ကၽြန္ေတာ္ ေဘာကြင္း ႏွစ္ကြင္း ငွားဖို႔ ေဈးေမးလိုက္သည္။ “ဟာ… ကိုေလး… တစ္ကြင္းပဲ ငွားေလ၊ ပူတူးေဘာကြင္းေမ်ာသြားရင္ ကိုေလး လိုက္ဆယ္” “အာ..ေအးပါဟာ” ေဘာကြင္းငွားၿပီး ရလာေတာ့ သူမက ေဘာကြင္းကို ကိုင္ကာ ကေလးေတြလို ခုန္ဆြ ခုန္ဆြ ႏွင့္ လိုက္လာသည္။ ေရထဲေရာက္ေတာ့ သူမက ေဘာကြင္းေပၚတြင္ အက်အန ထိုင္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တြန္းခိုင္း သည္။ ေရနက္ပိုင္းသို႔ မေရာက္ေအာင္ေတာ့ သတိထားရသည္။ ႏွစ္ေယာက္စီးမည္ ဆိုကာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဘာကြင္းေပၚ ထိုင္ခိုင္းၿပီး သူမက ကၽြန္ေတာ့္ ေပါင္ေပၚ တက္ထိုင္သည္။ သူမဆိုင္တြင္လည္း သူမက တစ္ခါတရံ သူမအေမေရွ႕မွာပင္ ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ေပၚ လာထိုင္ခ်င္ ထိုင္တတ္သည္။
ညီမေလးကဲ့သို႔သာ စိတ္ထဲ ရွိသျဖင့္ ဘာမွေတာ့ မျဖစ္။ ေရထဲတြင္ ေဆာ့တာ ဝ၍ ျပန္တက္လာသည့္အခါတြင္ေတာ့… သူမဝတ္ထားသည့္ တီရွပ္ႏွင့္ စပန႔္သား ေဘာင္းဘီ အျဖဴထည္ေလးက ေရစိုသျဖင့္ အသားတြင္ ကပ္ေနကာ တစ္ကိုယ္လုံးကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေနရသည္။ ဒီ့ထက္ ဆိုသည္က သူမေဘာင္းဘီကပ္ေနပုံက သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္ခု ဆုံရာေနရာမွာ မည္းမည္း ေလးပင္ ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ အထဲက ခံဝတ္လာသည့္ ဘရာ အနီေရာင္ေလး ကလည္း ထင္းထင္းေလး ေပၚေနသည္။ ဒီေကာင္မေလးနဲ႔ေတာ့ ခက္ၿပီ။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီ ဝတ္မလာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ေတြ တဒဂၤ ရိုင္းသြားမိသည္။ ညီမေလးသဖြယ္ခ်စ္သည့္ သံေယာဇဥ္ထက္ အေတာ္ပိုသြားကာ ရင္ထဲမွာ ဗေလာင္ဆူ၍ အာေခါင္မ်ား ေျခာက္ကပ္လာသည္။ မရိုးသား ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိလိုက္ရၿပီး သူမအေပၚမွ အၾကည့္မ်ား ေရွာင္လႊဲရန္ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ “ကိုေလး… ဘာၾကည့္ေနတာတုန္း” “ဘာၾကည့္ရမွာလဲ… နင့္ကိုယ္နင္လည္း.. ငုံ႔ၾကည့္အုံး ပူတူးရယ္” “အယ္… ကိုေလး… ဘာျဖစ္လို႔တုန္း” သူမကိုယ္သူမ ငုံ႔ၾကည့္ၿပီး အလန႔္တၾကားႏွင့္ ေျပာသည္။ “ေရေတြစိုၿပီး ပူတူးတစ္ကိုယ္လုံး ကပ္ေနတာ အကုန္ျမင္ေနရတယ္ဟ” “အမ္… ကိုေလး… ဘယ္လို လုပ္ၾကမတုန္း” “ဘယ္လိုမွ မလုပ္နဲ႔ အဲဒီ ကားတာယာကြင္းကို အေရွ႕ကေန ကြယ္ၿပီး ကိုင္ခဲ့၊ အကၤ်ီ ဝယ္ရေတာ့မွာေပါ့” သူမက ကားကၽြတ္ကြင္းႀကီးကို ကြယ္ကာ အေနာက္မွ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း လိုက္လာသည္။ “ဟာ… ဒီေကာင္မေလး… ေအာက္ပိုင္းကိုကြယ္ဟ… ေဘာင္းဘီလည္း မဝတ္လာဘူး” ကၽြန္ေတာ္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကိတ္ ဆူရသည္။ “အာ… ကိုေလးကလည္း… ဝတ္လာပါတယ္… အဲ… အဟီး… ဟုတ္တယ္… အထဲက ခံဝတ္ဖို႔ ေမ့လာတာ” ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာေတာ့။ အနားမွာ ရွိသည့္ အထည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ ဝင္ကာ သူမႏွင့္ ေတာ္ေလာက္သည့္ အနီေရာင္ စကတ္ကေလးႏွင့္ အကၤ်ီ ဝမ္းဆက္ကေလးကို ဝယ္ေပးလိုက္ သည္။ အဝတ္လဲသည့္ အခန္းကို လက္ညႇိုးထိုးျပလိုက္သည္။ “ကိုေလး လိုက္ခဲ့အုံးေလ… ပူတူးတစ္ေယာက္တည္း” “ဟာ…ငနာမေလး… နင္အဝတ္လဲတာ ငါက ဘာလိုက္လုပ္ရမွာလဲ” “ဟာ… လိုက္ခဲ့ပါ… အထဲလိုက္မဝင္နဲ႔ေလ…အျပင္ကေစာင့္ေပါ့” “ေအးပါဟာ… လိုက္ခဲ့ပါ့မယ္” အျဖစ္သေဘာမ်ိဳး လုပ္ထားသည့္ အဝတ္လဲခန္းထဲသို႔ ဝင္သြားသည္။ အေနာက္ဖက္မွာ ပင္လယ္ႀကီးသာ ရွိၿပီး ဘာမွ မရွိ။ အထည္ဆိုင္တြင္ လူရွင္းေန၍သာ ေတာ္ေတာ့သည္။ ေနက ညေနေစာင္းသျဖင့္ အေနာက္ဘက္မွ ထိုးေနသည္။ အဝတ္လဲခန္းကို ကာရံထားသည္ ကလည္း ပလတ္စတစ္စ အပါးေလး။ ၿပီးေတာ့ လည္ပင္းေလာက္အထိသာ လုပ္ထားသျဖင့္ ေခါင္းပိုင္းကို ျမင္ေနရသည္။ သူမက အခန္းထဲကေန လွမ္းေျပာင္ျပေနသျဖင့္ လက္သီး ေထာင္ျပလိုက္ရသည္။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အဝတ္လဲေနသည္ကို မ်က္ႏွာလႊဲထားသင့္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မလႊဲျဖစ္ခဲ့။ ေနေရာင္ျဖင့္ က်ေနေသာ သူမ အရိပ္ကို ပလတ္စတစ္စေပၚမွာ ျမင္ေနရသည္။ သူမက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး လွည့္ကာ အဝတ္လဲသည္။ သူမ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေရစို အဝတ္ မ်ားကို ခၽြတ္ကာ တန္းေပၚသို႔ တင္သည္။ သူမ၏ အဝတ္မဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အရိပ္ကို ျမင္ေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲ ‌ဗေလာင္ဆူေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဝယ္ေပးေသာ အဝတ္မ်ားကို ဝတ္ကာ ထြက္လာသည္။ အနီေရာင္ ဝမ္းဆက္ကေလးနဲ႔ သူမပုံစံေလးက အလြန္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလြန္း ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ပုံက ေမာင္ခ်စ္ ႏွမခ်စ္ မဟုတ္သည္ေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီ။ သို႔ႏွင့္ ညေန ေျခာက္နာရီထိုးေလာက္က်ေတာ့ သူမသူငယ္ခ်င္းမ်ား ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ အပီအျပင္ ကဲလာၾကေသာေၾကာင့္ အသြားေလာက္ အာက်ယ္အာက်ယ္ မလုပ္နိုင္ေတာ့။ ကိုယ့္အတြဲႏွင့္ကိုယ္သာ တိတ္တဆိတ္ ျပန္လာၾကသည္။
သူမတို႔၏ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ရေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ေနာက္ သုံးနာရီအတြင္း ကုန္ေတာ့မည္ေလ။ ညဘက္ေရာက္လာေတာ့ အနည္းငယ္ ေအးလာသည္။ “ကိုေလး… ခ်မ္းတယ္” ကၽြန္ေတာ္ ကားေပၚမွာထားခဲ့ေသာ ဂ်ာကင္ကို သူမအား တစ္ျခမ္း လႊမ္းေပးလိုက္သည္။ လမ္းတစ္ဝက္ေလာက္ ေရာက္ေတာ့… “ဒိုင္း …..” က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႏွင့္အတူ သိမ့္ကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ “ကားဘီးေပါက္သြားၿပီေဟ့… ေအာက္ဆင္းၿပီး ေစာင့္ၾကအုံး… ဘီးအပို ပါမလာဘူး… ဟိုက လွမ္းမွာရအုံးမွာ” သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကို မွီၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနရာမွ လန႔္နိုးလာသည္။ “ကိုေလး… ဘာျဖစ္တာလဲ” “ကားဘီးေပါက္သြားတာ..” “အဲဒါဆို ၾကာအုံးမွာေပါ့” “အင္း… ၾကာေလာက္တယ္… ကားဘီးပို ပါမလာဘူး… ၿမိဳ႕က လွမ္းမွာထားတုန္း” “အင္း… အေမေတာ့ စိတ္ပူေတာ့မွာပဲေနာ္” “ကိုေလး ဖုန္းဆက္ထားမယ္ေလ…” “တူ…. တူ….. ဟဲလို အန္တီ သားပါ” “ေအး သား ေျပာ” “အန္တီေရ… ဒီမွာ လမ္းတစ္ဝက္မွာ ဘီးေပါက္သြားလို႔ အန္တီစိတ္ပူေနမွာစိုးလို႔” “ေအာ္… ျဖစ္ရတယ္ကြယ္… ေအးေပါ့ ဘယ္တတ္နိုင္မလဲ… မင္းညီမေလး ဂ႐ုစိုက္ေနာ္… လမ္းေပၚ ေလၽွာက္သြားမေနေစနဲ႔အုံး ညေမွာင္ေတာ့ ေႁမြပါးကင္းပါး သတိလည္း ထားအုံး” “ဟုတ္ကဲ့..အန္တီ စိတ္ခ်ပါ… အိမ္ေရာက္ေအာင္ လာပို႔ပါ့မယ္” “ေအးပါ ေအးပါ… ဒါဆို အန္တီ ေစာင့္ေနလိုက္မယ္ေနာ္…” ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီးေနာက္… “ကဲ ပူတူး… အေမ့ဆီေတာ့ ဆက္ၿပီးသြားၿပီ” ထိုအခ်ိန္ဝယ္ သူ႔အတြဲလိုက္ အတြဲလိုက္ ကားနဲ႔ ေဝးရာလမ္းေဘးမွာ အခင္းေလးေတြ ခင္းၿပီး ထိုင္ေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကားနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာပင္ အခင္းေလးခင္းၿပီး ထိုင္ေနၾကသည္။ ဂ်ာကင္ကို သူမကိုယ္ေပၚသို႔ တစ္ထည္လုံး ျခဳံေပးလိုက္သည္။ “ကိုေလး… ေအးေနမွာေပါ့… လာပါ… ညီမေလးနဲ႔ အတူတူျခဳံမယ္” “ျခဳံပါ… ကိုေလး မေအးပါဘူး” “အာ.. ေအးတာေပါ့.. ညီမေလးေတာင္ ေတာ္ေတာ္ ခ်မ္းေနၿပီ” သူမက ဂ်ာကင္ကို ကၽြန္ေတာ့္ေပၚသို႔ လာျခဳံေပးသည္။ သူမ၏ ကိုယ္ေငြ႕ေလးက ေႏြးေႏြးေနသည္။ သူမအေပၚပိုင္းတစ္ပိုင္းလုံး ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာ ေရာက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထိန္းေနရသည္။ မထိန္းလို႔ မျဖစ္။ သူမတို႔ မိသားစုရဲ့ ယုံၾကည္မႈကို အလြဲသုံးစား မလုပ္ရက္။ ပူတူးကလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ တကယ့္ အစ္ကိုရင္းတစ္ေယာက္ လိုသာ တြယ္တာေနပုံရသည္။ လက္က ေယာင္မွားကာ သူမ၏ ရင္အစုံေပၚသို႔ ေရာက္ေတာ့ မည့္ဆဲဆဲ ျပန္႐ုပ္လိုက္ကာ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္သာ ဆိတ္လိုက္ရသည္။ ထိုစဥ္ အိပ္ေနရာမွ သူမ လူးလြန႔္လာကာ… “ကိုေလး… ပူတူး ရႉးေပါက္ခ်င္တယ္” “ဟိုဘက္နားမွာ သြားေပါက္ေလ.. ဒီနားမွာ ကားသမားေတြ ရွိတယ္” “ကိုေလး လိုက္ခဲ့အုံး… ေမွာင္မဲေနတာပဲ… ပူတူးေၾကာက္လို႔။ လေရာင္ႏွင့္ ဝိုးတဝါး ျမင္ေနရေသာ ကားလမ္းမႀကီးနံေဘးမွ ခြဲထြက္သြားသည့္ တာေဘာင္မွ အနည္းငယ္ ေဝးသည့္ ေနရာသို႔ ဝင္သြားလိုက္သည္။ “ရၿပီ… ဒီနားမွာ ေပါက္ေတာ့” သူမက ဘာမေျပာညာမေျပာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကာ ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ အစက မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္မလို႔ ႀကိဳးစားေသးေသာ္လည္း အၾကည့္က သူမ ေအာက္ပိုင္းသို႔သာ ေရာက္သြားသည္။ တရွဲရွဲ အသံႏွင့္အတူ လေရာင္ေအာက္မွာ သူမေအာက္က ေငြေရာင္ အရည္ေလးမ်ားကိုလည္း ဝိုးတဝါး ျမင္ေနရသည္။ လဆုတ္ရက္ ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္ေနသည္ကို သူမ သတိထား မိပုံ မေပၚ။
သူမ ကိစၥဝိစၥၿပီး၍ ထထြက္လာခဲ့ၿပီး လမ္းေပၚ ျပန္ေရာက္စဥ္မွာပင္ ကားတစ္စီးေရာက္လာၿပီး ကားဘီးကို လဲလွယ္တပ္ဆင္သည္။ ထိုည အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ည ၁၂ နာရီပင္ ထိုးလုၿပီ။ သူမအေမက မအိပ္ေသးဘဲ ေစာင့္ေနပုံ ရသည္။ “သမီးရယ္… မေန႔ကတည္းက အေမေျပာေနတာကို နားမေထာင္ဘဲ.. အခုေတာ့ နင့္ကိုေလး အားနာစရာ” “အန္တီကလည္း ရပါတယ္… ဘာမွ မျဖစ္ဘူး.. သူ လုပ္တာမွ မဟုတ္တာ” “ကဲ… ဒါဆို သား ဒီမွာပဲ အိပ္ေတာ့ … မနက္မွသာ ျပန္” သူမအေမက ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ျခင္ေထာင္တစ္လုံးကို သူမတို႔ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ ေထာင္ေပးသည္။ သူမတို႔ အိမ္မွာက အိမ္ေရွ႕ခန္း ေနာက္ခန္းရယ္လို႔ မရွိ၊ ေရွ႕က ေဈးဆိုင္က အိမ္ေရွ႕ခန္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က အိမ္မွာ အခန္းကန႔္ထားတာ မရွိ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္။ ပူတူးကေတာ့ ေျခပစ္လက္ပစ္ႏွင့္ အိပ္ေမာ က်ေနၿပီ။ “ကိုေလး… ကိုေလး…” ငတိမက အိပ္ေနရင္းႏွင့္ပင္ ေယာင္ေနေသးသည္။ ဝတ္ထားေသာ စကတ္က အေပၚသို႔ လန္တက္ေနကာ ညမီးေရာင္ မွိန္မွိန္ေအာက္မွာ အထင္းသား ျမင္ေနရျပန္သည္။ ေအာ္ ဒီကေလးမနဲ႔ေတာ့လည္း ငါ့မွာ ဒုကၡ လွလွေတြ႕ရမွာပါေလ။ ေနာက္ေန႔ မနက္ မိုးလင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္သြားသည္။ အရင္က သူ႔အေပၚမွာ ရိုးသားခဲ့သည့္ကၽြန္ေတာ္ မရိုးမသားစိတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ျမင္ခဲ့ရသည့္ျမင္ကြင္း၊ ေဘာကြင္းစီးစဥ္က အထိအေတြ႕၊ ကားေပၚမွာ ၾကဳံခဲ့ရသည့္ အထိအေတြ႕တို႔က စိတ္ထဲတြင္ စိုးမိုးေနခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ရည္းစားစကား ေျပာဖို႔ ႀကံစည္မိသည္။ သို႔ေသာ္ မေျပာရဲေသး။ မေျပာရဲေသးတာထက္ မေျပာသင့္ေသးဟု ယူဆသည္။ ဒီေကာင္မေလး ေက်ာင္းမၿပီးေသး။ ဆယ္တန္းေလးေတာ့ ေအာင္ေအာင္ ေျဖပါေစအုံးဟု ေတးထားလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကသာ စိတ္ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သူကေတာ့ သိပုံမေပၚပါ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သြားျမဲ လာျမဲ စားျမဲ ေသာက္ျမဲ။ထူးျခားလာသည္က ယခင္က ဒီေကာင္မေလး ဘယ္လိုေနေန ဘယ္လိုထိုင္ထိုင္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ မ်က္စိထဲမွာ အလိုလို ျမင္လာသည္။ ယခင္က ပူတူး ေျမႀကီးေပၚမွာ ထိုင္ေနတာ တင္ပါးႏွစ္ခုေပၚေနသည္ကို မၾကာခဏျမင္ဖူးေသာ္လည္း ကေလးဟုသာ သေဘာထားကာ ဘာမွ မေျပာျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အျမင္ မေတာ္သည္ကို ဆူမိသည္။ ပူတူးက အရမ္း ကေလးဆန္သည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ဘာျဖစ္လို႔ ျဖစ္မွန္းလည္း သိပုံ မရ။ အိမ္ေနရင္း ေဘာ္လီမပါဘဲ တီရွပ္ဝတ္ခ်င္ဝတ္သည္။ ေဘာင္းဘီအၾကပ္ဝတ္ၿပီး ဒူးေထာင္ေပါင္ကား ထိုင္ခ်င္ထိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆူေတာ့.. “ကိုေလး… သမီးဆယ္တန္းေရာက္မွ အေတာ္ဆူတယ္ေနာ္.. ဟိုဟာမဝတ္နဲ႔.. ဒီလို မေနနဲ႔.. နဲ႔” “ဟ… ဆူမွာေပါ့… နင့္ကိုယ္နင္ ကေလးေပါက္စ မွတ္ေနလို႔လား… စိတ္ကကေလးေပမဲ့ လူက အပ်ိဳေပါက္ ျဖစ္ေနၿပီ.. အျမင္မေတာ္တာေတြ႕ ေျပာရမွာေပါ့.. ၿပီးေတာ့ ငါက..” “ဘာျဖစ္လဲ.. ငါက.. ကိုေလးကလည္း စကားကို ဆုံးေအာင္ မေျပာဘူး” “နင္ငယ္ေသးတယ္ ေျပာလို႔မရေသးဘူး၊ ဆယ္တန္းေျဖၿပီးမွ ေျပာျပမယ္..” ပါးစပ္ကို မနည္း ဘရိတ္အုပ္ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း သူမ နည္းနည္း ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ လုပ္တတ္လာသည္။ သူမ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္း ထြက္သည့္ေန႔… သူမ အိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ သူ႔အေမနဲ႔ ေတြ႕သည္။
“အန္တီ.. ပူတူးေရာ.. ေအာင္စာရင္းသြားၾကည့္မလို႔ လာေခၚတာ” “သားညီမက.. မိုးမလင္းခင္ကတည္းက ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ၿပီး ထြက္သြားေလရဲ့” ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕သို႔ အေျပးခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေရွ႕ေရာက္ေတာ့… ပူတူးကိုလည္း မေတြ႕။ ဒါနဲ႔ ေအာင္မေအာင္ သြားၾကည့္ေတာ့ ေအာင္သည္။ ဂုဏ္ထူးေတာ့ မပါ။ ဒီေကာင္မေလး စာက်က္ပုံနဲ႔ကလည္း ဂုဏ္ထူး ထြက္စရာ ေတာ့ မရွိပါ။ သူမကို လွည့္ပတ္ရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႕သျဖင့္ သူမတို႔အိမ္သို႔ ျပန္သြားလိုက္သည္။ “အန္တီ… ပူတူး ေအာင္တယ္… ဂုဏ္ထူးေတာ့ မပါဘူး… ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းမွာ မေတြ႕ခဲ့ဘူး… ဘယ္သြားလဲ မသိဘူး..” “သိပါဘူးကြယ္.. မင္းညီမကလည္း… အရင္ေတာ့ အဲလို မသြားတတ္ပါဘူး” “အင္းပါ… ဒီမွာပဲ ေစာင့္လိုက္မယ္အန္တီ.. သူ႔ကို ဆုခ်ခ်င္လို႔” “ေအးပါသားရယ္… အထဲမွာ ထမင္းရွိတယ္ ထမင္းသြားစားအုံး” တစ္ေနကုန္ ထိုင္ေစာင့္သည္။ ျပန္မလာ။ မိုးခ်ဳပ္ေတာ့ သူမအေမေရာ ကၽြန္ေတာ္ပါ စိတ္ပူစ ျပဳလာပါၿပီ။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ညမိုးခ်ဳပ္မွ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ လူေပ်ာက္ ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ရသည္။ ဆိုင္ကယ္သာ ဆီ သုံးပုလင္း ကုန္သြားသည္။ သြားတတ္တဲ့ေနရာေတြကိုလည္း အကုန္ေရာက္ၿပီးၿပီ။ ဧကႏၲ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာ မွန္ခဲ့ရင္… မွန္လည္း မမွန္ေစခ်င္၊ ဒါေပမဲ့လည္း ဘာမွ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔သာ ဆုေတာင္းေနရေတာ့သည္။ သူမအေမကလည္း တငိုငို တရယ္ရယ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီညေတာ့ သူမတို႔ အိမ္မွာပဲ အားေပးရင္း အိပ္လိုက္ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ကို ပတ္ၿပီး ထပ္ရွာသည္။ တစ္ေနသာ ကုန္သြားသည္။ ရွာမေတြ႕။ ဒီညေနမွ မေတြ႕လ်င္ ရဲစခန္းကို လူေပ်ာက္တိုင္ဖို႔ စဥ္းစားထားသည္။ ညေန ငါးနာရီခြဲေလာက္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ သူမ အေမကို ဘယ္လို ေျပာရမည္ မသိ။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ အိမ္ေရွ႕မွာ ဆိုင္ကယ္ေတြ ခုနစ္စီးေလာက္ ရပ္ထားတာ ေတြ႕လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ပူသြားသည္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲေတာ့ မသိ။ အိမ္ထဲေရာက္ေတာ့ အိပ္ခန္းေရာ ဧည့္ခန္းေရာ ဒီတစ္ခန္းသာ ရွိသည့္ သူမတို႔ အိမ္ထဲတြင္ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြေရာက္ေနသည္။ ပူတူးက မ်က္ႏွာကို ငုံ႔ထားရာမွ ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ခ်က္ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ၿပီး ျပန္ငုံ႔သြားသည္။ ထိုင္ၿပီး ေမးစမ္းၾကည့္ေတာ့မွ အေၾကာင္းစုံ သိရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကေလးမ်ား ပ်က္သုဥ္းသြားေပၿပီ။ ေအာင္စာရင္းထြက္လ်င္ ပူတူးကို ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္၊ သူမ တကၠသိုလ္ တက္နိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္၊ ေက်ာင္းၿပီးမွပဲ ယူမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားသည္ေလ။ ပူတူး ေအာင္စာရင္း ထြက္ၿပီးၿပီးခ်င္းပင္ သူနဲ႔ တစ္တန္းတည္း သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ေကာင္ေလးႏွင့္ ခိုးရာလိုက္ေျပးသည္။ တစ္ညအိပ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လာ အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္ေလးက ငါးက်ည္းေျခာက္႐ုပ္ မည္းမည္းသည္းသည္း ဘယ္လို ႀကိဳက္သြားသလဲေတာ့ မသိ။
ရင္ထဲမွာ ဆို႔တက္လာကာ ဝမ္းနည္းလာသျဖင့္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘဲ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းသြားကာ ကၽြန္ေတာ့္ အေဆာင္သို႔သာ ျပန္လာခဲ့လိုက္သည္။ စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ အရက္တစ္လုံးဝယ္ကာ တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေသာက္ေနလိုက္သည္။ ဘယ္ႏွခြက္ေတာင္ ေသာက္မိမွန္းပင္ မသိေတာ့။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ေရာက္ေတာ့ ေခါင္းကိုက္သျဖင့္ မထနိုင္။ တံခါးေခါက္သံၾကားေတာ့ အားယူၿပီး ထရသည္။ “ဟင္ ကိုေလး အရက္ေတြ ေသာက္ထားတာလား” “ဟာ… ပူတူး.. နင္ဘာလာလုပ္တာလဲ” “အစ္ကိုေလးကို လာေတာင္းပန္တာပါ… ပူတူး မွားသြားတယ္ အစ္ကိုေလးရယ္” “ေအး… မွား… မွားစမ္း… နင္မွားတာ ျပင္မရတဲ့ အမွား ပူတူးရယ္.. နင္ ဒီအသက္ဒီအရြယ္နဲ႔ ဟိုေကာင္ေလးကလည္း အလုပ္မရွိေသးဘူး နင္တို႔ ဘယ္လို စားၾကမလဲ” “ဟင့္.. ကိုေလးရယ္.. မေန႔က ဧည့္သည္ေတြ ျပန္သြားေတာ့ အေမ ပူတူးကို ဆူတယ္” “ေအး… ေတာ္ေသးတာေပါ့.. ဆူ႐ုံပဲ ဆူလို႔…” “ဒါနဲ႔… ကိုေလးက အရင္ အရက္ေတြ ဘာေတြ မေသာက္ဘဲ အခုမွ ဘာလို႔ ေသာက္ရတာလဲ” “ငါ မေျပာခ်င္ဘူး ပူတူးရာ… ေျပာလည္း မေျပာသင့္ေတာ့ဘူး… မေမးနဲ႔ေတာ့” “ကိုေလးရယ္.. ပူတူးကို ခ်စ္ရင္ ေျပာျပပါ” “ေအးဟာ… ငါေျပာလို႔ရတာ ေျပာျပမယ္.. ငါ့မွာ မိဘေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး… ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမလည္း မရွိေတာ့ဘူး… ဒီမွာ ငါခင္တြယ္စရာ ဆိုလို႔ နင္ နဲ႔ နင့္အေမပဲ ရွိတာ.. အခု ပူတူး နင္… ေယာက္်ားရသြားၿပီ.. ငါ့ဘဝမွာ ခင္တြယ္စရာ ဘယ္သူမ်ား ရွိေသးလဲ…” ညက အမူးရွိန္ကလည္း မေျပေသးသျဖင့္ အေတာ္ေလး တင္းတင္းမာမာ ေျပာမိလိုက္သည္။ ပူတူးလည္း ငိုယိုၿပီး ျပန္သြားရွာသည္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ တင္းခံထားေသာ္လည္း သူမအေမက မဂၤလာေဆာင္ကိစၥ ဦးေဆာင္ စီမံေပး ဖို႔ ေတာင္းဆိုျပန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အမွတ္သည္းေျခမရွိ၊ သြားလုပ္ေပးမိျပန္သည္။ ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္သာ ခၽြန္း အုပ္ေနရေတာ့သည္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်မွ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွ မထားသင့္ေတာ့။ ဒု သ န ေသာ ကို စိတ္ႏွင့္လည္း မက်ဴးလြန္ခ်င္ေတာ့။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူမတို႔ အိပ္မည့္ အခန္းပါ စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္ေပးခဲ့မိသည္။ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေတာ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္လုံး လာကန္ေတာ့ၾကသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ေတာ့ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ ငယ္ၾကမည္ပဲေလ။ အစ္ကိုႀကီး အဖရာ ဆိုသည့္ စကား အတိုင္း ဆုေတြေတာ့ ေပးလိုက္သည္။ ဘာေတြ ေပးမိမွန္းပင္ မသိေတာ့။ ခ်စ္စခင္စ ၾကင္နာ စ ဆိုေတာ့လည္း တစ္ျပဳံးျပဳံး တေပ်ာ္ေပ်ာ္ႏွင့္ေပါ့ေလ။ သူမတို႔ အိမ္ကိုလည္း တစ္ပတ္ တစ္ခါ ေလာက္သာ ေရာက္ေတာ့သည္။ သူမ အေမကေတာ့ ယခင္လိုပင္ ဝင္ထြက္ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က ဆင္ျခင္ရမည္ေလ။ ေနာက္ထပ္ သုံးလခန႔္ၾကာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အထက္ပိုင္းသို႔ အေျပာင္းအေရႊ႕ က်သည္။ ဝမ္းလည္း သာသလို ဝမ္းလည္း နည္းသည္။ ဝမ္းသာသည္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေပ်ာ္ပိုက္နိုင္ ေတာ့သည့္ အရပ္ေဒသမွာ မေနလိုေတာ့ၿပီ။ ဝမ္းနည္းမိသည္က ဒီၿမိဳ႕မွာ အလုပ္စဝင္ကတည္း က ေနခဲ့သည့္ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ပင္။ ေျပာင္းသြားၿပီး အေတာ္ၾကာသည္အထိ ပူတူး အေမႏွင့္ ဖုန္း ေျပာျဖစ္သည္။
ကိုေလးကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားမိလို႔ ေျပာတာဆိုၿပီး ျပန္ေတာင္း ပန္ေတာ့ ေျပလည္သြားတာ။ ကိုေလး ပူတူးကို ေဈးထဲ ေခၚသြားၿပီး ပူတူးလိုခ်င္တာ ဝယ္ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔မွာ သုံးေသာင္းပဲ ပါလာတယ္၊ မေလာက္ရင္ေတာ့ ဆိုင္မွာ ေရြးၿပီး ခ်န္ခိုင္းထားၿပီး ျပန္သြားယူၾကမယ္ ေျပာတယ္။ ပူတူးကိုေလးကို သနားလိုက္တာ။ အဲဒါနဲ႔ ေဈး သင့္သင့္ေလာက္ပဲ ယူမယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္မွာ ဝင္ေမးၾကတယ္။ ဂါဝန္ ဆင္စြယ္ေရာင္ေလး တစ္ထည္ ေတြ႕လို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္ေသာင္း လို႔ ေျပာတာနဲ႔ အဲဒါေလး လိုခ်င္တယ္လို႔ ကိုေလးကို လက္ညႇိုးထိုးျပတယ္။ ကိုေလးက ပိုက္ဆံရွင္းၿပီး တခါတည္း လဲခိုင္းတယ္။ ပူတူး အဝတ္လဲခန္းထဲ ဝင္ၿပီး ကိုေလးဝယ္ေပးတဲ့ ဂါဝန္ေလးကို လဲလိုက္တယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ မွန္ထဲကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာေတြ က်ေနတာ အဟိ။ အျပင္ျပန္ထြက္လာေတာ့ ကိုေလးက ပူတူးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရႊန္းရႊန္းစားစားကို ၾကည့္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ပူတူးသိတယ္။ ဒါ ကိုေလး ေကာင္မေလး လွလွ တစ္ေယာက္ကို ၾကည့္သလို ၾကည့္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အေဖက သမီးေလးကို ခ်စ္စနိုးၾကည့္သလိုမ်ိဳး၊ အစ္ကိုက ညီမေလးကို ခ်စ္စနိုးၾကည့္တာမ်ိဳး။ ပူတူး ရင္ထဲ ေႏြးသြားတာပဲ။ ကိုေလးက သိပ္ အမ်ားႀကီး မေျပာဘူး။ “ပူတူးေလး လွတယ္”တဲ့။ ကိုေလးလက္ကို ဆြဲၿပီး မုန႔္သြားစားၾကတယ္။ ပူတူးက မုန႔္ဆိုင္ေရာက္လို႔ကေတာ့ ဘာလာလာ အဝ ဆြဲတာ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား ဗိုက္ကားၿပီး အိမ္ျပန္လာတာေပါ့။ အေမက ပူတူးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာေတြ က် လို႔။ ကိုေလးက ပူတူးရဲ့ စကားေဖာ္လည္း ဟုတ္၊ အစ္ကိုလည္း ဟုတ္၊ မုန႔္စားေဖာ္လည္းဟုတ္၊ ၿပီးေတာ့ စာနားမလည္လို႔ သြားေမးရင္လည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္း ျပတတ္ေသးေတာ့ ဆရာလည္း ဟုတ္ ပဲ။ ကိုေလးကို ေလးစားတယ္။ ကိုးတန္းစာေမးပြဲေျဖေတာ့ ကိုေလး ညဘက္ အိမ္မွာ လာေနေပးတယ္။ ပူတူးကို ေကာ္ဖီတိုက္ လိုက္၊ လက္ဖက္သုပ္ေကၽြးလိုက္နဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနေရာပဲ။ စာေတာ့ ဝိုင္းကူ မက်က္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်က္စရာ မလိုေအာင္ စာကို ကဗ်ာေတြ လုပ္ၿပီး ကိုေလး ေရးေပးထားတာ ေအးေဆး ျဖစ္ေနၿပီေလ။ ပူတူး အိပ္မွ ကိုေလး အိမ္က ျပန္တယ္။ ပူတူး ကိုေလးကို ခ်စ္တယ္။ ခ်စ္တယ္ ဆိုလို႔ ဘာဘာညာညာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။
ပုံေတြမွာေတာ့ အရင္ျမင္ဖူးေနက်ပုံေတြနဲ႔ မတူဘူး။ အဝတ္အစားမပါတဲ့ ပုံေတြျဖစ္ေပမဲ့ ကိုရီးယားမင္းသားေတြလို႔ ေျပာတယ္၊ အရမ္းေခ်ာတယ္။ သူက ရည္းစားထားစရာ မလိုဘူးတဲ့။ သူ စိတ္ေတြ ထ လာၿပီး အရည္ေတြထြက္က်လာရင္၊ ပိပိ ထဲက ယားလာရင္ ဒီပုံေလးေတြ ထုတ္ၾကည့္ၿပီး အာသာေျဖတယ္တဲ့။ ေဇာင္းတိုက္တယ္လို႔ ေခၚတာေပါ့တဲ့။ ၿပီးေတာ့မွ ပူတူးကို မရွက္နဲ႔ နင္လည္း ေနာက္ စမ္းခ်င္ရင္ စမ္းလို႔ ရေအာင္ ငါ သင္ေပးမယ္ တဲ့။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထလာတာနဲ႔ အဲလိုပဲ အာသာေျဖလိုက္ ေျပသြားမွာတဲ့။ အပ်ိဳစင္ ဘဝကိုေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ တကယ္ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ သတို႔သားကိုပဲ ေပးမယ္ တဲ့။ သူက သူ႔အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီကို ခၽြတ္တယ္။ ပူတူးကိုလည္း ခၽြတ္ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာ ၾကည့္ေနာ္ ဆိုၿပီး လက္ခလယ္နဲ႔ သူ႔ပိပိကို သူ ပြတ္ေတာ့တာပဲ။ အစိေလး ေထာင္လာတယ္။ အဲဒါေလးကို ပြတ္လိုက္။ အကြဲေၾကာင္းကို ပြတ္လိုက္နဲ႔ မ်က္လုံးေလး စင္းၿပီး တအင္းအင္း တအားအားနဲ႔ အေတာ္ႀကီး ၾကာေတာ့မွ ဆန႔္ကနဲ ဆန႔္ကနဲ ျဖစ္ၿပီး ေျခပစ္လက္ပစ္ ျဖစ္သြား တယ္။ သူအဲလို လုပ္ျပေနတဲ့အခ်ိန္မွာကို ပူတူးရဲ့ ေအာက္ကဟာထဲက စစ္စစ္စစ္စစ္နဲ႔ ယားက်ိက်ိ ျဖစ္လာတယ္။ အရည္ေတြလည္း စိုလာတယ္။ သူက နင္ပက္လက္လွန္လိုက္ ဆိုၿပီး ပူတူးကို ပက္လက္ လွန္ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဟာသူ လုပ္သလိုမ်ိဳး လုပ္တယ္။ ပူတူး တစ္ခါမွ မခံစားဖူးပါဘူး။ မ်က္လုံးထဲ ၾကယ္ေတြ လေတြ ျမင္ လာလိုက္၊ ေျခဖ်ားကပဲ ရွိန္းကနဲ ရွိန္းကနဲ ျဖစ္သလို၊ လက္ဖ်ားေတြပဲ က်င္ကနဲ က်င္ကနဲ ျဖစ္ သလို၊ ေလထဲမွာပဲ လြင့္ေနသလိုလို ျဖစ္ေနတယ္။ ခံစားေနရတာေတြက ေလ်ာ့မသြားဘဲ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာတယ္၊ ရပ္သြားမွာလည္း စိုးရိမ္ေနတယ္၊ ေရွ႕ ဘာေတြ ဆက္ခံစားရမွာ ဆိုတာကိုလည္း ေၾကာက္ေနတယ္၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေမာလည္း ေမာလာၿပီး ဘယ္လိုႀကီး ျဖစ္ေနမွန္းကို မသိဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ဟိုဟာထဲကေန က်င္တက္လာၿပီး ေသးေတြ ထြက္က် ေတာ့မလို ဘာလို ျဖစ္လာတယ္၊ ေသးထြက္က်ေတာ့မယ္ ရပ္ေတာ့ ဆိုေတာ့လည္း မရပ္ ဘူး။ အဲလိုနဲ႔ ေနာက္ဆုံး ဘာေတြ ျဖစ္မွန္းကို မသိေတာ့ဘဲ တစ္ကိုယ္လုံက အေၾကာေတြကို ဆြဲပစ္ လိုက္သလို၊ပြင့္ထြက္သြားသလို ျဖစ္သြားၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေလ်ာ့သြားေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္ ေသးေတြလားေတာ့ မသိဘူး။ အိပ္ရာေပၚမွာကို ရႊဲနစ္ကုန္တာ။ခဏအေမာေျဖၿပီးေတာ့ နင္လည္း နင့္ဘာသာ လုပ္၊ ငါလည္း ငါ့ဘာသာ လုပ္ အတူတူ လုပ္ၾက မယ္ဆိုၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ပြတ္ၾကတယ္။ သူလုပ္ေပးတာက်ေတာ့လည္း အရသာက တစ္မ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ လုပ္ေတာ့လည္း အရသာ တစ္မ်ိဳးပဲ။ လက္တစ္ဖက္က ကိုယ့္နို႔ကိုယ္ ဆုပ္ကိုင္လိုက္ ပြတ္လိုက္၊ တစ္ဖက္က ေအာက္ကဟာကို ပြတ္လိုက္ ကလိလိုက္နဲ႔ ဇိမ္က်ေန လိုက္တာ ေနာက္တစ္ခါ ခုနကလိုမ်ိဳး ထပ္ျဖစ္သြားတယ္။
တင့္ ေတာင္းတင့္တယ္ လာေတာင္းခံရရင္ အေမ ဒီလို ျဖစ္မွာ မဟုတ္။ ပူတူး မ်က္ရည္ေတြ ဝဲလာတာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေတာင္ မႈန္ဝါးဝါးပဲ ျမင္ရေတာ့တယ္။ ကိုေလးက အိမ္ေပၚ တက္ လာၿပီး ခဏ ဝင္ထိုင္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္းၿပီး အိမ္ေပၚကေန ဆင္းသြားတယ္။ ကိုေလး ပူတူးကို စိတ္ဆိုးသြားၿပီ။ ေနာက္ေန႔မနက္ ကိုေလးအေဆာင္အထိ လိုက္သြားတယ္။ အရင္လည္း တခါတေလ အဲလိုပဲ လာလာႏွိုးေနက်ဆိုေတာ့ သူ႔႐ုံးကလူေတြက ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ လွမ္းေတာင္ ႏႈတ္ဆက္ေန ေသးတယ္။ ကိုေလးအခန္းတံခါးကို ေခါက္ေတာ့ ကိုေလး ထဖြင့္တယ္။ အို… ကိုေလး တစ္ခါ မွ အရက္ေတြဘာေတြ မေသာက္ဖူးဘဲ အခု အရက္ေတြ ေသာက္ေနပါ့လား။ ကိုေလးပါးစပ္က အရက္နံ့တေထာင္းေထာင္း ထြက္ေနတယ္။မ်က္လုံးႀကီးကလည္း အစ္ၿပီး နီရဲေနတယ္။ ကိုေလး ပူတူးကို ျမင္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္ေတြ က်လာတယ္။ ပူတူးလည္း ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ ရင္ထဲ ဆို႔တက္လာၿပီး မ်က္ရည္က်လာမိတယ္။ ပူတူး ကိုေလးကို ေတာင္းပန္လိုက္တယ္။ ကိုေလး ပူတူးကို ဆူတယ္။ ဆူပါေစေလ။ ဆူ႐ုံတင္မက ရိုက္လည္း ခံ ဖို႔ အသင့္ပါပဲ ကိုေလးရယ္။ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကိုေလးကို လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သြားကန္ေတာ့ၾကတယ္။ ကိုေလး မ်က္ႏွာ လုံးဝ မေကာင္းေပမဲ့ လူႀကီးပီပီသသပဲ ေလသံကို ထိန္းၿပီး ဆုေတြ တသီႀကီး ေပးလိုက္တယ္။ ပူတူး စိတ္မေကာင္းျခင္းေတြ မ်ားစြာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း ကိုေလးနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာသြားတယ္။ ကိုေလး အေမ့ဆီကို တစ္ခါ တစ္ခါ ေရာက္လာေပမဲ့ ပူတူးကိုလည္း မေမးေတာ့ဘူးေျပာတယ္။ ကိုေလး ပူတူးကို စိတ္နာသြားတာ လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဥေပကၡာျပဳလိုက္ၿပီလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာပဲ ကိုေလး ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းကို ရာထူးတိုးနဲ႔ ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ သိရတယ္။အႀကီးတန္းစာေရး ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ေျပာတာပဲ။ အဆက္အသြယ္လည္း မရေတာ့ပါဘူး။ ပူတူး အိမ္ေထာင္ေရးကလည္း အစကတည္းကပဲ သိပ္ မေလးနက္ခဲ့လို႔လား မသိ။ သိပ္ အဆင္မေျပပါဘူး။ ယူတဲ့ ေယာကၤ်ားက အလုပ္လည္း မလုပ္တတ္၊ လုပ္ခ်င္စိတ္လည္း မရွိ၊ ပူတူးကိုလည္း မညႇာတာ။ သူ စိတ္ထန္ေနခ်ိန္မွာ ပူတူး ဘယ္ေလာက္ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေန ျဖစ္ေန အတင္း လုပ္ခ်င္တယ္။
တစ္ေန႔ေတာ့ ကိုေလး အေကာင့္ကို ေတြ႕တယ္။ ကိုေလးကလည္း Ko Lay ဆိုတဲ့ အေကာင့္နာမည္ပဲ။ ကိုေလးရဲ့ ဓာတ္ပုံ တင္ထားေတာ့ ခ်က္ခ်င္း Add လိုက္တာ။ ကိုေလးက လက္ခံလိုက္ေပမဲ့ ပူတူးအေကာင့္မွန္း သိပုံ မရပါဘူး။ ပထမ စာပို႔မလို႔ လုပ္ေသးေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ ကိုေလး သူ႔ဘဝနဲ႔ သူ ေပ်ာ္ပါေစ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီး ကိုေလးတင္သမၽွ ကိုေလးရဲ့ ပုံေတြကိုသာ ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းထားၿပီး အလြမ္းေၿပ ထုတ္ၾကည့္မိေတာ့တယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ “ပူတူး ဆိုတာ ႏွင္းစက္ေမ လား၊ ဟုတ္ရင္ စာျပန္ပို႔ေပးပါ” ဆိုတဲ့ စာတစ္ေၾကာင္း ေရာက္လာတာကို ထီေပါက္မတတ္ ေပ်ာ္သြားမိတယ္။ ပူတူး တစ္ခါမွ ပုံမတင္ဖူးရာက ပုံတစ္ပုံ တင္လိုက္လို႔ သိသြားတာ ျဖစ္မယ္။ ပူတူး ေပ်ာ္လိုက္တာ အရမ္းပဲ။ ခ်က္ခ်င္းပဲ စာျပန္ပို႔လိုက္တယ္။ ကလင္…ကလင္…ကလင္… ေဟာ.. အေမ့ဆီက ဖုန္းလာပါေရာ… ေျပာျပစရာ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ ေနာက္မွ ဆက္ေျပာမယ္ေနာ္။ အသည္းကြဲေဝဒနာအတြက္ အေကာင္းဆုံး သမားေတာ္က အခ်ိန္သာ ျဖစ္သည္။ ၾကာေတာ့ လည္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားသည္။ ႐ုံးက စာေရးမမတစ္ေယာက္ႏွင့္လည္း အေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာသည္။ သူမက ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးမည့္သူ မရွိသည္ကို သိသျဖင့္ အိမ္ခ်က္ကေလးမ်ား မၾကာခဏ ေပးတတ္ သည္။ ၾကာေတာ့လည္း သံေယာဇဥ္ေတြ ျဖစ္လာသည္။ ပထမပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အစြဲအလမ္းေဟာင္းေၾကာင့္ သူမအေပၚ ဒီ့ထက္ပို ခံစားလို႔ မရ။ သူမကေတာ့ အထာေပးသည္ ဟုပင္ ေျပာလို႔ရသည့္ အေနအထားေလာက္ ရွိလာသည္။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ထားသည့္ အစြဲအလန္းက အက်ိဳးလည္း မရွိ၊ ေကာင္းလည္း မေကာင္းပါဘူးဟု စိတ္ ဒုန္းဒုန္း ခ်လိုက္ ရသည္။ တစ္ရက္ေတာ့.. ဒီၿမိဳ႕က တန္ခိုးႀကီးဘုရားပြဲသြားဖို႔ ထိုမမက အေဖာ္လာစပ္သည္။ နာမည္က ျမေကသြယ္ တဲ့ေလ။ သူမကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္သာ ႀကီးမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားက အပ်ိဳေပါက္မေလးမ်ားပင္ အရႈံးေပးရေလာက္သည္။ စြင့္ကားေသာရင္၊ ထြားေသာတင္ႏွင့္ က်င္သြယ္ေသာ ခါးကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
ဗိုက္သား အဆီ လုံးဝ မရွိ။ အသားအေရကလည္း အရမ္းႀကီး မျဖဴေသာ္လည္း အသားဝါဝင္းသည့္ထဲမွာ ပါသည္။ ပြဲသြားမည့္ ညေန၊ သူမ အိမ္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေတာ့ သူမက အသင့္ ေစာင့္ေနသည္။ ဆိုင္ကယ္ ေနာက္က တက္လိုက္ၿပီး ပြဲခင္းရွိရာသို႔ ေမာင္းထြက္လိုက္သည္။ ေတာင္ေပၚေဒသ ဆိုေတာ့ လမ္း လမ္းက သိပ္မေကာင္းလွေသး။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ဘရိတ္အုပ္လိုက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာျပင္ကို လာထိေတြ႕ေနသည့္ သူမ၏ ရင္ႏွစ္မႊာ၏ အရသာ… ေႏြးလြန္းသည္။ ပြဲခင္းေရာက္ဖို႔က လယ္ကြင္းႀကီးကို ျဖတ္ရမည္။ ေႏြရာသီျဖစ္သျဖင့္ လယ္ကြင္းထဲမွာက ေျခာက္ေသြ႕ကာ လူအုပ္ႀကီးက ဆိုင္ကယ္ေတြ လမ္းေပၚမွာ ရပ္ထားခဲ့ၿပီး ေရစီးေၾကာင္းႀကီးလို တန္းစီကာ က်ိတ္က်ိတ္ တိုးေနသည္။ လူအုပ္ႀကီးထဲသို႔ မတိုးခ်င္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္က ကန္ေဘာင္ေပၚက ေလၽွာက္သည္။ ကံသည္ အျမဲေကာင္းမေနတတ္ေပ။ ဖုန္းဓာတ္မီး မွိန္မွိန္ေလး ထိုးထားေသာ အလင္းေရာင္ေအာက္သို႔ ကန္ေဘာင္ေဘးမွ ရိပ္ကနဲ တက္လာေသာ မည္းမည္းသ႑ာန္ တစ္ခု… သိလိုက္သည္… “အို… ေႁမြႀကီး… ေႁမြႀကီး..” သူမက အလန႔္တၾကား ေအာ္ဟစ္ကာ ကၽြန္ေတာ္ေပၚ အတင္း ဖက္တက္သည္။ ေျခႏွစ္ဖက္ ကလည္း ခ်ိတ္ထားလိုက္ေသးသည္။ ႐ုတ္တရက္မို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဟန္ခ်က္မထိန္းနိုင္ ျဖစ္ကာ ေရစပ္စပ္ရွိေသာ ကန္စပ္သို႔ ႏွစ္ေယာက္သား လုံးေထြးလ်က္ ျပဳတ္က်သြားေတာ့သည္။ က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေအာက္က သူမက ကၽြန္ေတာ့္ကို မ်က္ႏွာ ခ်င္း အပ္၊ ရင္ခ်င္းကပ္လ်က္ ထပ္လ်က္သားႀကီး။ သူမ၏ ထြက္သက္က ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာကို လာရိုက္ခတ္သည္။ စကၠန႔္ပိုင္းမၽွ မွင္သက္သြားမိၿပီးေနာက္ “အို”ဟု အလန႔္တၾကား ေရရြတ္ကာ ႐ုန္းသည္။ ေရစပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အရွိန္မထိန္းနိုင္ေတာ့ ေခ်ာ္က်ကာ သူမ ေပါင္လယ္ေလာက္ ဗြက္ထဲ နစ္သြားေတာ့ သည္။ “အား.. ေမာင္ေလး.. ဆြဲပါအုံး… က်ၿပီ” သူမလက္ကေန ဆြဲတင္လိုက္ရသည္။ ႏွစ္ေယာက္သားလည္း လူ႐ုပ္မေပါက္ေတာ့ ။ ေရကန္ထဲက တက္လာေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သားက ဗြက္ေတြနဲ႔ ။ လူေတြက ကြက္ၾကည့္သြားသည္။ ဒီပုံစံနဲ႔ ပြဲထဲသြားလို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ေတာ့။ ကားလမ္းေပၚသို႔သာ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ အိမ္သို႔ ျပန္ေမာင္းလာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နဲ႔ ပြဲခင္းက အေတာ္ေလး ေဝးသည္။ “ေမာင္ေလး… ရပ္အုံး… ရပ္အုံး… ဘာႀကီးလဲမသိဘူး… အီး” ျဖစ္ရျပန္ၿပီ။ လူရွင္းသည့္ေနရာ ေမွာင္ရိပ္ထဲသို႔ ထိုးရပ္လိုက္ရသည္။ “ေမာင္ေလး… လုပ္ပါအုံး… ေပါင္မွာ… ဘာေကာင္ႀကီးလဲမသိဘူး… ရြစိရြစိနဲ႔ ကပ္ေနတယ္” ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ၿပီ။ ဗြက္ေတာထဲက်သြားမွေတာ့။ “အစ္မ.. ကန္ေတာ့ေနာ္..” ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေျပာဆိုဆို ဆတ္ကနဲ ထိုင္ခ်လိုက္ကာ သူမ၏ ထဘီကို ဒူးဆစ္ေလာက္ထိ ဆြဲ လွန္လိုက္သည္။
“ဘယ္နားမွာလည္း အစ္မ” ” အား… ဒီနား… ဒီနားမွာ” သူမ လက္ေထာက္ထားသည့္ေနရာက ေပါင္ အလယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ… ဇာတ္လမ္းက လွေခ်ၿပီ။ မတတ္နိုင္ေတာ့။ လက္ကို ထဘီေအာက္က ႏွိုက္သြင္းလိုက္ကာ သူမ ျပသည့္ေနရာသို႔ ထိုးႏွိုက္လိုက္သည္။ ကၽြဲေမၽွာ့ႀကီး။ အေတာ္ႀကီးသည္။ ေရထဲက်တုန္း အမိအရ တြယ္လိုက္တာ ျဖစ္မည္။ “မေၾကာက္နဲ႔ေတာ့ အစ္မ.. ဒီမွာ ရၿပီ” “ဟယ္.. ေမၽွာ့ႀကီး.. အႀကီးႀကီးပဲ… အစ္မက ေမၽွာ့သိပ္ေၾကာက္တာ” “ဟုတ္တယ္အစ္မ… ကံေကာင္းတယ္… မသိရင္ ဗိုက္ထဲဝင္သြားမွာ… ေသတတ္တယ္” “ဟယ္… ဟုတ္ပါရဲ့ေနာ္… အာာာ… ဘာေတြေျပာေနမွန္းလည္း မသိဘူး” စကားလိုက္ေရာေနရာမွ ေမၽွာ့ ဘယ္အေပါက္က ဝင္မည္ကို အေတြးေပါက္သြားပုံရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာကို အုန္းကနဲ ထုသည္။ “အစ္မ အဝတ္အစားလဲၿပီး ျပန္လာအုံးမွာလား” “ဟင့္အင္း… မလာေတာ့ဘူး… မနက္ျဖန္မွပဲ ထပ္လာၾကမယ္ေလ” မနက္ျဖန္အတြက္ေတာ့ ခ်ိန္းသြားေပၿပီ။ ဒီေန႔က ကံေကာင္းသည္လား ကံဆိုးသည္လားကို မခြဲတတ္ေတာ့ပါေပ။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကမန္းကတန္း လက္ၿပ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အိမ္ေပၚ တက္ေျပးေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေပါင္လယ္ေလာက္ထိ ႏွိုက္တာကို ခံလိုက္ရ၍ အပ်ိဳႀကီး ရွက္သြားျခင္းပဲလားေတာ့ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ အဝတ္အစားလဲၿပီး အိပ္ရာဝင္လိုက္ရသည္။ အိပ္လို႔ မရပါ။ အထိအေတြ႕အာ႐ုံေတြက ေႏွာင့္ယွက္ေနသည္။ အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့လည္း အိပ္မက္အစိုေတြပင္ မက္လိုက္မိေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ညေနလည္း သူမ အိမ္ေရွ႕ကေန ေစာင့္ေနသည္။ ဒီေန႔ေတာ့ လယ္ကြင္းဘက္ မသြားေတာ့ဘဲ ေဝးခ်င္ ေဝးေတာ့ဟု ညာဘက္လမ္းက ပတ္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။ အဲဒီဘက္ က်ေတာ့ အထဲဝင္ရတာ နည္းနည္း ေဝးသည္။ ဘရိတ္တစ္ခ်က္ အုပ္လိုက္တိုင္း တံဆိပ္ခတ္ ႏွိပ္ခံေနရသည့္ အရသာကို ခံစားမိလိုက္ရာ ကၽြန္ေတာ္ အမွားႀကီး မွားမိသြားသည္ကို သိလိုက္ ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရွာ့တ္ပင္ အတိုဝတ္လာေသာ္လည္း အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီ မဝတ္ခဲ့မိ။
သူမထံမွ ကိုယ္သင္းနံ့ ေရေမႊးနံသင္းသင္း ေရာပၽြမ္းေနသည္ကို အနံ့ရေတာ့ ပိုဆိုးသည္။ အေနာက္ကလည္း လူအုပ္က တိုးေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္က သူမ တင္ႏွစ္လုံး ၾကားကို သြားေထာက္မိေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ အားနာသြားသည္။ သူမက ဆတ္ကနဲ လွည့္ၾကည့္သည္။ “အစ္မ.. ကန္ေတာ့… အေနာက္က တိုးေနလို႔” သူမ ျပဳံးေစ့ေစ့ႏွင့္ အန္ႀကိတ္ျပၿပီး အေရွ႕သို႔ ျပန္လွည့္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသာ္လည္း အေနာက္ကလည္း တိုး၊ အေရွ႕မွာလည္း ပိတ္ၾကပ္ေနရာ ဘယ္လို မွ မတတ္နိုင္ေတာ့။ လက္မွတ္ရၿပီးျပန္ေတာ့ ပြဲ႐ုံထဲသို႔ တိုးေဝွ႕ ဝင္ရျပန္သည္။ အထဲမွာက တာလပတ္စႀကီးကို ခင္းထားကာ တစ္ခ်ပ္စာစီ ေလးေပပတ္လည္ေလာက္ အကြက္ဆြဲထားသည္။ ကိုယ့္နံပါတ္ ေရာက္ေအာင္ ထိုင္ေနသူမ်ားေရွ႕ ခြေက်ာ္သြားရသည္။ ထိုင္စရာ ေနရာရမွပဲ ဟင္းကနဲ သက္ျပင္းခ်နိုင္ေတာ့သည္။ ေတးဂီတသံက ဆူညံေနရာ အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာဖို႔ပင္ အဆင္ မေျပလွ၊ ပုံမွန္ေလသံထက္ကို နည္းနည္းပိုေျပာမွ ၾကားရသည္။ ေရွ႕ဘက္ ေဆာင္းေဘာက္စ္ ေတြနားေလာက္ ေနရာရေတာ့ ပိုဆိုးသည္။ ဆယ္နာရီေလာက္က်ေတာ့ စတိတ္ရွိုးလည္း ၿပီးသြားၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ အခန္းက႑ေတြ ေရာက္လာၿပီမို႔ ျပန္ထြက္လာၾကသည္။ အျပင္ေရာက္ေတာ့ မီးေရာင္ေအာက္မွာ အေရွ႕က လမ္းေလၽွာက္သြားေသာ သူမ၏ တင္ဆုံကို လွမ္းငမ္းလိုက္ရာ ပန္းႏုေရာင္ ထဘီဝတ္ထားေသာ သူမတင္ပါးႏွစ္ခု ဆုံရာ အလယ္တည့္ တည့္ ေအာက္နားေလာက္တြင္ ေရစိုကြက္ကေလး တစ္ကြက္ကို ေတြ႕မိလိုက္သည္။ ပန္းေရာင္ ပိတ္သားဆိုေတာ့ သိသိသာသာ ေပၚလြင္ေနသည္။ “အစ္မ… ေနာက္မွာ ကြက္ေနတယ္” မေနနိုင္မထိုင္နိုင္ သြားေျပာမိျပန္သည္။ သူမက လက္နဲ႔ စမ္းၾကည့္ၿပီး.. “ဟယ္.. ဟုတ္ပါ့.. ဘယ္နားမွာ ေရကြက္ေပၚ ထိုင္မိလဲ မသိပါဘူး” ေျပာေျပာဆိုဆို ေဘးနား ေမွာင္ရိပ္သို႔ တိုးကာ ထဘီျပင္ဝတ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ပြဲခင္းထဲ ေႏြရာသီ ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႕မွာ ဘယ္နားမွာမွ ေရစိုစရာမရွိ။ ဧကႏၲ သူမလည္း စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားကာ စိုစြတ္သြားပုံ ရပါသည္။ သူမကေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အသံေတြက ကတုန္ကရင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ သိသာလြန္းသည္။
ဆိုင္ကယ္ေပၚေရာက္ေတာ့ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ေတာ့သည္။ “အစ္မ.. ဟို… ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္တယ္ေနာ္..ခုနတိုးမိတာက မရည္ရြယ္ပါဘူး.. ” “ဟြန္း.. ေတာ္ပါ.. အပိုေတြ.. အဲဒါ မရည္ရြယ္တာလား” “မဟုတ္ပါဘူး.အစ္မရယ္.. အေနာက္က တိုးလိုက္လို႔ ျဖစ္သြားတာပါ.. အစ္မက ေမႊးႀကိဳင္ေန ေတာ့ ပိုဆိုး” “ေတာ္ပါဟယ္.. ငါ့အျပစ္ပဲ ျဖစ္ရေသး” သူမေျပာပုံက အျပစ္ေတာ့ ျမင္ပုံမရ။ သူမအိမ္တြင္ ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ အေဆာင္ ျပန္ေမာင္းလာခဲ့သည္။ ထိုညကလည္း အိပ္မက္မက္သည္။ ဒီလိုႏွင့္ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ ေက်ာ္ျဖတ္လာသလို သူမႏွင့္ပင္ ရင္းႏွီးမႈေတြ ပိုလာသည္။ ႐ုံးပိတ္ရက္ တစ္ရက္မွာ သူမႏွင့္အတူတူ အေအးဆိုင္ ထိုင္ရင္းပင္ ခ်စ္ေရးဆိုျဖစ္ခဲ့သည္။ စဥ္းစားဦးမည္ေပါ့ေလ။ အေျဖရၿပီးေတာ့ ပိုမို ပြင့္လင္းလာခဲ့သလို အသုံးအႏႈန္း အေခၚအေဝၚမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ “မ… ” “ေမာင္ေရ”.. စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္.. သူမႏွင့္ ခ်စ္သူသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ ျဖစ္လာသည္။ သူမက ေၾကာက္သည္ဟု ဆိုကာ ေအာက္ပိုင္းကို ေပးမထိ၊ အေပၚပိုင္းကိုပင္ အျပင္မွသာ ထိေတြ႕ခြင့္ရသည္။ ခ်စ္သူသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ အမွတ္တရ အေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္ၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္ ႐ုံးက လူပါးသည္။ အမ်ားစုကလည္း ႐ုပ္ရွင္ သြားမၾကည့္ေတာ့ဘဲ အိမ္မွာပဲ Skynet ႏွင့္ ၿငိမ့္ၾကတာ မ်ားသည္။ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတန္း အတြဲခုံမွာ သြားထိုင္ၾကသည္။ သူမက ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ခြင္ထဲမွာ မွီထားသည္။ ႐ုပ္ရွင္စၿပီ။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ေနၾကာေစ့ထုပ္ကေလး ေဖာက္ကာ ခြံ ေကၽြးရင္း ၾကည္ႏူးေနၾကသည္။ ေနာက္ သူမကို နမ္းလိုက္ကာ နားရြက္ကေလးကို သြားျဖင့္ ဖြဖြေလး ကိုက္ေပးလိုက္သည္။ (အေတြ႕အၾကဳံ မရွိေသးသူမ်ား ဒီနည္းကို စမ္းသပ္သင့္သည္)။ “အင္း.. ေမာင္.. အသည္းေတြယားတယ္” “လာ… ကုတ္ေပးမယ္” ကၽြန္ေတာ္ ေရာတိေရာေယာင္လုပ္ကာ သူမ ဗိုက္သားကို ကုတ္ေပးသေယာင္ ျပဳလိုက္သည္။
သူမကို သတိထားၾကည့္မိေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ အာ႐ုံမရွိ၊ မ်က္လုံးေလး ေမွးေနသည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္ အကဲစမ္းကာ လက္ကို ရင္သားမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္လိုက္သည္။ တစ္ခ်က္ တြန႔္ကနဲ ျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဘာမွ ျငင္းဆန္ျခင္းေတာ့ မရွိ။ ကၽြန္ေတာ္ ရင္သားႏွစ္မႊာကို ဖြဖြရြရြေလး ကိုင္တြယ္ရင္း သူမႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို စုပ္ယူနမ္းလိုက္သည္။ သူမကလည္း က်င္လည္စြာပင္ ျပန္ လည္ တုန႔္ျပန္သည္။ အေတြ႕အၾကဳံေတာ့ ရွိဖူးေလာက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ အခ်ိန္မဆြဲ ေတာ့။ သူမ၏ တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို အေျခအေနၾကည့္ကာ လက္ကို တျဖည္းျဖည္း ေအာက္သို႔ ဆင္းလာခဲ့သည္။ သူမေပါင္သားမ်ားကို ပြတ္သပ္ေပးသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံထဲဆိုေတာ့ လွန္လို႔ ေလွာလို႔ မရ။ ႐ုပ္ရွင္ကလည္း ဘယ္ေနရာထိ ေရာက္ေနၿပီမသိ။ ႐ုတ္တရက္ မီးလင္းလာလ်င္ ဒုကၡမ်ားသြားနိုင္သည္ေလ။ ေပါင္လယ္ေလာက္မွ တျဖည္းျဖည္း ေပါင္ခြဆုံေနရာသို႔ လက္ကို တေရြ႕ေရြ႕ခ်ီတက္ေစသည္။ ေပါင္ရင္းမွာ သူမက ေပါင္ကို တင္းတင္းေစ့ထားေတာ့ လက္က ဆက္ေရႊ႕ရ ခက္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျခေထာင္ တစ္ေခ်ာင္းကို သူမ ဒူးႏွစ္လုံးၾကားသို႔ မသိမသာ ထည့္ေပးလိုက္ရာ အနည္းငယ္ ဟသြားသည္။ ဒီေတာ့မွ မို႔မို႔ေဖာင္းေဖာင္း သူမ၏ အဖုတ္ကေလးအား အုပ္ကိုင္ လိုက္သည္။ သူမ တြန႔္ကနဲ ျဖစ္သြားက လက္က ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ကို တင္းတင္း ဖမ္းဆုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္လက္အား သူမ၏ အကြဲေၾကာင္းေလးကို စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ပြတ္သပ္ကစားရင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ဖိသြင္းလိုက္၊ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေစာက္စိေလးကို ခလုတ္တိုက္လိုက္ႏွင့္ က်ီစယ္လိုက္သည္။ “အာ့… ဟာ… ေမာင္ရယ္.. ဟင့္” သူမ၏ ႏွာသံေလးမ်ား ဝိုးတဝါးထြက္လာသည္။ “အား.. ေမာင္ေရ.. ရွီး… မရေတာ့ဘူး… ဟင့္… အား.. ” ေခါင္းကို ဘယ္ညာ ရမ္းကာ ပါးစပ္က တိုးတိုးႀကိတ္ညည္းေနသည္။ သူမ တစ္ကိုယ္လုံး တြန႔္လိမ္ေကာက္ေကြးလာရင္း ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္သားကို တင္းတင္းၾကပ္ ၾကပ္ အတင္းဆုပ္ကိုင္ကာ ေကာ့တက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖုတ္ႀကီးကို ဘယ္ညာ ဆတ္ ကနဲ ဆတ္ကနဲရမ္းရင္း ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ကို မ်က္ႏွာအပ္လ်က္ အေမာေျဖေနသည္။ “ေမာင္.. သြားရေအာင္ေနာ္… ” “ေနပါအုံး မ ကလည္း ႐ုပ္ရွင္ မၿပီးေသးဘူးေလ””ျပန္ခ်င္ၿပီေမာင္ရယ္… ေနာက္မွ လာၾကည့္ေတာ့ေနာ္” သို႔ႏွင့္ ဖိုသီဖပ္သီျဖစ္ေနေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ျပန္ျပဳျပင္ကာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံထဲမွ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ညက်ေတာ့ သူမဆီက ဖုန္းလာသည္။ “ေမာင္ေနာ္.. ေန႔ခင္းက တအားဆိုးတာပဲ..” “ဟမ့္.. ဘာဆိုးလို႔လဲ မရဲ့” “ဆိုးတာေပါ့.. လူကို ေသမတတ္ပဲ” “အာ့လိုျဖစ္သြားလား” “ျဖစ္တာေပါ့ ေမာင္ရဲ့.. ၿပီးေတာ့ ညေနက ေရခ်ိဳးေတာ့ စပ္ေနတယ္” “ဘယ္ကစပ္တာလဲ” “ဟိုေနရာကေပါ့ ေမာင္က အရမ္း ဖိပြတ္တာကိုး” “အင္းပါ မ ရယ္.. စိတ္ပါသြားလို႔” “ထဘီနဲ႔ ပြတ္ေတာ့ပြန္းတာေပါ့ ေမာင္ရဲ့” “အာ့ဆို ထဘီမပါဘဲပြတ္ရင္ေရာ…” “အမ္.. ေမာင္ေနာ္.. မ်ားလာၿပီ” “တူတူေနခ်င္ၿပီ မ ရာ” “ခုလည္း တူတူေလၽွာက္သြားတာပဲကို” “ဟုတ္ပူးေလဟာ.. အဲလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး” “ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ေမာင္ရဲ့” “လင္မယားေတြလိုမ်ိဳးေလ” “ေနပါအုံး ေမာင္ရယ္.. ေနာက္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာေပါ့” “အင္းပါ မ ရယ္” ေနာက္တစ္ပတ္ တနဂၤေႏြက်ေတာ့.. “ေမာင္.. မနက္ျဖန္ ေမာင့္ကို လက္ေဆာင္ေပးစရာရွိတယ္..” “ဘာလဲ.. မ ရဲ့” “ေရာက္ေတာ့ သိမွာေပါ့.. လမ္းစရိတ္ယူခဲ့.. မ တို႔ ေတာင္ႀကီးသြားလည္မယ္.. အိမ္ကို ႐ုံးပိတ္ရက္ သင္တန္းတက္ရမယ္လို႔ ညာထားတယ္” “ဟာ တကယ္လား၊ ေပ်ာ္လိုက္တာ” “တကယ္ေပါ့ ေမာင္ရဲ့၊ ေနအုံး အဲဒါ လက္ေဆာင္မဟုတ္ေသးဘူး၊ လက္ေဆာင္က ေတာင္ႀကီး ေရာက္မွ ေပးမွာ” ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ သူမႏွင့္အတူ ေတာင္ႀကီးသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။
ေတာင္ႀကီးေရာက္ေတာ့ အင္းေလး ေရာက္ေအာင္ သြားလိုက္ေသးသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူတူ သြားရသည့္ ခရီးလမ္းက အလြန္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည္။ ညေနမိုးခ်ဳပ္ကာနီးေတာ့မွ ေတာင္ႀကီးသို႔ ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။ “မ.. မိုးခ်ဳပ္ၿပီ.. ျပန္မွာလား” သူမ ဘာမွ ျပန္မေျပာ၊ လက္ထဲမွ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဖြင့္ကာ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ ထုတ္ေပးသည္။ “အမ္.. အဲဒါ ဘာလုပ္ဖို႔” “အာ… ေမာင္ေတာ္ေတာ္ အ တာပဲေနာ္… မွတ္ပုံတင္ေပးပါတယ္ဆို မသိဘူးလား” “ဟင့္အင္း.. သိဘူးေလ” “ခက္ေတာ့ ခက္ေနပါၿပီေတာ္… ကၽြန္မ ႐ုံးပိတ္ရက္ သုံးရက္လုံး ေတာင္ႀကီးမွာ သင္တန္း တက္ရမယ္လို႔ အိမ္ကို ေျပာလာခဲ့ၿပီရွင့္… ျပန္စရာမလိုပါဘူးရွင့္..” “ဪ… အဲလိုလား… သိဝူးေလ” “အင္း… ေမာင့္သေဘာေလ… ေမာင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာတည္းေပါ့..” “ခ်စ္လိုက္တာ.. မ ရယ္” “ကဲ.. ေမာင္… မိုးခ်ဳပ္ေနၿပီ… ခ်စ္တာ ေနာက္မွခ်စ္… ေလာေလာဆယ္ တည္းစရာ ေနရာ ရွာဦး… မ.. ဗိုက္ဆာေနၿပီ.. တစ္ေနကုန္ေလၽွာက္သြားရတာလည္း ေညာင္းလွၿပီ” သြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္ ၿမိဳ႕မေဈးႀကီးႏွင့္ မနီးမေဝး ဟိုတယ္ တစ္ခုသို႔ သြားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ Reception တြင္ ႏွစ္ေယာက္ခန္းတစ္ခန္း ယူလိုက္သည္။ တစ္ခန္းကို ငါးေသာင္း ေပးရသည္။ သူမကို လွည့္ၾကည့္ေတာ့ ျပဳံးေစ့ေစ့ လုပ္ေနသည္။ ဧည့္ႀကိဳေကာင္ေလးက အထုပ္အပိုးေတြကို တြန္းလွည္းႏွင့္ ထည့္ကာ ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ အခန္းဝသို႔ လိုက္ပို႔သည္။ ေဈးႀကီးေပးရသလို အခန္းကလည္း ေကာင္းပါသည္။ အဆင့္ျမင့္အခန္းျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ေနရထိုင္ရ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလွသည္။ အခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား ေျခပစ္လက္ပစ္ အိပ္ရာေပၚ လွဲခ်လိုက္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမကို ရင္ခြင္ထဲ ဆြဲသြင္းလိုက္သည္။ “ဟိုး.. ဆရာ.. ေနပါအုံးကြယ္… တစ္ေနကုန္ လူလည္းေညာင္းေနၿပီ.. ေရေလးဘာေလး ခ်ိဳးၿပီး အျပင္မွာ ထမင္းထြက္စားမယ္ေလ.. ” “ဟြန႔္.. မ ကလည္း” “ေအာင္မယ္.. ကေလး႐ုပ္ႀကီးနဲ႔ လာခၽြဲေနျပန္ၿပီ… ေရခ်ိဳး ထမင္းသြားစားမယ္ေလ.. ျပန္လာမွ ေမာင့္သေဘာ.. ဟုတ္ၿပီလား” “တကယ္ေနာ္…” “ဪ တကယ္ပါဆို… ျမန္ျမန္လုပ္… ေရခ်ိဳး.. ကိုယ့္အခ်ိန္ထဲက ပါတယ္” ကၽြန္ေတာ္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲသို႔ ဝင္ကာ ေရေႏြးေႏြးေလးႏွင့္ တက္သုတ္ရိုက္ ခ်ိဳးလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ထြက္လာေတာ့ သူမက ထဘီရင္ရွားႏွင့္ အသင့္ေစာင့္ေနသည္။ သူမေရခ်ိဳးၿပီး ထြက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္… သူမကို လွမ္းဖက္လိုက္ရာ ကၽြန္ေတာ့္ေပၚသို႔ ထပ္လ်က္ ျပဳတ္က်လာသည္။ “အို.. ေမာင္ေနာ္.. မကဲနဲ႔အုံး… ခုမွ ေရခ်ိဳးၿပီးတာ… ဟိုဘက္လွည့္ေန.. မ အဝတ္အစားလဲ ဦးမယ္” ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဖက္ လွည့္ေပးေနစဥ္မွာပင္ သူမ အဝတ္အစား လဲၿပီးသြားသည္။ “ရၿပီ… လွည့္လို႔ရၿပီ” ကၽြန္ေတာ္ သူမဘက္သို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဂါဝန္အျပာႏုေရာင္ေလးႏွင့္ လွလြန္းေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ အျပင္ထြက္ကာ ညစာ သြားစားသည္။ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အႀကိဳက္ တူသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ပင္လယ္စာသာ စားသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ငါးသေလာက္ဥ၊ သူမက ပုဇြန္ထုပ္ေၾကာ္ႏွင့္ ထမင္းၿမိန္ခဲ့သည္။ စားေသာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဟိုတယ္ေပၚ ျပန္တက္ခ်င္ေနေသာ္လည္း သူမက တမင္ အခ်ိန္ဆြဲေနသည္။ ဟိုဟာ နည္းနည္း ဒီဟာနည္းနည္း ေလၽွာက္စားေနသည္။ ည ကိုးနာရီေက်ာ္ေလာက္က်မွ အခန္းထဲ ျပန္ဝင္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အခန္းထဲ ေရာက္သည္ႏွင့္ သူမကို ဆြဲဖက္ကာ ခုတင္ေပၚသို႔ လွဲခ်လိုက္ေတာ့ သည္။ “အယ္.. ေနအုံးေလ.. ေမာင္… မ တို႔ ထမင္းစားလာတာ သြားတိုက္၊ ပလုပ္က်င္းေတာ့ လုပ္ဦးမွေပါ့””ဟင့္အင္း… မလုပ္ေတာ့ဘူး” “ေမာင္ေနာ္… ညစ္ပတ္ရင္… ဟြန႔္” “အင္းပါ အင္းပါ… တိုက္ပါမယ္” ႏွစ္ေယာက္သား မ်က္ႏွာသစ္ သြားတိုက္ၿပီးေနာက္… သူမ မ်က္ႏွာက မိတ္ကပ္ေတြ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြ ဖ်က္လိုက္ေသာ္လည္း သဘာဝဆန္ဆန္ လွေနျပန္သည္။ အိပ္ရာေပၚ ေရာက္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မရွည္စြာ သူမကို လွမ္းဖက္သည္။ “အို.. ေမာင္ကလည္း အရမ္းၾကမ္းတာပဲကြယ္… ေမာင့္သေဘာပါဆို.. မ..ကို မညႇာဘူးလား” “မ.ရယ္ စိတ္ေလာသြားလို႔ပါ” ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သူမ ေစာင္ထူႀကီးေအာက္သို႔ ေရာက္သြားသည္။
သူမ၏ နားရြက္ကေလးကို ဖြဖြေလး နမ္းလိုက္သည္။ “အိ.. ခ္ခ္… ေမာင္.. အသည္းယားတယ္” “အသည္းယားရင္… ကုတ္ေပးမယ္ေလ” “ဟြန႔္… ေတာ္ေတာ့… သူကုတ္တာက.. အသည္းမဟုတ္ပါဘူး..” “အာ့ဆို.. အသည္းမဟုတ္ ဘာကုတ္တာလဲ” “အာ.. ေမာင္ေနာ္” ကၽြန္ေတာ္ သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးကို အသာ စုပ္ကာနမ္းလိုက္သည္။ သူမကလည္း ကၽြန္ေတာ့္လည္ပင္းကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပန္ဖက္သည္။ ညာလက္က သူမ၏ လည္တိုင္ေက်ာ့ေက်ာ့ေလးကို ညင္သာစြာ သပ္ေပးေနရင္းသူမ၏ လက္ ေမာင္းေပၚတြင္ အလုပ္ေပးထားသည္။ သူမ၏ အသက္ရႉသံမ်ား ျမန္ဆန္လာသည္။ မ်က္လုံးအစုံကို မွိတ္ထားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကို သူမ၏ ရင္သားေပၚသို႔ တင္ေပးလိုက္သည္။ “အင္း.. ဟင္း… ေမာင္ရယ္” သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းလႊာေလး ပြင့္လာကာ ကၽြန္ေတာ့္၏ အနမ္းမ်ားကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး တုန႔္ ျပန္သည္။ ရင္သားေပၚမွ လက္က ဗိုက္သားေပၚသို႔ ေရာက္သြားသည္။ သူမက ပိုမို တင္းၾကပ္စြာ ဖက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္သို႔ တစ္ေစာင္းအေနအထားျဖစ္ေနသျဖင့္ ဗိုက္သားမွ ခါး… တင္ပါးထြားထြားကို ပြတ္သပ္ဆုပ္နယ္ေပးသည္။ “ရွီး… ဟင္း.. ေမာင္… ေမာင္ရယ္” သူမ၏ တုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ားက တစ္စထက္ တစ္စ ပိုမို အားပါလာသည္။ တင္သားမ်ားကို ပြတ္သပ္ေပးေနရာမွ သူမ၏ ေပါင္တံသြယ္သြယ္ဆီသို႔ ဦးတည္လိုက္ရင္း ေပါင္လယ္သားမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္ဆီ ပြတ္သပ္ေပးေနသည္။ သူမ အသက္ရႉသံေတြ ျမန္သထက္ ျမန္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေပါင္လယ္သားေလးမ်ားကို ပြတ္သပ္ေနရင္း ဂါဝန္စကို တျဖည္းျဖည္း အေပၚသို႔ ဆြဲတင္လိုက္သည္။ ဂါဝန္ ေအာက္စ လက္ထဲသို႔ ေရာက္လာေတာ့ ေပါင္သားေလးမ်ားကို ပြတ္သပ္ေနရင္း လက္က တျဖည္းျဖည္း ေပါင္လယ္မွ ေပါင္ရင္းဆီသို႔ ေရြ႕လ်ားလာသည္။ “အား.. ေမာင္ရယ္.. အေနရခက္လိုက္တာေနာ္” လက္က ေပါင္ခြဆုံသို႔ ေရာက္သြားေတာ့ သူမ၏ အဖုတ္ကေလးကို ပင္တီေပၚမွ အုပ္ကိုင္လိုက္သည္။
“အေမ့… ရွီးးး.. ဟင့္… ေမာင္ေနာ္” “မ.. အဝတ္ေတြ ခၽြတ္လိုက္မယ္ေနာ္” “ရွက္တယ္ ေမာင္ရယ္” “မရွက္ပါနဲ႔.. မ ရဲ့.. ေမာင္တို႔က မၾကာခင္ လက္ထပ္ရင္ ၾကဳံရမွာပဲကို” သူမ မ်က္လုံးကို မွိတ္ထားရင္း ေခါင္းညႇိတ္ျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္သား ျခဳံထားေသာ ေစာင္ကို ခြာခ်လိုက္သည္။ သူမ၏ အျပာႏုေရာင္ ဂါဝန္ကို ေခါင္းမွ လွန္ခၽြတ္ေပးလိုက္ေတာ့ သူမ ေက်ာေလး ေကာ့ေပးသည္။ ပင္တီႏွင့္ ဘရာ အျပာႏုေရာင္ေလးေတာ့ က်န္ေသးသည္။ မခၽြတ္ေသးခင္ကပင္ ပင္တီေအာက္မွ ေဖာင္းေဖာင္းမို႔မို႔ အဖုတ္ကေလး၏ အလယ္ေခါင္တြင္ အကြဲေၾကာင္းေလးပင္ ခပ္ေရးေရး ေပၚေနသည္။ စိုစြတ္ေနေသာ အကြက္ကေလးကို လက္နဲ႔ စမ္းလိုက္သည္” “မ.. ဒီမွာ ရႊဲေနၿပီ” “ဟင့္.. ေမာင္ပဲ အဲလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာကို” ကၽြန္ေတာ္ သူမ၏ ဘရာႏွင့္ ပင္တီေလးကိုလည္း သူမကိုယ္မွ ဖယ္ထုတ္လိုက္သည္။ အဝတ္မဲ့ ခႏၶာကိုယ္က ကၽြန္ေတာ္ကို အလြန္ပင္ စိတ္လႈပ္ရွားေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အဝတ္ေတြ အကုန္ ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္။ ထိုေနာက္ သူမေပၚမွ တက္ခြလိုက္သည္။ “ေမာင္… မ.. ေၾကာက္တယ္.. ျဖည္းျဖည္းေနာ္” “အင္းပါ.. မ ရဲ့.. နာေအာင္ မလုပ္ဘူး.. စိတ္ခ်” သူမႏႈတ္ခမ္းလႊာေလးမ်ားကို တရွိုက္မက္မက္ စုပ္နမ္းရင္း ညာလက္ကလည္း ရင္သားမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ကိုင္တြယ္သုံးသပ္ကာ နို႔သီးေခါင္းေလးမ်ားကို ဖြဖြေလး လက္ညႇိုးလက္မႏွင့္ ပြတ္ ေခ်ေပးသည္။ သူမ၏ အသက္ရႉသံမ်ား ျပင္းထန္လာသလို ညည္းသံသဲ့သဲ့..ၾကားရေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မ်ားကို ပိုမို တက္ႂကြေစသည္။ ရင္သားမွ လက္မ်ားကို ဗိုက္၊ ခါး၊ တင္ပါးမ်ားဆီသို႔ အစဥ္လိုက္ ေနရာ ေရႊ႕သည္။ တင္ပါးကို ဆုပ္နယ္ေနခ်ိန္ဝယ္ သူမ၏ လက္မ်ားက အိပ္ယာခင္းကို ဆုပ္ထားကာ ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္ထား သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမ၏ ေပါင္ၿခံတဝိုက္.. အဖုတ္ကို တစ္ခ်က္မၽွ မထိဘဲ က်န္သည့္ေနရာမ်ားသို႔သာ မထိတတိ ကလိေနသည္။ ကာမသၽွတၱရ ေလ့လာမိသမၽွကို အသုံးခ်ေနသည္။ “အား.. ရွီး… ေမာင္.. ေမာင္ရယ္.. မ.. မေနတတ္ေတာ့ဘူး..” သူမေတာင္းဆိုလာေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ လက္မ်ားကို အဖုတ္ေပၚသို႔ တင္ကာ အကြဲေၾကာင္း တစ္ေလၽွာက္ စုန္စန္ ပြတ္ဆြဲေပးလိုက္သည္။ “အ.. ေမာင္ရယ္.. ေမာင္ရယ္.. ဟင့္.. အင္း.. အားးး” ကၽြန္ေတာ္ သူမႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို နမ္းေနရင္းမွ လည္တိုင္.. ရင္ဘတ္.. ဗိုက္.. ဆီးခုံေပၚသို႔ အဆင့္ဆင့္ နမ္းသြားသည္။ “ေမာင္.. အဲဒါ မလုပ္နဲ႔ကြယ္.. ငရဲႀကီးလိမ့္မယ္.. ” “မႀကီးပါဘူး မ ရယ္.. ခ်စ္လို႔ပါ” “မလုပ္နဲ႔ ေမာင္ရယ္.. ေနာ္… ေနာ္လို႔” ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းကို သူမ အတင္း ျပန္ဆြဲတင္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ သူမ ေျခရင္းတြင္ ဒူးေထာက္ ေနရာယူလိုက္ကာ သူမ၏ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ဆြဲေထာင္လိုက္ၿပီး ေပါင္ကို ကားထုတ္လိုက္သည္။ ေဖာင္းမို႔ေနသည္ အဖုတ္ႀကီးက ဟဟေလး ပြင့္ေနကာ သူမ၏ ခ်စ္ဝတ္ရည္မ်ား ရႊဲနစ္၍ အေရာင္ လက္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ကလည္း တရမ္းရမ္းႏွင့္ မာန္ၿဖီေနသည္။ ထိပ္ဖူးကို သူမ၏ ပန္းဝတ္လႊာခ်ပ္မ်ားအား ေခၽြခ်ရင္ အဝတြင္ ေတ့လိုက္သည္။ “အာ့.. ေမာင္.. ျဖည္းျဖည္းေနာ္” ကၽြန္ေတာ္ ထိပ္ဖူးႏွင့္ သူမ၏ အကြဲေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ထိုးဆြေမႊေႏွာက္ေနရင္း သူမ၏ ပန္းဖူးေလးကို ထိထိမိမိ ထိုးပစ္လိုက္သည္။ “အား… ေမာင္ရယ္… အမေလး.. ဟင္း… မ.. မေနနိုင္ေတာ့ဘူး… ထည့္ပါေတာ့” “ဘယ္ထဲကို ထည့္ရမွာလည္း မ..” “ဟာ.. ေမာင္.ကလည္းကြာ” “အာ့ဆို.. မေျဖရင္ မထည့္ဘူးေနာ္” သူမ၏ ပန္းဖူးေလးကို ႏွစ္ခ်က္သုံးခ်က္ ဖိတြန္းလိုက္ရင္း အညႇာကိုင္လိုက္သည္။ “အ… အ… အဖုတ္ထဲကို ထည့္ေပးပါေမာင္ရယ္” “ဘာႀကီးကို ထည့္ရမွာလဲလို႔” “အာ.. ေမာင္ေနာ္” “မေျဖဘူးလား” သူမကို မထန္ထန္ေအာင္ ဆြလိုက္သည္။ “ေမာင့္… ေမာင့္လီးႀကီးကို… မ.. အဖုတ္ထဲကို ထည့္ေပးပါ ေမာင္ရယ္” သူမ ထံက တစ္တစ္ခြခြ စကားမ်ား ၾကားလိုက္ရသည္။ စိတ္ထဲ ဖ်င္းကနဲပင္ ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထိပ္ဖူးက အေပါက္ဝသို႔ ေတ့လိုက္ကာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထိုးသြင္းလိုက္သည္။ သူမ၏ အဖုတ္အတြင္းသားမ်ားက တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပင္ ညႇစ္ထားသည္။ ေတာ္ေတာ္ ၾကပ္လြန္းသည္။ “အား… အား… ေမာင္… ျဖည္းျဖည္းကြယ္.. နာတယ္” ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဆုံးထိ တအိအိ သြင္းလိုက္သည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင့္ေပးသည္။ သူမ၏ ဆီးစပ္ကို ကၽြန္ေတာ့္ဆီးစပ္ႏွင့္ ထိသည္အထိ ေဆာင့္သည္။ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္မွ အရွိန္တင္လိုက္သည္။ သူမ၏ ေအာ္သံညည္းသံမ်ားက ပို က်ယ္လာသလို သူမ လက္မ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေမာင္းႏွင့္ ေက်ာကို ေဆာက္တည္ရာမရ ဖမ္းဆုပ္လႈပ္ရွားေနသည္။ “ေမာင္.. ေမာင္… မ.. ၿပီးေတာ့မယ္.. ၿပီးေတာ့မယ္ထင္တယ္” သူမ တစ္ကိုယ္လုံး တုန္ရင္လာကာ လက္က ကၽြန္ေတာ့္ ခါးကို ဖမ္းဆုပ္ကိုင္ရင္း အားႏွင့္ ဆြဲဆြဲ ေဆာင့္ကာ အဖုတ္ႀကီးကလည္း ေကာ့တက္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အရွိန္တင္လိုက္သည္။ သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကို အတင္းပင္ ဖက္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ ႏႈတ္ခမ္းကို လွမ္းစုပ္သည္။ သူမ ထြန႔္ထြန႔္လူးလာၿပီးေနာက္ အဖုတ္ကို အေပၚသို႔ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ ေကာ့ထိုးလိုက္ၿပီး အဖုတ္က ကၽြန္ေတာ့္ ဒုတ္ကို ဇိကနဲ ဇိကနဲ ဆယ္ခ်က္ေလာက္ ညႇစ္လိုက္ၿပီးေတာ့ မွ ဗုန္းကနဲ ျပန္ျပဳတ္က်သြားသည္။ ျပဳတ္က်သြားသည္အထိ အဖုတ္ႀကီးက တရမ္းရမ္း ႏွင့္ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ တုန္ေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္ မၿပီးေသးသျဖင့္ အဖုတ္ထဲသို ထပ္ ထိုးသြင္းလိုက္ၿပီး ေနာက္ ဆက္ေဆာင့္သည္။ သူမ၏ ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴသံမ်ားကလည္း တရစပ္ပင္။ ေနာက္ဆုံး ထိပ္ဖူးတစ္ခုလုံး က်င္တက္လာၿပီး သုက္ရည္မ်ားကို သူမ၏ အဖုတ္အတြင္းသို႔ ပန္းသြင္းလိုက္ေတာ့သည္။ “ေမာင္ရယ္.. ေမာလိုက္တာ… ဟူး” “ေကာင္းလား.. မ” “ေကာင္းတာေပါ့ေမာင္ရယ္… ေသမလိုကို ျဖစ္သြားတာ” “ထပ္လုပ္ေပးရဦးမလား” “အာ.. ခဏနားဦးမယ္ေမာင္ရယ္” “မ.. ဘယ္ႏွခါ ၿပီးသြားလဲ” ” ဘယ္ႏွခါမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး ေမာင္ရယ္.. မ. အရင္ၿပီးတာေလ.. ေမာင္က ထပ္ လုပ္ေနေတာ့ ခဏခဏ ၿပီးေနတာ.. သတိေတာင္ လစ္မတတ္ပဲ…” သူမေပၚမွာ ထပ္လ်က္ပင္ စိမ္ထားရင္း အေမာေျဖေနလိုက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ျပန္မေထာင္နိုင္ေသးသျဖင့္ အေမာေျဖၿပီးေတာ့ သူမ ဗိုက္ေပၚကေန ဆင္းလိုက္ကာ တစ္သၽွဴး စကၠဴေလးလွမ္းယူၿပီး သူမ အဖုတ္ဝတြင္ စီးက်ေနေသာ သူမဆီက အရည္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ သုက္ရည္မ်ားကို တယုတယ သုတ္ေပးလိုက္သည္။ ေမာေမာႏွင့္ အိပ္လိုက္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားသလဲ မသိ။ တေရးနိုးေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား အဝတ္ဗလာႏွင့္ သူမက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်ာခိုင္းရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမ၏ ရင္သားမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ရင္း ေထာင္လာေသာ ဒုတ္ကို သူမ၏ တင္ႏွစ္လုံးၾကားမွ ျပဴထြက္ေနေသာ အဖုတ္ အဝသို႔ ေတ့ကာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖိသြင္း လိုက္သည္။ သူမ ကၽြန္ေတာ့္ တင္ပါးကို လက္ေနာက္ျပန္ လွမ္းကိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမ ခါးကို ကိုင္ကာ သာသာေလးပင္ ေဆာင့္ေပးသည္။ သူမကလည္း မျငင္းဆန္ပါ။ တအင္းအင္း ညည္းညဴရင္း ခံရွာသည္။ ညက တစ္ခါၿပီးထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ပိုၾကာေနသည္။ သူမလည္း ႏွစ္ခါသုံးခါ ၿပီး ၿပီးသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ သူမေနာက္က ဖက္ကာ အိပ္ေနလိုက္ ေတာ့သည္။
ေနာက္ေန႔ မနက္ မိုးလင္းေတာ့ သူမက အေစာႀကီး နိုးကာ အဝတ္အစားပင္ လဲၿပီးေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ ေပ်ာ့ဖတ္ေနသည့္ေကာင္ကို လာကိုင္လႈပ္ကာ ႏွိုးသည္။ ဒီေကာင္ကလည္း ေထာင္ခ်င္သလို ျဖစ္လာေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ နိုးေတာ့.. “ေမာင္.. ထေတာ့.. မနက္ ဆယ္နာရီထိုးေနၿပီ… အယ္.. အယ္.. ၾကည့္စမ္း… လူဆိုးေလး..” ဟိုေကာင္က သူမလက္ခ်က္ႏွင့္ ေထာင္ေနသည္။ “မ.. မရေတာ့ဘူး… ကိုယ့္ျပႆနာ ကိုယ္ရွင္း..” “အာ.. ေမာင္ရယ္.. အဝတ္ေတြ လဲၿပီးမွ.. ” “အဝတ္လဲၿပီးလဲ… မရဘူး” “ေက်ကုန္မယ္ ေမာင္ရဲ့” “မေက်ေအာင္ လုပ္မယ္” “မေက်ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲလို႔” “မ.. ဟိုဘက္လွည့္ၿပီး ကုန္းေပးေလ” “အာ.. ေမာင္ကလည္းကြာ.. အဲလိုႀကီးက” “လုပ္ပါ မ ရဲ့.. ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး” သူမ အထဲက ဝတ္ထားေသာ ပင္တီကို ခၽြတ္ကာ ေျခရင္းတြင္ တင္လိုက္ၿပီး ကုတင္ေပၚသို႔ တက္ကာ ေလးဘက္ေထာက္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမေနာက္က အဝတ္မပါ ကိုယ္ဗလာျဖင့္ ေနရာယူလိုက္ကာ သူမ ဝတ္ထားသည့္ စကတ္ကေလးကို ေရွ႕သို႔ လွန္တင္လိုက္ၿပီး တင္ပါးထြားထြားႀကီးႏွစ္ခုကို စုံကိုင္ရင္း တစ္ေၾကာင္း ဆြဲလိုက္သည္။ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ၿပိဳင္တူနီးပါးပင္ ၿပီးသြားသည္။ သူမ အဖုတ္ကို တစ္သၽွဴးျဖင့္ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးလိုက္သည္။ “မ.. ေကာင္းလား” “အင္း.. ေကာင္းတယ္.. အခုက ပိုထိတယ္” “ႀကိဳက္တယ္ေပါ့” “အင္း.. ” “ႀကိဳက္ရင္ အဲဒီအတိုင္း လုပ္ေပးရမလား” “ေမာင့္သေဘာပါ.. ညကတုန္းက အတိုင္းလည္း ႀကိဳက္တာပဲ… အခုလည္း ေကာင္းတာပဲ… ကဲ ေကာင္းရင္လည္း ေရခ်ိဳး အဝတ္အစားလဲေတာ့.. ထမင္း သြားစားမယ္” ထမင္းစားသြားၿပီး ျပန္တက္၊ ႏွစ္ေယာက္သား စိတ္ပါသည္ႏွင့္ တစ္ေၾကာင္း ထ ဆြဲလိုက္၊ ျပန္ အိပ္လိုက္ႏွင့္ တစ္ရက္လုံးလုံး အျပင္ပင္ မထြက္ဘဲ အခန္းထဲမွာ ေသာင္းက်န္းခ်င္တိုင္း ေသာင္းက်န္းေနၾကသည္။ အိပ္ရာေပၚမွာ လုပ္ရတာ အားမရေသးသျဖင့္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ေရပူ စပ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္အတူေရခ်ိဳးရင္း ေဘစင္ေပၚ လက္ေထာက္ခိုင္းကာ ေနာက္မွ ၾကဳံးသည္က ရွိေသးသည္။ ပိုေဇရွင္လည္း အေတာ္ကို စုံလင္သြားသည္။ ေနာက္ေန႔ ေန႔လယ္ေလာက္က်မွ အခန္းအပ္ကာ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီလိုႏွင့္ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေပးအယူတည့္လာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့သည္။ ႐ုံးပိတ္ရက္ အေၾကာင္းျပကာ ေတာင္ႀကီးသို႔ တက္လိုက္၊ တစ္ခါတရံလည္း ၿမိဳ႕အျပင္ ေတာစပ္မွာ သြားခ်ိန္းေတြ႕လိုက္ႏွင့္ အဆင္ေျပေနသည္။ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ၾကား အားသာခ်က္ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ပါေနလၽွင္ သူမက မညည္းမျငဴ ျဖည့္ဆည္းေပးသလို သူမ စိတ္ပါေနလ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္က မညည္းမညဴ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ အသုံးအႏႈန္း အေျပာအဆိုမ်ားပင္ ပြင့္လင္း ရဲတင္းလာခဲ့သည္။
“ေမာင္.. ညေနေတြ႕မယ္ေနာ္.. မ ကို လာ လိုးေပးအုံး” “မ..ေရ.. အားရင္ ထြက္ခဲ့ေနာ္.. လိုးခ်င္ေနၿပီ” “အင္း.. လာခဲ့မယ္ေမာင္.. မလည္း အလိုးခံခ်င္ေနတာ အေတာ္ပဲ”” စသည္စသည္ျဖင့္။ တစ္ရက္ေတာ့ သူမ ဖုန္းဆက္သည္။ ငိုထားသည့္ပုံပင္။ သူမ မိဘေတြက သူတို႔ ႏွစ္သက္သည့္ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေပးစားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသာ ခ်စ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္သမၽွ အကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အခုေတာ့ သူမ မိဘမ်ား စကားကို မလြန္ဆန္နိုင္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခိုးရာလိုက္ေျပးဖို႔ စဥ္းစားေသာ္လည္း ႏွလုံး ေရာဂါရွိသည့္ မိခင္ကို ညႇာတာေနရသျဖင့္ မလုပ္ရက္ေၾကာင္း၊ သူမကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔နဲ႔ ေမ့လိုက္ ဖို႔၊ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ နီးစပ္ေစလိုေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူမႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ရၿပီး တစ္လေလာက္ စိတ္ေလသြားေသးသည္။ အရက္ေတာ့ မေသာက္ျဖစ္။ အရက္မေသာက္ျဖစ္ေတာ့ ပိုဆိုးသည္။ ဟိုစိတ္ ဒီစိတ္ထက္ သူမကို လြမ္းသည့္ စိတ္က ပိုမ်ားမည္ထင့္။
Categorized as အင်းဆက် Tagged ဖြည့်ဆည်းပေးသူ